U.S. Mission Burma, Author at U.S. Embassy in Burma
Home	Home | News & Events | Archives for U.S. Mission Burma
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် ဒီဇင်ဘာ ၂၈ရက်၊ ၂၀၂၁ ကယားပြည်နယ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း တိုက်ခိုက်မှုများအပေါ် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်တိုနီ ဂျေ ဘလင်ကန်၏ ထုတ်ပြန်ချက် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်က ကယားပြည်နယ်တွင် ကျူးလွန်ခဲ့သည့် မြန်မာစစ်တပ်၏ တိုက်ခိုက်မှုများအပေါ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချပါသည်။ အနည်းဆုံး လူ၃၅ဦးခန့် သေဆုံးခဲ့ရသည့် အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးငယ်များအပါအဝင် နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Save the Children အဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ယခုလတ်တလော ကယားပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးနီးပါးတွင် စစ်အာဏာရှင်၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည့်လုပ်ရပ်အပေါ် မိမိတို့ စိုးရိမ်မိပါသည်။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနှင့် လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးအပ်နေသူများကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းကို လက်ခံနိုင်စရာ မရှိပါ။ မြန်မာပြည်သူများအပေါ် စစ်တပ်၏ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်သည့်လုပ်ရပ်များသည် စစ်တပ်တာဝန်ရှိသူများကို တာဝန်ယူမှု၊ ...	Read More»
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း အရပ်သားပြည်သူများ တိုက်ခိုက်ခံရမှုနှင့်စပ်လျဥ်း၍  ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက် စစ်အာဏာရှင်​​၏ နိုင်ငံတစ်ဝန်း ကျူးလွန်ထားသော ပြင်းထန်ဆိုးရွားသည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို မိမိတို့ ရှုတ်ချကြောင်း ထပ်မံအသိပေးပြောကြားလိုသည်။ မကြာသေးမီက ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများကို လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်း အပါအဝင် အရပ်သားပြည်သူများအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများသည် နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်နေခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းလုပ်ရပ်ကို ရပ်တန့်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ထောင်နှင့်ချီသောပြည်သူများ အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပြီး ယခုအခါ ၄င်းတို့အတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများ အရေးပေါ် လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ စစ်အာဏာရှင်အနေဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်နှင့် နိုင်ငံတလွှားက အဆင်အခြင်မဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုများ ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်နှင့် အရပ်သားပြည်သူအားလုံးကို နိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့်အညီ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာထားရှိရန် မိမိတို့ တောင်းဆိုသည်။ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ အကူအညီလိုအပ်နေသည့် ပြည်သူအားလုံး လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အထောက်အပံ့ ...	Read More»
ယနေ့နံနက် ရန်ကုန်မြို့အတွင်း လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက သေနတ်နှင့်ပစ်၊ ကားနှင့်တိုက်၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသူများစွာ သေဆုံးရသည့် သတင်းများကြောင့် မိမိတို့ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မိပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသည့် မြန်မာပြည်သူတို့၏ အခွင့်အရေးကို မိမိတို့ထောက်ခံအားပေးပါသည်။ မြန်မာစစ်တပ်က ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရက်စက်စွာအကြမ်းဖက်နေမှုများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အားလုံးပါဝင်သောဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်လည်ရောက်ရှိ‌ရေးအတွက် အရေးတကြီး လိုအပ်နေသည့်အကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြနေပါသည်။ လွတ်လပ်မှုနှင့် ဒီမိုကရေစီအတွက် လိုလားတောင်းတနေသော မြန်မာပြည်သူများနှင့်အတူ မိမိတို့အတူတကွရပ်တည်နေပြီး အကြမ်းဖက်မှုများအဆုံးသတ်ရန်၊ မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူများကိုပြန်လွှတ်ပေးရန်နှင့် ပြည်သူတို့၏ဆန္ဒကို လေးစားတန်ဖိုးထားရန် စစ်အာဏာရှင်ကို မိမိတို့တောင်းဆိုပါသည်။	Read More»
နိုဝင်ဘာ ၈ ရက် မြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ တစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်တိုနီ ဂျေ ဘလင်ကင် နိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၂၁ မြန်မာနိုင်ငံသည် အစိုးရသစ်တစ်ရပ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရန်အတွက် လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်က ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲသည် ရတက်ပွားစရာအချို့ရှိခဲ့သော်လည်း အများကယုံကြည်လက်ခံပြီး ဒီမိုကရေစီလိုလားသည့် မြန်မာပြည်သူလူထုသန္နိဋ္ဌာန်ကို ထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်ဟု လွတ်လပ်၍အမှီအခိုကင်းသော လေ့လာစောင့်ကြည့်သူများက အစီရင်ခံခဲ့ကြသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် စစ်တပ်၏အာဏာသိမ်းမှုက ဒီမိုကရေစီအတွက်ထားရှိသည့် မြန်မာပြည်သူလူထု၏ ကတိကဝတ်ကိုဖယ်ရှားရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး အများလက်ခံယုံကြည်သည့် အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်၏ နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုများက လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အခြေခံလွတ်လပ်မှုများကို ပိုမိုထိပါးနှောက်ယှက်နေခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်သူလူထုက ပြတ်သားစွာတောင်းဆိုခဲ့ပြီး ယခုတိုင်တောင်းဆိုလျက်ရှိသည့် စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီစနစ်တစ်ရပ်ဆီသို့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာတိုးတက်မှုများကို နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်စေခဲ့သည်။ ဤ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိရေး၊ ...	Read More»
ချင်းပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုများကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကရှုတ်ချ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် နက်ပရိုက်စ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် အောက်တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၂၁ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းများနှင့် အိမ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းအပါအဝင် ချင်းပြည်နယ်အတွင်း မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကျူးလွန်သော ကမ်းကုန်အောင်ရိုင်းစိုင်းသည့်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု သတင်းများကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အလွန်းအမင်းစိုးရိမ်မိပါသည်။ ဤသို့သော ပြည်သူလူထု၊ ပြည်သူလူထု၏အိုးအိမ်များ၊ ဝတ်ပြုဆုတောင်းရာနေရာများကို ရက်ရက်စက်စက်လုပ်ပြသည့်လုပ်ရပ်ဖြင့် မြန်မာပြည်သူလူထု၏ အသက်များနှင့် လူမှုဘဝဖူလုံရေးကို လုံးဝဂရုမစိုက်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်သည့် စစ်အာဏာရှင်၏လုပ်ရပ်ကို မိမိတို့ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချပါသည်။ ဤသို့သောစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်တိုက်ခိုက်မှုများက နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့် မြန်မာစစ်တပ်ကို တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရေးအတွက် စစ်တပ်ကိုလက်နက်များလွှဲပြောင်းပေးနေမှုပိတ်ပင်တားဆီခြင်းအပါအဝင် ကမ်းကုန်အောင်ရိုင်းစိုင်းသည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအတွက် အမြန်ဆုံးအရေးယူရန်လိုအပ်နေသည့်ကို မီးမောင်းထိုးပြနေပါသည်။ ချင်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအပါအဝင် နိုင်ငံအတွင်းနေရာအများအပြား၌ မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ စစ်ဆင်ရေးအရှိန်မြှင့်တင်နေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်း မိမိတို့များစွာစိုးရိမ်မိပါသည်။ အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်၊ မတရားဖမ်းဆီးထားသူများကို ပြန်လွှတ်ပေးရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံကိုအားလုံးပါဝင်နိုင်သော ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိရေး ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် စစ်အာဏာရှင်ကို ...	Read More»
သမ္မတဘိုင်ဒင်၏ အမေရိကန်-အာဆီယံ ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲတက်ရောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ထုတ်ပြန်ချက် အမေရိကန်-အာဆီယံ နှစ်စဉ် ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲကြီးကို အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ အာဆီယံအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့်အတူ သမ္မတ ဂျိုးဇက် အာ ဘိုင်ဒင် ဂျူနီယာ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ သမ္မတကြီးက အာဆီယံနှင့်မိမိတို့၏ မိတ်ဖက်လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုအားကောင်းစေရေးအတွက် ထားရှိသောအမေရိကန်၏ကတိကဝတ်နှင့် အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း အာဆီယံ၏ ဗဟိုအချက်အချာကျမှုကို ထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီး အင်ဒိုပစိဖိတ်ဆိုင်ရာ အာဆီယံ၏အမြင်ကိုလည်းချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ဒေသတွင်းအပေါ်ထားရှိသည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ကာလရှည်ကြာကတိကဝတ်ကို သမ္မတကြီးက အထူးအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး မိမိတို့အချိန်ကာလအတွင်း ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသည့်စိန်ခေါ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရေးအတွက် နိုင်ငံတကာဥပဒေများကိုအခြေခံသော ထုတ်ပြန်ညွှန်ကြားချက်များကို ခြိမ်းခြောက်မှုများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရာတွင် မိမိတို့၏မဟာမိတ်များနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်ခြင်းပါဝင်သည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိပြုခဲ့ပါသည်။ ဒေသတွင်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ ဒဏ်မှ ပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်ရေး၊ ရာသီဥတုဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းရေး၊ စိးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုမြှင့်တင်ရေးနှင့် လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့ကို အားပေးကူညီနိုင်ရန်အတွက် အမေရိကန်-အာဆီယံ မဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး ...	Read More»
အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး ဂျိုက်ဆူလီဗန်နှင့် မြန်မာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တို့၏ တွေ့ဆုံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် အီမလီဟွန်း၏ထုတ်ပြန်ချက် အောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၂၁ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး ဂျိုက်ဆူလီဗန်သည် မြန်မာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသည့် ဒူးဝါးလရှီလ၊ ဒေါ်ဇင်မာအောင်တို့နှင့် ယနေ့အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဆက်လက်ထောက်ခံအားပေးနေမှုကို မစ္စတာဆူလီဗန်က အထူးအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးအတွက် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ မြန်မာစစ်တပ်၏ရက်ရက်စက်စက် အကြမ်းဖက်နေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မိကြောင်း မစ္စတာဆူလီဗန်ကပြောကြားခဲ့ပြီး အာဏာသိမ်းမှုအတွက် တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရေးအတွက်လည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည့်အကြောင်း မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မကြာသေးမီက ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွသူ ကိုဂျင်မီအဖမ်းခံရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မိကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပြီး ၎င်းလွှတ်မြောက်ရေးနှင့် မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံး လွှတ်မြောက်ရေးအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဆက်လက်ဦးဆောင်လှုပ်ရှားသွားမည့်အကြောင်းကိုလည်း မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဒေသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာ ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကြောင်းကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး မြန်မာစစ်အာဏာရှင်အနေဖြင့် ၎င်းတာဝန်ရှိသည့် သဘောတူညီချက်ငါးရပ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရေး အာဆီယံ ...	Read More»
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအတိုင်ပင်ခံ ဒဲရစ်ချောလက် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံ
အောက်ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာအတွက် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် နက်ပရိုက်စ်ကို ကိုးကားနိုင်ပါသည် – အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အတိုင်ပင်ခံ ဒဲရစ်ချောလက် ဟာ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ ဒီကနေ့ နယူးယောက်မှာတွေ့ဆုံခဲ့သလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမျိူးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုတွေ့ဆုံစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု အမြန်ဆုံးပြန်လည်အသက်ဝင်ရေးက အရေးကြီးတဲ့အကြောင်း အလေးထားဆွေးနွေးခဲ့ကြသလို တိုင်းရင်းသား နဲ့ ဘာသာရေးအုပ်စုတွေအပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ တန်းတူညီမျှရေးကိုလေးစားတန်ဖိုးထားရေးတွေလ‌ည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရာမှာ အကူအညီပေးဖို့အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပိုမိုအားကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ရေးဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ စူးစိုက်ဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက် အသိအမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းကိုလည်း အတိုင်ပင်ခံက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ အတိုင်ပင်ခံက မြန်မာနိုင်ငံ ...	Read More»
By U.S. Mission Burma | 24 စက်တင်ဘာ, 2021 | Categories: Exclude All, Uncategorized
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များအတွက် နောက်ထပ် ဒေါ်လာ သန်း ၁၈၀ နီးပါး အကူအညီပေးမည့်အကြောင်း သံအမတ်ကြီး လင်ဒါ သောမတ်စ်-“ရင်းဖီးလ်ဒ၏ ကြေညာချက်
သံအမတ်ကြီး လင်ဒါ သောမတ်စ်ဂရင်းဖီးလ်ဒ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီး နယူးယောက်၊ နယူးယောက် စက်တင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၂၁ (သံအမတ်ကြီးပြောကြားခဲ့သည့်အတိုင်း) အခုလိုအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားကို ကျင်းပပေးတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရနဲ့ ပူးတွဲကျင်းပပေးတဲ့အခြားသောနိုင်ငံတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ဆယ်စုနှစ်များကြာအောင် ရက်စက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေခဲ့ရပါတယ်။ နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းမှု၊ အဓ္ဓမပြုကျင့်မှု၊ မီးရှို့ခံရမှုနဲ့သတ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေခဲ့ကြရတာပါ။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခံရမှုတွေလည်းကြုံခဲ့ရပါတယ်။ အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစလို့ စိတ်နှလုံးကြေကွဲဖွယ်ရာ လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေဟာ တစ်နေ့တစ်ခြားပိုမိုဆိုးရွားလာနေခဲ့တာပါ။ ရိုဟင်ဂျာ ကိုးသိန်းနီးပါးဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွင်းမှာ ခိုလှုံနေခဲ့ကြရပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ဘဝတွေကို လျစ်လျူရှုထားလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် လူသားချင်းစာနာမှုအကျပ်အတည်းနဲ့ကြုံတွေနေကြရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက ရိုဟင်ဂျာတွေ၊ နိုင်ငံပြင်ပက ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွင်းက ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ဒုက္ခခံစားနေကြရတဲ့ အိမ်ရှင်အသိုက်အဝန်းတွေအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက နောက်ထပ် ဒေါ်လာ သန်း ၁၈၀ နီးပါး အကူအညီပေးမယ့်အကြောင်း ဒီနေ့ ဝမ်းမြောက်စွာကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒီရန်ပုံငွေအနက် ဒေါ်လာ ၁၅၈ ...	Read More»
By U.S. Mission Burma | 23 စက်တင်ဘာ, 2021 | Categories: Exclude All, Uncategorized
အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး သောမတ်စ် အယ်လ်ဗိုက်ဒါ ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ကပ်ရောဂါကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသော မြန်မာပြည်သူများအတွက် ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်း ဖြစ်ရသည့်အကြောင်း အမေရိကန်သံရုံးကိုယ်စား ကျွန်တော်ရိုးသားစွာပြောကြားလိုပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှု၏လတ်တလောအရှိန်အဟုန်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့သံရုံးမှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအပါအဝင် ယခင်ကတည်းကထိခိုက်ခံစားနေခဲ့ကြရသော မိသားစုဝင်များနှင့်လူ့အသိုက်အဝန်းများအပေါ် ရက်ရက်စက်စက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ရပါသည်။ မြန်မာပြည်သူလူထုနှင့် ၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေး အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အကူအညီပေးနေကြသူများအနေဖြင့် ဆက်လက်ရှင်သန်နေထိုင်၍ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းတစ်ရပ်ပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေပြီး ယခုအခါပိုမိုဆိုးရွားလာနေသော ကပ်ရောဂါကိုရင်ဆိုင်နေကြရသည့် မြန်မာပြည်သူလူထုကို အားပေးကူညီရန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက စွဲစွဲမြဲမြဲကတိကဝတ်ပြုထားပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ကူးစက်ရောဂါ စတင်ပြန့်ပွားချိန်ကစ၍ ကျွန်တော်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ နှင့်ဆက်နွှယ်သော အကူအညီများကို ဒေါ်လာသန်း ၂၀ ကျော်ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ သန်းနှင့်ချီသောပြည်သူများ ရောဂါကူးစက်ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်၍ ၎င်းတို့လိုအပ်နေသောအညီများရရှိစေနိုင်ခဲ့ပါသည်။ မိမိတို့အနေဖြင့် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများက ဆောင်ရွက်နေသော ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရသူများကို အကူအညီပေးနေသည့်အဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် အစိုးရမဟုတ်သောအခြေခံကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း ...	Read More»
မြန်မာပြည်သူများအတွက် လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီ ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ကျော်ပေးအပ်ကြောင်းနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ အကူအညီဒေါ်လာ ၅ သန်းပေးအပ်ကြောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြေညာ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် နက်ပရိုက်စ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် သြဂုတ် ၁၀ ရက်၊ ၂၀၂၁ အကြမ်းဖက်နှိပ်ကွပ်မှုများကြောင့်နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူများအပါအဝင် မြန်မာပြည်သူများအတွက် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်အကူအညီ ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ကျော် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ပေးအပ်သည့်အကြောင်းကို ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီး သောမတ်စ်-လင်ဒါ ဂရင်းဖီးလ် က ထိုင်းနိုင်ငံသို့ယနေ့သွားရောက်သည့် တရားဝင်ခရီးစဉ်အတွင်းကြေညာခဲ့ပါသည်။ ဤအကူအညီများဖြင့် နိုင်ငံတကာနှင့်အစိုးရမဟုတ်သော မိမိတို့၏မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ပြေးလာရသူများ သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံတလွှားမှ ၎င်းတို့၏နေအိမ်များကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာရသူများအပါအဝင် မြန်မာပြည်သူများအတွက် အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီ၊ အသက်ကယ်တင်စောင့်ရှောက်ရေး၊ မရှိမဖြစ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ရေ၊ မိလ္လာနှင့် တစ်ကိုယ်ရေးသန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုအကူအညီများကို ပေးအပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအကူအညီအပြင် ကိုဗစ်-၁၉ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ...	Read More»
မြန်မာ စစ်တပ်နှင့် ဆက်နွှယ်သည့် အရာရှိကြီးများနှင့်မိသားစုဝင်များအား ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခြင်း အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၁ ဝါရှင်တန် – မြန်မာစစ်အာဏာရှင်နှင့်ဆက်နွှယ်သော လူပုဂ္ဂိုလ် ၂၂ ဦးကို အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံရပ်ခြားပိုင်ဆိုင်မှုများထိန်းချုပ်ရေးဌာန (အိုအက်ဖ်အေစီ) က ယနေ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်သည်။ ယနေ့ အရေးယူလိုက်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များတွင် တိုင်းပြည်တွင်း ဒီမိုကရေစီလိုလားသော လှုပ်ရှားမှုများကို ဆက်လက်ဖိနှိပ်နေကာ ကလေးများ၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများအပါအဝင် မြန်မာပြည်သူလူထုအပေါ် သေစေနိုင်သော အင်အားအသုံးပြုမှုများ ဆက်လက် ပြုလုပ်နေသည့် မြန်မာစစ်တပ်၏ အဓိက အဖွဲ့ဝင် ခုနစ်ဦး ပါဝင်သည်။ အခြား ၁၅ ဦးမှာ ၎င်းတို့၏ ငွေကြေး ကွန်ရက်များက စစ်တပ် အရာရှိများ၏ မတော်မတရား ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရရှိစေခဲ့သဖြင့် ယခင်က အရေးယူခဲ့သော အကြီးတန်း ...	Read More»
မကြာသေးမီ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆက်လက် တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ကန့်သတ်စာရင်းတွင် နောက်ထပ် အဖွဲ့အစည်းလေးခု ဖြည့်စွက်ကာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက မြန်မာ စစ်တပ်အပေါ် ကန့်သတ်မှု မြှင့်တင် အမေရိကန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၁ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် လုံခြုံရေးဗျူရို (BIS) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအား တုံ့ပြန်သည့် နောက်ထပ်အရေးယူမှုအဖြစ် အဖွဲ့အစည်း လေးခုအား ကန့်သတ်စာရင်းအတွင်း ထည့်သွင်းလိုက်သည် — ယင်းတို့မှာ မြန်မာစစ်တပ်ကို အထောက်အကူပြုသည့် ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများပေးသည့် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သော King Royal Technologies Co., Ltd.၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လတွင် ကန့်သတ်စာရင်းထဲ ထည့်ပြီးဖြစ်သည့် မြန်မာစီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက် (MEHL) နှင့် ဝင်ငွေခွဲဝေ ...	Read More»
မြန်မာစစ်အာဏာရှင်အပေါ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ထပ်တိုးအရေးယူခြင်း
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အန်တိုနီ ဂျေ ဘလင်ကင်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၁ မြန်မာစစ်အာဏာရှင်၏ ရက်ရက်စက်စက် အကြမ်းဖက်ကျူးလွန်နေမှုကိုတုံ့ပြန်ကာ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့်ဆက်နွှယ်နေမှုများကိုဆက်လက်ဒဏ်ခတ်သည့်အနေဖြင့် “မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ခြင်း” သမ္မတအမိန့်အမှတ် ၁၄၀၁၄ အရ စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့်ဆက်နွှယ်သော လူပုဂ္ဂိုလ် ၂၂ ဦးကို အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံရပ်ခြားပိုင်ဆိုင်မှုများထိန်းချုပ်ရေးဌာနက ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်သည်။ ဤအရေးယူမှုများတွင် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဝင် နောက်ထပ်သုံးဦး၊ စစ်တပ်ကခန့်အပ်ထားသော အစိုးရအဖွဲ့ဝင် လေးဦး တို့ပြင် ယခင်က ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသော စစ်အရာရှိများ၏ အရွယ်ရောက်ပြီး သား၊ သမီး သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်ဖက် ၁၅ ဦး တို့လည်းပါဝင်သည်။ ယင်းလူပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာ စစ်တပ်အရာရှိများ၏ တရားမဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် ဘဏ္ဍာရေးကွန်ရက်များဖြင့် အကျိုးပြုနေသူများဖြစ်ကြသည်။ ယင်းအပြင် အမေရိကန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း ဝမ်ပေါင်သတ္တုတူးဖော်ရေးလီမိတက်၊ ၎င်းလီမိတက်၏လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီနှစ်ခုနှင့် King Royal Technologies ကုမ္ပဏီတို့ကိုလည်း ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုစာရင်းအတွင်း ...	Read More»
အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက် မြန်မာစစ်တပ်နှင့်ဆက်နွှယ်သည့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် မိသားစုဝင်များအား ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုပြုလုပ်ခြင်း မေ ၁၇၊ ၂၀၂၁ ဝါရှင်တန် – အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံရပ်ခြားပိုင်ဆိုင်မှုများထိန်းချုပ်ရေးဌာန (အိုအက်ဖ်အေစီ) သည် မြန်မာစစ်အာဏာရှင်နှင့်ဆက်နွှယ်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ် ၁၆ ဦးနှင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအား ယနေ့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်သည်။ ယနေ့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအနက် ၁၃ ဦးသည် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကို ကြမ်းတမ်းစွာဖိနှိပ်ခဲ့သည့် မြန်မာစစ်အာဏာရှင်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပြီး ကလေးသူငယ်များအား သတ်ဖြတ်ခြင်းအပါအဝင် မြန်မာပြည်သူများအပေါ် လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည့် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် သေစေနိုင်သည်အထိ တိုက်ခိုက်မှုများအတွက် တာဝန်ရှိသူများဖြစ်သည်။ အခြားလူပုဂ္ဂိုလ် သုံးဦးမှာ ယခင်က သတ်မှတ်အရေးယူထားသည့် မြန်မာစစ်တပ်အဆင့်မြင့်အရာရှိများ၏ အရွယ်ရောက်ပြီးသော သားသမီးများ ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းမှာ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ (နကစ) ဖြစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ...	Read More»
မြန်မာစစ်အာဏာရှင်နှင့်ဆက်နွှယ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ် ၁၆ ဦးတို့အား ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူရန်သတ်မှတ်ခြင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်တိုနီဘလင်ကင် ၏ကြေညာချက် မေ ၁၇၊ ၂၀၂၁ စစ်အာဏာရှင်သည် လတ်တလော ချင်းပြည်နယ် မင်းတပ်မြို့၌ အပါအဝင် မြန်မာပြည်သူလူထုအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုနှင့်နှိပ်ကွပ်မှုများဆက်လက်ကျူးလွန်နေပြီး နိုင်ငံတော်ကို ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးအတွက်မည်သို့မျှဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် မြန်မာစစ်အာဏာရှင်၏လုပ်ရပ်များကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် မြန်မာစစ်အာဏာရှင်ကို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်များချမှတ်ကြောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ယနေ့ကြေညာလိုက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအား သမ္မတအမိန့်အမှတ် ၁၄၀၁၄ အရ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူရန် မိမိတို့သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းအပြင် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဝင် လေးဦး၊ စစ်တပ်ကခန့်အပ်ထားသော အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ကိုးဦးနှင့် ယခင်က ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသော စစ်အရာရှိများ၏ အရွယ်ရောက်ပြီး သား၊ သမီး သုံးဦးတို့ကိုလည်း သမ္မတအမိန့်အမှတ် ၁၄၀၁၄ အရ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်သည်။ မိမိတို့သည် ...	Read More»
ကျောင်းသားဗီဇာ ရက်ချိန်းပေးမည့်အစီအစဉ်ကို အမေရိကန်သံရုံးက ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက် မေ ၁၁၊ ၂၀၂၁ ရန်ကုန်။ ။ အမေရိကန်သံရုံး ကောင်စစ်ဌာနသည် ယခုလအတွင်း မကြာမီကာလ၌ ကျောင်းသားဗီဇာ လျှောက်လွှာများအတွက် လူတွေ့အင်တာဗျူးအစီအစဉ်များ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပညာဆက်လက်ဆည်းပူးသင်ယူနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းရရှိသင့်ပါသည်။ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာ နှီးနှောဖလှယ်ရေး အစီအစဉ်များ စီစဉ်ပံ့ပိုးမှုအပါအဝင် ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒလိုလားမှုများဖြစ်သော တောက်ပသည့် အနာဂတ်တစ်ခုအတွက် အားပေးပံ့ပိုးသွားရန် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံရုံးက ရည်သန်ကတိပြုထားပါသည်။ ကျောင်းသားဗီဇာလျှောက်ထားရန်စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များနှင့် အခြားသတင်းအချက်အလက်အကြောင်းအရာများကို https://mm.usembassy.gov/visas/study-exchange/ တွင်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပညာသင်ယူနိုင်ရေးအတွက် စူးစမ်းလေ့လာရန်စိတ်ဝင်စားသည့်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတွင်ရှိသော အမေရိကန်ပညာရေး (မြန်မာနိုင်ငံရုံး) ၏ အကြံပေးများထံမှ ကြိုတင်ရက်ချိန်းယူ၍ ပညာရေးဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်များကို အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် အခမဲ့ ...	Read More»
ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် သံတမန်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ထုတ်ပြန်ချက် ယနေ့ကျရောက်သော ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့တွင် အွန်လိုင်းနှင့် ပြင်ပ၌ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို ထိန်းသိမ်းရာ၌ စာနယ်ဇင်းကဏ္ဍ၏ အရေးပါအရာရောက်မှုကို လေးစားဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်သည် ဒီမိုကရေစီ ကျင့်သုံးသော လူမှုအသိုက်အဝန်းများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး အကြွင်းမဲ့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးကာ မကွယ်ပျောက်စေသင့်သော တရားဝင်ဖြစ်မှု ရင်းမြစ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ စာနယ်ဇင်းသမားများအနေဖြင့် လက်တုံ့ပြန်ရန်ရှာခံရမည့်အန္တရာယ် သို့မဟုတ် ခြိမ်းခြောက်ခံရမည့်အန္တရာယ်ကို ကြောက်ရွံ့စိတ်ကင်းစွာဖြင့် လွတ်လပ်မှုရှိရှိ သတင်းတင်ပြခွင့် ရှိရပါမည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စာနယ်ဇင်းသမားများနှင့် မီဒီယာဝန်ထမ်းများသည် ဖိနှိပ်မှု၏ ဦးတည်ရာဖြစ်လာလင့်ကစား တိကျသေချာသော သတင်းအချက်အလက်များကို လက်လှမ်းမီခွင့် ရရှိအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသူများ၏ အားထုတ်မှုကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် စစ်အာဏာသိမ်းခြင်းမှအစပြု၍ စာနယ်ဇင်းသမားပေါင်း ၈၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံရပြီး ထက်ဝက်ကျော်ခန့်မှာ ယခုထက်တိုင် ထိန်းသိမ်းခံထားရသည်။ မီဒီယာကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်လွှင့်ရန်သော်လည်းကောင်း တင်ပြရန်သော်လည်းကောင်း ပိတ်ပင်ခံထားရပြီး ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်များကိုလည်း ဖျက်သိမ်း၍ ရုံးခန်းများကိုလည်း ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်။ မီဒီယာအစီအစဉ်အများစုသည် ရပ်ဆိုင်းရန် ဖိအားပေးခံရလျက်ရှိသည်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မည်သည့် လွတ်လပ်သော အဓိက ပုံနှိပ်မီဒီယာမျှ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေခြင်းမရှိဘဲ သတင်းလွှမ်းခြုံမှု၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်ရရှိမှုတို့ကို ထိန်းချုပ်ရန် အင်တာနက်များကို ဆက်လက်ပိတ်ထားဆဲဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ရပ်များသည် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကို ဖိနှိပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော လွတ်လပ်စွာ ထင်မြင်ယူဆခွင့်နှင့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်တို့ကို ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မီဒီယာဝန်ထမ်းများအားလုံးကို ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန်၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးလွတ်လပ်ခွင့် ပျိုးထောင်ရန်နှင့် အင်တာနက်ပိတ်ဆို့မှုများအားလုံးကို ရပ်ဆိုင်းရန် မိမိတို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။ ကောင်းမွန်သော စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် လူသားတို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အဓိကကျကျပါဝင်သည့် လွတ်လပ်၍ အမှီအခိုကင်းသော မီဒီယာကဏ္ဍကို မိမိတို့အနေဖြင့် ဆက်လက် အားပေးပံ့ပိုးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်သည် မီဒီယာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ အခွင့်အရေးသာမဟုတ်ဘဲ မိမိတို့အားလုံး၏ အခွင့်အရေးဖြစ်ပါသည်။ ဩစတေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒိန်းမတ်၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ ဖင်လန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ နယ်သာလန်၊ နယူးဇီလန်၊ နော်ဝေး၊ စပိန်၊ ဆွီဒင်၊ ဆွဇ်ဇာလန်၊ ယူကေနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာ သံတမန်အဖွဲ့အစည်းများ	Read More»
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်ခုအား ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခြင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်တိုနီဂျေဘလင်ကင် ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မြန်မာစစ်အာဏာရှင်သည်နိုင်ငံတော်၏ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရေးဟူသောမြန်မာပြည်သူလူထု၏ဆန္ဒကိုဆက်လက်လျစ်လျူရှုထားသည်။စစ်အာဏာရှင်သည်ပြည်သူလူထု၏ဆန္ဒကိုလက်ခံလိုက်လျောရမည့်အစား၎င်း၏အကြမ်းဖက်နှိပ်ကွပ်မှုလုပ်ရပ်ကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်စ၍ကလေးပေါင်းများစွာအပါအဝင်လူပေါင်း၆၅၀ကျော်ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။လူပေါင်း၃၂၀၀ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်သည့်စစ်အာရှင်အတွက်အကျိုးအမြတ်ဖြစ်စေသောနိုင်ငံတော်ပိုင်လုပ်ငန်းနှစ်ခုကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုစာရင်းအတွင်းထည့်သွင်းအရေးယူခြင်းအားဖြင့်မြန်မာစစ်အာဏာရှင်၏စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များကိုကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယနေ့ထပ်မံအရေးယူဆောင်ရွက်လိုက်သည်။မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းနှင့်မြန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းတို့ကိုမြန်မာအစိုးရ၏နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလက်အောက်ခံဌာန၊အေဂျင်စီသို့မဟုတ်အရေးပါသောယန္တရားဖြစ်နေသည့်အတွက်သမ္မတအမိန့်အမှတ်၁၄၀၁၄အရဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုစာရင်း၌ထည့်သွင်းအရေးယူခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိတို့၏ယနေ့အရေးယူမှုသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်စစ်တပ်၏တိကျသောဘဏ္ဍာငွေလမ်းကြောင်းများကိုဆက်လက်ပစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့၍စစ်အာဏာသိမ်းမှု၊ယင်းအာဏာသိမ်းမှုဆက်စပ်နေသောအကြမ်းဖက်မှုအတွက်တာဝန်ယူမှု၊တာဝန်ခံမှုရှိစေရေးတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်မည်ဟူသောစစ်တပ်ကိုမိမိတို့ပေးလို့သည့်သတင်းစကားကိုထပ်မံအားဖြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ဤအာဏာသိမ်းမှုကိုဖယ်ရှားကန့်ကွက်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေသည့်မြန်မာပြည်သူလူထုကိုမိမိတို့ဆက်လက်အားပေးထောက်ခံသွားပါမည်။အကြမ်းဖက်မှုရပ်တန့်ရန်၊မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးရန်၊မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရန်စစ်အာဏာရှင်ကိုမိမိတို့တောင်းဆိုသည်။ ယနေ့အရေးယူမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ###	Read More»
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ပူးတွဲကျင်းပသော မြန်မာနိုင်ငံနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ အာရီယာ–ဖော်မြူလာ အစည်းအဝေး၌ သံအမတ်ကြီးလင်ဒါသောမတ်စ်ဂရင်းဖီးလ်၏ သဘောထားမှတ်ချက် သံအမတ်ကြီးလင်ဒါ‌သောမတ်စ်ဂရင်းဖီးလ် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ် နယူးယော့ခ် ဧပြီ ၉၊ ၂၀၂၁ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘာဘရာ။ မင်းသားဖီးလစ် ကွယ်လွန်မှုအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း ပြောကြားရင်း ကျွန်မတို့ရဲ့ အသံတွေကို ထည့်သွင်းဖော်ပြပြီးတော့ စတင်ကြရအောင်ပါ။ တော်ဝင်မိသားစုနဲ့ ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်းပြည်သူတွေအတွက် ကျွန်မတို့ ထပ်တူဝမ်းနည်းရပါတယ်။ ဒီနေ့ အစည်းအဝေးခေါ်တဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါရစေ။ ဒီနေ့ ပြောကြားပေးကြတဲ့ အဆွေတော်တို့ရဲ့ မှတ်ချက်နဲ့ အသေးစိတ် သဘောထား ရှင်းလင်းပြောကြားမှုအားလုံးအတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သူတို့တစ်တွေလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေကြောင့် စိတ်ထိခိုက်နေခဲ့ကြပါတယ်။ ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာ ဘာမှန်းတောင် မသိအောင် ငယ်ရွယ်လွန်းသေးတဲ့ ကလေးတွေ အပါအဝင် ပြည်သူတွေကို မြန်မာနိုင်ငံ ...	Read More»
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်သော မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ကြေညာချက် သံတမန်ကြေညာချက်၊ ဧပြီ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကို နှိပ်ကွပ်ရန် မြန်မာစစ်တပ်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့၏ ဆက်လက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ လွန်စွာစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်သည့်အကြောင်း အောက်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော မီဒီယာလွတ်လပ်မှုဆိုင်ရာညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ဝင်များကဖော်ပြအပ်ပါသည်။ မီဒီယာလွပ်လပ်ခွင့်သည် ဒီမိုကရက်တစ်လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတို့၏ အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးနှင့်အခြေခံလွတ်လပ်မှုများကိုအကာအကာအကွယ်ပေးရန်အတွက်လည်း မရှိမဖြစ်အရေးပါလှသည်။ သတင်းအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွင့်မှာ အဓိကအရေးပါသည်။ ဆန္ဒပြမှုများအပါအဝင် နိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပျက်နေမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းသမားများအနေဖြင့် ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိ၊ လက်တုန့်ပြန်ခံရခြင်းမရှိ၊ ခြိမ်းခြောက်ခံရခြင်းမရှိဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထုတ်ဖော်ရေးသားတင်ပြနိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မချိတ်ဆက်ထားဘဲဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပုံဖျက်သတင်း၊ သတင်းမှားများအား ပြန်လည်တန်ပြန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို အထောက်အကူပြုရန်နှင့် နိုင်ငံအတွင်းအကြောင်းအရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အဖြစ်မှန်အတိုင်း ပြည်သူလူထုကို တင်ပြပေးနိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေမှုများအပေါ် လွတ်လပ်၍ အမှီအခိုကင်းသော ရေးသားတင်ပြမှုသည် အရေးတကာ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်။ သတင်းသမားတို့၏အရေးပါသောအလုပ်၊ အထူးသဖြင့် ဝေးလံသောဒေသများအတွင်းလုပ်ဆောင်ရသည့်အလုပ်တို့ကို အထင်မကြီးဘဲနေ၍မရပါ။ ၂၀၂၁၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် စစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစ၍ မီဒီယာအလုပ်ဖြင့်အသက်မွေးကြသူများအပေါ် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်၎င်းတို့၏ရုံးများက ...	Read More»
ဧပြီ ၉၊ ၂၀၂၁ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်လ၊ ဖေဖော်၀ါရီလ (၉) ရက် နေ့ က မ မြသွဲ့ သွဲ့ ခိုင် သည် နေပြည်တော်တွင် ဆန္ဒပြမှု အတွင်း ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်တွင် အကာအကွယ်ယူနေစဉ် အပစ်ခံခဲ့ရသည်။ သူမ သည် (၁၉) နှစ်သာ ရှိသေးသည်။ ထိုစဉ် က စ ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရပ်သားများ ၆၀၀ ကျော် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ကြရ သည်—အများအပြား မှာ ခက်ခက်ခဲခဲ ရရှိထားသည့် ဒီမိုကရက်တစ် အခွင့်အရေးများ နှင့် လွတ်လပ်မှု များ အတွက် ဆန္ဒပြရင်း အသတ်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ကလေးငယ် များလည်း အသတ်ခံခဲ့ကြရသည်။ လွတ်လပ်မှု နှင့် ဒီမိုကရေစီ အတွက် ...	Read More»
ဧပြီ ၉၊ ၂၀၂၁ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်လ၊ ဖေဖော်၀ါရီလ (၉) ရက် နေ့ က မ မြသွဲ့ သွဲ့ ခိုင် သည် နေပြည်တော်တွင် ဆန္ဒပြမှု အတွင်း ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်တွင် အကာအကွယ်ယူနေစဉ် အပစ်ခံခဲ့ရသည်။ သူမ သည် (၁၉) နှစ်သာ ရှိသေးသည်။ ထိုစဉ် က စ ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရပ်သားများ ၆၀၀ ကျော် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ကြရ သည်—အများအပြား မှာ ခက်ခက်ခဲခဲ ရရှိထားသည့် ဒီမိုကရက်တစ် အခွင့်အရေးများ နှင့် လွတ်လပ်မှု များ အတွက် ဆန္ဒပြရင်း အသတ်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ကလေးငယ် များလည်း အသတ်ခံခဲ့ကြရသည်။ လွတ်လပ်မှု နှင့် ဒီမိုကရေစီ ...	Read More»
By U.S. Mission Burma | 14 ဧပြီ, 2021 | Categories: Alert
သတင်းသမားတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ အမေရိကန်နဲ့ မိတ်ဖက်တွေက မြန်မာစစ်တပ်ကိုတိုက်တွန်း လီဟတ်မန်း – ဧပြီ ၇၊ ၂၀၂၁ အမေရိကန်နဲ့ အခြားဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံတွေဟာ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံထားရတဲ့သတင်းထောက်တွေအပါအဝင် မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခံထားရသူအကုန်လုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ် အကြမ်းဖက်နေမှုတွေရပ်တန့်ဖို့အတွက် မြန်မာစစ်တပ်ကို တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ “မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမြင့်တက်လာနေတဲ့အကြမ်းဖက်နေမှုတွေနဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေကို သတ်ဖြတ်နေတာတွေ၊ သတင်းသမားတွေနဲ့ မီဒီယာလောကသားတွေအပါအဝင် လူတွေကို အတင်းအဓမ္မ ဖမ်းဆီး၊ အကြမ်းဖက်တာတွေကြောင့် မိမိတို့တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားမိပါတယ်” “မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူအားလုံးကို ချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့အတွက် မိမိတို့ အတူတကွတောင်းဆိုပါတယ်” လို့ ဧပြီ ၁ ရက်မှာ ပူးတွဲထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းသမားများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ကုလသမဂ္ဂမိတ်ဆွေများအဖွဲ့ရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် အာဏာသိမ်းယူပြီးချိန်ကစပြီး မြန်မာစစ်တပ်ဟာ ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ တခြားသောသူတွေကိုပါ နှိမ်နှင်းခဲ့ပြီး လူပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သလို သတင်းသမားတွေနဲ့ ...	Read More»
ထုတ်ပြန်ချက်သဝဏ်လွှာ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်တိုနီ ဂျေ ဘလင်ကင် ဧပြီ ၈၊ ၂၀၂၁ မြန်မာနှစ်သစ်ကူး သင်္ကြန်အခါသမယတွင် မြန်မာပြည်သူများကောင်းခြင်းမင်္ဂလာများနှင့်ပြည့်စုံပါစေကြောင်း၊ မြန်မာပြည်သူများအတွက်လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲအလေးထားပူပန်ရသည့်အကြောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုယ်စား မိမိပြောကြားလိုပါသည်။ သင်္ကြန်ဆိုသည်မှာ အဟောင်းတို့ကိုဆေးကြော၍ အသစ်တို့တဖန် ပြန်လည်စတင်မွေးဖွားသော အခါသမယဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်သူများအတွက် အဓွန့်ရှည်တည်တံ့သော ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာများနှင့် ငြိမ်းချမ်းမှုများ နှစ်သစ်တွင်ဆောင်ကြဉ်းပေးလာပါစေကြောင်း ယခုကဲ့သို့ အခက်အခဲကာလတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ရိုးသားစွာမျှော်လင့်ပါသည်။ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစ၍ မြန်မာပြည်သူတို့ တစိုက်မတ်မတ် ပြသလာနေခဲ့သော ရဲရင့်မှုတို့အတွက် မိမိတို့ချီးကျူးပါသည်။ မြန်မာပြည်သူများသည် စစ်အာဏာရှင်၏ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ဖွယ်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ဖိနှိပ်မှုတို့ကိုရင်ဆိုင်၍ ၎င်းတို့၏အသံကို ကမ္ဘာကကြားသိအောင်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ဤအခက်အခဲအကြပ်အတည်းကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းမှုအောင်မြင်ရေးတို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေကြသော မြန်မာပြည်သူများအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဆက်လက်၍ အခိုင်အမာထောက်ခံအားပေးနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့အခက်အခဲကာလတွင် မြန်မာပြည်သူအားလုံးအတွက် မိမိတို့၏နွေးထွေးသောမေတ္တာကို အလေးထားပို့သလိုက်ပါသည်။	Read More»
အာဏာသိမ်းမှုနှင့်ပြည်သူများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးဌာနက မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်ရွက်မှုဆိုင်းငံ့ မတ် ၂၉၊ ၂၀၂၁ ဝါရှင်တန် – ၂၀၁၃ ခုနှစ် ကုန်သွယ်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူစာချုပ်အရ ဆောင်ရွက်နေသော မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြား ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအားလုံး ချက်ချင်း ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ် ကက်သရင်းတိုင် က ယနေ့ ကြေညာလိုက်သည်။ ယခုရပ်ဆိုင်းမှုသည် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော အစိုးရ အာဏာပြန်လည်မရမချင်း သက်ရောက်နေမည် ဖြစ်သည်။ “မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ အစိုးရ ပြန်လည်ရရှိရေး မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ထောက်ခံအားပေးပါတယ်” ဟု သံအမတ် ကက်သရင်းတိုင် က ပြောကြားသည်။ “ပြည်သူတွေအပေါ် မြန်မာ့လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ ရက်ရက်စက်စက် အကြမ်းဖက်မှုကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ...	Read More»
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများကို ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခြင်း မတ် ၂၅၊ ၂၀၂၁ ဝါရှင်တန် – အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံရပ်ခြားပိုင်ဆိုင်မှုများထိန်းချုပ်ရေးဌာန (အိုအက်ဖ်အေစီ) ရုံးသည် စစ်တပ်မှ ချုပ်ကိုင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုဖြစ်သည့် မြန်မာစီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းတို့ကို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုစာရင်း၌ ယနေ့ ထည့်သွင်းအရေးယူလိုက်သည်။ မြန်မာစစ်တပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအတွင်း အထူးအခွင့်အရေးရှိသည့် နေရာကို ခံစားရရှိထားသည့် အဆိုပါ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီများကတဆင့် နိုင်ငံ့စီးပွားရေး၏ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းများကို ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဤကုမ္ပဏီများသည် ကုန်သွယ်ရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ အဖျော်ယမကာ၊ စီးကရက်နှင့် စားသုံးကုန်ပစ္စည်းများ အပါအဝင် စီးပွားရေး၏ အချို့သောလုပ်ငန်းကဏ္ဍများကို လွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားသည်။ ဤဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုများသည် အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့် အစိုးရအား ဖြုတ်ချမှုနှင့် မြန်မာပြည်သူလူထုအပေါ် ဆက်လက် နှိပ်ကွပ်နေမှုအတွက် တာဝန်ရှိသည့် ...	Read More»
အောက်ဖော်ပြပါကြေညာချက်ကို သြစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ဂျာမနီ၊ ဂရိစ်၊ အီတလီ၊ ဂျပန်၊ ဒိန်းမတ်၊ နယ်သာလန်၊ နယူးဇီလန်၊ ကိုရီယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့၏ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များက ပူးတွဲထုတ်ပြန်ပါသည်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များအနေဖြင့် မိမိတို့သည် မြန်မာတပ်မတော်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် သက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ လက်နက်မဲ့ ပြည်သူများအပေါ် သေစေလောက်သောအင်အားများ အသုံးပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်ရှုတ်ချပါသည်။ အရည်အချင်းပြည့်ဝသော တပ်မတော်တစ်ရပ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျင့်၀တ်စံနှုန်းများကို လိုက်နာပြီး ၎င်းတို့အလုပ်အကျွေးပြုရသည့် ပြည်သူလူထုအပေါ် အန္တရာယ်ပြုရန်မဟုတ်ဘဲ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမည့် တာဝန်ရှိသည်။ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များရပ်တန့်ရန်နှင့် အဆိုပါလုပ်ရပ်များကြောင့် ဆုံးရှုံးသွားရသော မြန်မာပြည်သူလူထု၏ လေးစားမှုနှင့် ယုံကြည်လက်ခံနိုင်မှု ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ရန် မြန်မာ့တပ်မတော်ကို မိမိတို့တိုက်တွန်းပါသည်။	Read More»
သံအမတ်ကြီးသောမတ်စ်ဗိုက်ဒါ၏ကြေညာချက် မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၁ မြန်မာ့တပ်မတော်နေ့တွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမည်ဟု ကတိသစ္စာပြုထားသည့် ကလေးများအပါအဝင်လက်နက်မဲ့ပြည်သူများကို နိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ သတ်ဖြတ်နေပါသည်။ ဤသွေးမြေကျမှုမှာ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းလှသည်။ ဤလုပ်ရပ်များသည် အရည်အချင်းပြည့်ဝသောတပ်မတော်တစ်ရပ် သို့မဟုတ် ရဲတပ်ဖွဲ့၏လုပ်ရပ်များမဟုတ်ပါ။ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် မနေထိုင်လိုကြောင်း မြန်မာပြည်သူလူထုက ရှင်းရှင်းလင်းစွာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားပြီးဖြစ်သည်။ အကြမ်းဖက်နေမှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်နှင့် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသောအစိုးရကို အာဏာပြန်ပေးရန် မိမိတို့တောင်းဆိုလိုက်သည်။	Read More»
စစ်အာဏာရှင်နှင့်ဆက်နွှယ်သော မြန်မာအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခြင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အန်တိုနီ ဂျေ ဘလင်ကင်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မတ် ၂၅၊ ၂၀၂၁ မြန်မာစစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်ကစတင်၍ ၎င်းတို့၏ပြည်သူလူထုအပေါ်ရည်ရွယ်ကာ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ဖွယ်လုပ်ရပ်များကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်လာနေခဲ့သည်။ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုကိုတင်းခံနေပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေသူများအား အကြမ်းဖက်ဆက်လက်နှိပ်ကွပ်နေသည်ကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသည် စစ်အာဏာရှင်များအပေါ်ယနေ့အထိ သိသာထင်ရှားသော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ အရေးယူများ ပြုလုပ်လာနေခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် စစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်များနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွှယ်နေသော အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုဖြစ်သည့် မြန်မာစီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက် (MEHL) နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း (MEC) တို့ကို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့သည့်စာရင်းအတွင်း ထည့်သွင်း၍ထပ်မံအရေးယူလိုက်သည်။ မြန်မာစီးပွားရေးဦးပိုင် လီမိတက် နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စစ်တပ်ပိုင်အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီများဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့၏အစုရှယ်ယာအားလုံးသည် လက်ရှိတပ်မတော်အရာရှိများနှင့် ယခင်တပ်မတော် အရာရှိဟောင်းများ၊ တပ်မတော်တပ်ရင်းကြီးများနှင့် ဌာနစိတ်များ၊ ယခင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူများက ဦးဆောင်သည့် ...	Read More»
အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ဒီမိုကရေစီအရေး ဆန္ဒပြမှုများကို ဖိနှိပ်ချေမှုန်းမှုများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ စစ်တပ်တပ်ဖွဲ့များကို အမေရိကန်က ပစ်မှတ်ထားအရေးယူ မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ ဝါရှင်တန် – အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန နိုင်ငံရပ်ခြား ပိုင်ဆိုင်မှုများ ထိန်းချုပ်ရေးဌာန (OFAC) သည် မြန်မာ့စစ်တပ်၊ ဒီမိုကရေစီအရေးဆန္ဒပြမှုများအပေါ်အကြမ်းဖက် ဖိနှိပ်ချေမှုန်းမှုများနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသော လူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးနှင့် အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုတို့ကို ယနေ့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ အရေးယူခဲ့ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူများနှင့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအပေါ် မြန်မာစစ်တပ်၏ ဆက်လက် အကြမ်းဖက် ခြိမ်းခြောက်မှုများကို တုံ့ပြန်သည့် အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ အရေးယူမှုများကို ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ “ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူတွေအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များရဲ့ သေစေလောက်တဲ့ အကြမ်းဖက်မှု အဆုံးသတ်ရပါမယ်။ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ရဲတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေအတွက် ...	Read More»
လေးပွင့်ဆိုင်ခေါင်းဆောင်များ၏ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက် – “လေးပွင့်ဆိုင်စိတ်ဓာတ်”
အိမ်ဖြူတော် မတ် ၁၂၊ ၂၀၂၁ ထုတ်ပြန်ချက် ၁။ ဩစတေးလျ၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အကြား လေးနိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ၍ မိမိတို့၏ ကတိကဝတ်ကို ထပ်လောင်း အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးအတွင်း မတူကွဲပြားသော အမြင်ရှုထောင့်မျိုးစုံဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းသော အင်ဒိုပစိဖိတ်အတွက် မိမိတို့အတူတကွ မျှဝေကြသော မျှော်မှန်းချက်တစ်ရပ်တွင် တစ်သားတည်းရှိကြပါသည်။ ဒီမိုကရက်တစ်စံတန်ဖိုးများဖြင့် လွတ်လပ်သော၊ ပွင့်လင်းသော၊ အလုံးစုံပါဝင်သော၊ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်၍ အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းပေးသော ဒေသတစ်ခုနှင့် အနိုင်ထက်ပြုမူမှုဖြင့် ထိန်းချုပ်ကန့်သတ် မထားသော ဒေသတစ်ခုဖြစ်ရေးအတွက် မိမိတို့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပါသည်။ ဤအပြုသဘောဆောင်သော အမြင်အပေါ် မိမိတို့၏ ပူးပေါင်းအားထုတ်မှုသည် နိုင်ငံတကာ ဖြစ်ရပ်ဆိုး ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဆူနာမီကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်ကို မိမိတို့ ပြန်ပြောင်းအမှတ်ရမိပါသည်။ ...	Read More»
By U.S. Mission Burma | 24 မတ်, 2021 | Categories: Uncategorized
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအရှိန်မြင့်တက်လာသည့် အကြမ်းဖက်မှုကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် တာဝန်ရှိသူများနှင့် စစ်တပ်တပ်မများကို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းအရေးယူ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အန်တိုနီ ဂျေ ဘလင်ကင်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ ယခင်လက စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှစ၍ မြန်မာပြည်သူများသည် ၎င်းတို့၏ဆန္ဒလိုလားမှုဖြစ်သော ဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တရားဥပဒေပြန်လည်စိုးမိုးရေးတို့အတွက် ဆန္ဒထုတ်‌ဖော်လာခဲ့ကြသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်း ၎င်း၏မဟာမိတ်များ၊ မိတ်ဖက်နိုင်ငံများနှင့်အတူ မြန်မာပြည်သူများဘက်ကရပ်တည်သည်။ ယင်းဆန္ဒပြမှုများကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် စစ်အာဏာရှင်တို့သည် ဆက်လက်၍အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းခဲ့ရာ ယနေ့အချိန်အထိ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူများအပါအဝင် လူပေါင်း ၁၉၄ ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့နိုင်ငံ၏အနာဂတ်အတွက် ရိုးရှင်းစွာတောင်းဆိုနေကြသည့် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူများကို ရက်ရက်စက်စက်နှိမ်နှင်း၍ သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့် စစ်အာဏာရှင်က ဒီမိုကရက်တစ်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခု၏ ရလဒ်ကို ပြောင်းပြန်လှန်ရန် ဆက်လက်ကြိုးပမ်း အားထုတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရဲချုပ်သန်းလှိုင်နှင့် စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်စိုးတို့ကို သမ္မတအမိန့်အမှတ် ၁၄၀၁၄ ...	Read More»
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လှိုင်သာယာမြို့နယ်နှင့် အခြားသောဒေသများတွင် လက်နက်မဲ့အရပ်သားများအပေါ် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ မကြာခဏဆိုသလို အမှောင်ထုကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ ရက်စက်စွာအကြမ်းဖက်ခြင်းသည် သူရဲဘောကြောင်ပြီး လူ့ကျင့်ဝတ်နှင့်မလျော်ညီသည့်အပြင် ကာကွယ်ရန်အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ မြန်မာပြည်သူများအပေါ် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်အားလုံးရပ်တန့်ရန်၊ ဖမ်းဆီးထားသူအားလုံးပြန်လွှတ်ပေးရန်၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်နှင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့် နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာထားသည်ကို ရုတ်သိမ်းပေးရန်၊ ဆက်သွယ်ရေးကန့်သတ်ထားမှုများပယ်ဖျက်‌ပေးရန်နှင့် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသောအစိုးရကို အာဏာပြန်လည်ပေးအပ်ရန် မြန်မာစစ်တပ်ကို မိမိတို့တောင်းဆိုပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏အခွင့်အရေးဖြစ်သော ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခွင့်နှင့် သတင်းအချက်အလက်လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်ခွင့်ကို မိမိတို့ထောက်ခံအားပေးပါသည်။ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားခြင်းနှင့် မီဒီယာကိုနှိပ်ကွပ်ထားခြင်းဖြင့် စစ်တပ်၏စက်ဆုပ်ဖွယ်ရာလုပ်ရပ်တို့ကို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤကြေညာချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂသံရုံးနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ သံရုံးများဖြစ်ကြသော – ဒိန်းမတ်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဖင်လန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ နယ်သာလန်၊ စပိန်နှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံ – ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့မှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီးများက ပူးပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ပါသည်။ Read More»
အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနဝန်ကြီး မာယိုကတ်စ်မှ မြန်မာနိုင်ငံကို ယာယီထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခံ အခြေအနေအဖြစ် သတ်မှတ် အမိမြေလုံခြုံရေးဌာန ထုတ်ပြန်သည့် ရက်စွဲ – မတ်လ ၁၂ရက်၊ ၂၀၂၁ ဝါရှင်တန် — အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနဝန်ကြီး အာလေဟန်ဒရို အန် မာယိုကတ်စ်သည် မြန်မာနိုင်ငံကို ယာယီထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခံ အခြေအနေ (TPS) အဖြစ် ၁၈လကြာ သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဤ TPS သတ်မှတ်ချက်အသစ်အရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် လက်ရှိ နေထိုင်လျက်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့်အချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက TPS အစီအစဉ်အတွက် ကနဦးလျှောက်လွှာများကို တင်သွင်းနိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ “စစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ အရပ်သားတွေအပေါ် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံထဲက နေရာအတော်များများမှာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေ အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အထိ အခြေအနေတွေ ရှုပ်ထွေးဆိုးရွားလာတာကိုပြည်သူတွေဟာ ခါးစည်းခံနေကြရပါတယ်” လို့ ဝန်ကြီး မာယိုကတ်စ်က ပြောပါတယ်။ ...	Read More»
မြန်မာနိုင်ငံ အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်များနှင့်ဆက်စပ်၍ အကျိုးခံစားနေသော မိသားစုဝင်များကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ပစ်မှတ်ထားအရေးယူခြင်း မတ် ၁၀၊ ၂၀၂၁ ဝါရှင်တန် – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီနည်းကျကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော အစိုးရအား ဖြုတ်ချရာတွင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် မင်းအောင်လှိုင်၏ အရွယ်ရောက်ပြီး သားသမီးနှစ်ဦးနှင့် ထိုသားသမီးနှစ်ဦး၏ ကုမ္ပဏီခြောက်ခုကို အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန နိုင်ငံရပ်ခြားပိုင်ဆိုင်မှုများထိန်းချုပ်ရေးဌာနက ယနေ့ အရေးယူ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီနည်းကျကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော အရပ်သား အစိုးရကို ဖြုတ်ချ၍ မြန်မာစစ်တပ်က အာဏာသိမ်းမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသော ပြည်သူများအပေါ် ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခြင်းအား တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဤအရေးယူမှုကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသည် မြန်မာပြည်သူများနှင့်အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်နေပါသည်။ အာဏာသိမ်းခြင်းနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများ ...	Read More»
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင် မတ် ၁၀၊ ၂၀၂၁ မြန်မာပြည်သူများသည် ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ရရှိရေးနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက် ၎င်းတို့၏ ပြင်းပြသောဆန္ဒတို့ကို ထုတ်ဖော်ရန် လမ်းများပေါ်သို့ ထွက်၍ ရက်သတ္တပတ် ငါးပတ်ကြာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေခဲ့ကြပါသည်။ ယင်းကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် မြန်မာလုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များသည် စစ်ခေါင်းဆောင်များ၏အမိန့်အရ လက်နက်မဲ့ ဆန္ဒပြသူများကို ရက်ရက်စက်ဖြင် သေလောက်စွာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီး အာဏာသိမ်းချိန်မှစ၍ အနည်းဆုံး ၅၃ ဦး သေဆုံးစေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဤသို့ ကြောက်မက်ဖွယ် တိုက်ခိုက်မှုများကို မိမိတို့ ရှုတ်ချပါသည်။ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ဆရာဝန်များ၊ လူ့အခွင့်အရေး ခုခံကာကွယ်သူများ၊ သတင်းထောက်များ၊ ပြည်ထောင်စုခေါင်းဆောင်များနှင့် မိမိတို့၏ အခွင့်အရေးကို ကျင့်သုံးသော သာမန်ပြည်သူ ၁၇၀၀ ကျော်တို့အား ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကို မိမိတို့ ရှုတ်ချပါသည်။ ၎င်း၏ ...	Read More»
မတ် ၁၀၊ ၂၀၂၁ ဝါရှင်တန် – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီနည်းကျကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော အစိုးရအား ဖြုတ်ချရာတွင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် မင်းအောင်လှိုင်၏ အရွယ်ရောက်ပြီး သားသမီးနှစ်ဦးနှင့် ထိုသားသမီးနှစ်ဦး၏ ကုမ္ပဏီခြောက်ခုကို အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန နိုင်ငံရပ်ခြားပိုင်ဆိုင်မှုများထိန်းချုပ်ရေးဌာနက ယနေ့ အရေးယူ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီနည်းကျကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော အရပ်သား အစိုးရကို ဖြုတ်ချ၍ မြန်မာစစ်တပ်က အာဏာသိမ်းမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသော ပြည်သူများအပေါ် ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခြင်းအား တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဤအရေးယူမှုကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသည် မြန်မာပြည်သူများနှင့်အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်နေပါသည်။ အာဏာသိမ်းခြင်းနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများ လုပ်ဆောင်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသူများကို တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံခံမှုရှိစေရေး တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ရန် မိမိတို့ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ...	Read More»
မတ် ၅၊ ၂၀၂၁ သံအမတ်ကြီး သောမတ်စ်ဗိုက်ဒါသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း နှင့် မတ်လ ၅ ရက်ကဖုန်းဆက်စကားပြောခဲ့ပြီး လူပေါင်း ၄၉ ဦး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်သည့် ဆန္ဒပြသူများအပေါ် အကြမ်းဖက်နေမှုအား ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန် တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်များအပါအဝင် ဖမ်းဆီးထားသူအားလုံးကို ချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးရန်၊ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ဖြတ်တောက်နေမှုရပ်တန့်ရန်နှင့် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသောအစိုးရကို ပြန်လည်အသက်သွင်းရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ တပ်မတော်၏လုပ်ဆောင်နေမှုကို ပြည်တွင်းနေရာအနှံ့အပြားမှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေမှုအပြင် အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ကြုံတွေ့ရမည့် စီးပွားရေးထိခိုက်မှုနှင့် နိုင်ငံတကာ၏ဖယ်ကြဉ်မှုအရေးနှင့်ပတ်သက်၍လည်း အထူးအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ တပ်မတော်အနေဖြင့် လက်ရှိသွာနေသည့်လမ်းကြောင်းကို နောက်ပြန်လှည်ရန်လည်း သံအမတ်ကြီးက တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။	Read More»
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေသူများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး ဂျက်ဆူလီဗန်၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူများအပေါ် မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့် အံ့သြတုန်လှုပ်ရပါသည်။ ယနေ့ သတ်ဖြတ်မှုမှုများသည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက် အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှစ၍ ဒီမိုကရေစီလိုလားသူများကို ဆက်လက်နှိမ်နှင်းမှုအရှိန်မြှင့်တင်လာခြင်းကို ပြသခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဒီမိုကရေစီကိုအားပေးထောက်ခံကာ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြစဉ်အတွင်း အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် ရဲရင့်သောဆန္ဒပြသူများ၏ မိသားစုများနှင့်ထပ်တူ စိတ်နှလုံးထိခိုက် ကြေကွဲရသည့်အကြောင်း ပြောကြားလိုပါသည်။ ဒီမိုကရေစီ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားလိုက်နာမှုအတွက်၎င်းတို့၏ဆန္ဒလိုလားမှုကို ရဲဝံ့စွာ ဆက်လက်ထုတ်ဖော်ပြသနေကြသော မြန်မာပြည်သူလူထုနှင့်အတူ ခိုင်ခိုင်မာမာ တညီတညွတ်တည်း ရပ်တည်ပါသည်။ အကြမ်းဖက်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသူများကို တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရေးအတွက် အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ မဟာမိတ်နိုင်ငံများ၊ မိတ်ဖက်များနှင့် ဆက်လက်၍ အနီးကပ်ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် မိမိတို့၏အကူအညီများကိုလည်း ထပ်မံအားဖြည့်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုနှင့် မကြာသေးမီကအာဏာသိမ်းမှုအတွက် တာဝန်ရှိသူများကို ...	Read More»
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၂၁ ဝါရှင်တန် ဒီစီ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စစ်အာဏာသိမ်းမှုအတွက်တာဝန်ရှိသော စစ်တပ်ယန္တရားနှင့်ဆက်နွှယ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကို အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန နိုင်ငံရပ်ခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (အိုအက်ဖ်အေစီ) က ယနေ့ အရေးယူဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု ချမှတ်လိုက်ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေသူများကို မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနက ဤသို့ ဒဏ်ခတ်အရေးယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အဓိကထားအရေးယူပိတ်ဆို့သည့် ဖေ‌ဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သော သမ္မတဘိုင်ဒင်၏ အမိန့်အသစ်ဖြစ်သည့် သမ္မတအမိန့်အမှတ် ၁၄၀၁၄ ဖြင့် ဤအရေးယူဒဏ်ခတ်မှုကို ဘဏ္ဍာရေးဌာနက ချမှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် လွတ်လပ်မှုနှင့်ဒီမိုကရေစီ ခိုင်မြဲရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေကြသော မြန်မာပြည်သူလူထုနှင့်အတူ ရပ်တည်နေပြီး အာဏာသိမ်းမှုနှင့် ဆက်လက် ကျူးလွန်နေသည့် အကြမ်းဖက်မှုများအတွက် တာဝန်ရှိသူများကို တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရေး တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ကတိကဝတ်ပြုထားလျက်ရှိပါသည်။ စစ်တပ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၎င်းလုပ်ဆောင်နေသည်များကို ...	Read More»
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၂၁ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခြင်းအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ၏လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခြင်းအား ဂျီ-၇ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ်သော ကနေဒါ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ ဂျပန်၊ ယူကေနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့မှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများဖြစ်ကြသည့် မိမိတို့နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးက ပြင်းပြင်းထန်ရှုတ်ချပါသည်။ အသက်ဆုံးရှုံးရမှုများတွက် ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည့်အကြောင်း ပြောကြားလိုပါသည်။ စစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် အစွမ်းကုန် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေးနှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလည်း လေးစားလိုက်နာရပါမည်။ လက်နက်မဲ့ ပြည်သူများအပေါ် ကျည်ဆံအစစ်အသုံး၍ပစ်ခတ်ခြင်းကို လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါ။ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခြင်းအပေါ် အကြမ်းဖက် တုံ့ပြန်သည့်မည်သူမဆိုယင်းအတွက်တာဝန်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ အာဏာသိမ်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သူများအား ခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့်ဖိနှိပ်ခြင်းကို မိမိတို့ ရှုတ်ချပါသည်။ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကိုဖိနှိပ်သော ဥပဒေများပြောင်းလဲခြင်းအပါအဝင် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခြင်းကိုဖြိုခွင်းမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ မိမိတို့စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရပါသည်။ ဆန္ဒပြသူများ၊ ဆရာဝန်များ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် သတင်းသမားများအား စနစ်တကျပစ်မှတ်ထားခြင်းကို ရပ်တန့်ရမည်ဖြစ်ပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရပါမည်။ အားနည်းထိခိုက်လွယ်ဆုံးပြည်သူများကိုကူညီပံ့ပိုးရန်အတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများ ...	Read More»
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အန်တိုနီ ဂျေ ဘလင်ကင်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၂၁ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပြီး ဒီမိုကရေစီနည်းကျအုပ်ချုပ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် ရဲရင့်သောသတ္တိ၊ သန္နိဋ္ဌာန်တို့နှင့်အတူ နိုင်ငံတစ်နံတစ်လျားမှ ထွက်ပေါ်လာကြသောမြန်မာပြည်သူလူထုနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ခိုင်ခိုင်မာမာ တညီတညွတ်တည်း ရပ်တည်ပါသည်။ လူလေးဦးသေဆုံးပြီး ၄၀ ကျော်ဒဏ်ရာရရှိစေခဲ့သော လက်နက်မဲ့ဆန္ဒပြသူများအပေါ် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ ရက်ရက်စက်စက်တိုက်ခိုက်မှုကို မိမိတို့ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချပါသည်။ ရာနှင့်ချီသော နိုင်ငံရေးသမားများ၊ လူ့ခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူများကို ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနေခြင်းအတွက်လည်း မိမိတို့ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကို လက်မခံသည့်အကြောင်း မိမိတို့၏ မိတ်ဖက်များ၊ မဟာမိတ်များနှင့်အနီးကပ်လက်တွဲ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူ စစ်တပ်ကိုအထူးအလေးပေးပြောကြားလိုပါသည်။ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးဖြစ်သော မောင်မောင်ကျော်နှင့်မိုးမြင့်ထွန်းတို့ကို ဒဏ်ခတ်အရေးယူသည့်စာရင်း၌ ယနေ့ထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက တုံ့ပြန်လိုက်ပါသည်။ ဤသို့ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုစာရင်း၌ ထည့်သွင်းခြင်းသည် Section 1(a)(iii)(A) of Executive Order ...	Read More»
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အာဏာသိမ်းမှုအပေါ် တုံ့ပြန်ရာတွင် ဘိုင်ဒင်–ဟာရစ် အစိုးရအဖွဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၁ သမ္မတ ဘိုင်ဒင်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့် သမ္မတဦးဝင်းမြင့်၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အခြား အရပ်သားတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ခုခံကာကွယ်သူများ၊ သတင်းသမားများ၊ အရပ်ဘက်လူမှု အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်များအား မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခြင်းအပေါ် တုံ့ပြန်ရာတွင် ထူးခြားအရေးပါသော အဆင့်များ ယနေ့ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြခြင်းကတစ်ဆင့် ဒီမိုကရေစီကို ထောက်ခံပံ့ပိုးမှုသည့်အကြောင်း မြန်မာပြည်သူလူထုကထပ်လောင်းအတည်နေသကဲ့သို့ မိမိတို့ကလည်း မဟာမိတ်များ၊ မိတ်ဖက်များနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ မြန်မာပြည်သူလူထုနှင့်အတူ ရပ်တည်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ===================== ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့က အာဏာသိမ်းခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသူများကို တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိ စေရန်နှင့် မြန်မာပြည်သူလူထု၏ ဒီမိုကရက်တစ်ရည်မှန်းချက်အတွက် ...	Read More»
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်ကထုတ်ပြန်သောကြေညာချက်လက်မှတ်ရေးထိုးရာတွင် သြစတြေးလျနှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီးများလည်းပါဝင်လာသည့်အတွက် အသစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီးများ၏ကြေညာချက် ၎င်းတို့၏တရားဝင်အစိုးရဖြုတ်ချခံရခြင်းအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြသော ဆန္ဒပြသူများနှင့်အရပ်သားပြည်သူလူထုအား အကြမ်းဖက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကို မိမိတို့တောင်းဆိုပါသည်။ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းလှုပ်ရှားတက်ကြွသူများ၊ သတင်းသမားများနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်ဆက်လက်ဖမ်းဆီးနေခြင်းကို မိမိတို့အနေဖြင့် ပြတ်ပြတ်သားသားအတိအလင်း ကန့်ကွက်ရှုတ်ချပါသည်။ စစ်တပ်က ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကိုကြားဖြတ်နှောင့်ယှက်ခြင်းအပြင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ အခြေခံရပိုင်ခွင့်များနှင့် ဥပဒေအရအကာအကွယ်ပေးထားသည့်အခြေခံအခွင့်အရေးများကို ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်ခြင်းအတွက်လည်း မိမိတို့ လူသိရှင်ကြားကန့်ကွက်ရှုတ်ချပါသည်။ ဒီမိုကရေစီ၊ လွတ်လပ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့်သာယာဝပြောမှုကို ရှာဖွေနေကြသော မြန်မာပြည်သူလူထုကို မိမိတို့ထောက်ခံအားပေးနေပါသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးကလည်းစောင့်ကြည့်နေပါသည်။ ဤကြေညာချက်ကို သြစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂသံရုံးနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ သံရုံးများဖြစ်ကြသော – ဒိန်းမတ်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဖင်လန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ နယ်သာလန်၊ စပိန်နှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံ – ...	Read More»
USAID ယာယီအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဂလော်ရီယာစတီးလ်၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၁ မီဒီယာဆက်ဆံရေးရုံး press@usaid.gov USAID အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် လွတ်လပ်မှုရှိစေရေးတို့အတွက် ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်သူများနှင့် ရပ်တည်ကာ အတူရှိနေပါသည်။ မြန်မာပြည်သူများအနေဖြင့် ထိုရပိုင်ခွင့်များနဲ့ အပြည့်အဝ ထိုက်တန်ပါသည်။ သမ္မတကြီး ဘိုင်ဒင်ကလည်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့က “ယခုလို စစ်တပ်ရဲ့ အာဏာသိမ်းယူမှုဟာ နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဥ်နဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအပေါ် တိုက်ရိုက်ထိပါးမှု တစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ မြန်မာပြည်သူများ၏ နှစ်ကာလကြာရှည်စွာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုများနှင့်အတူ ရရှိလာသည့် တိုးတက်မှုအခြေအနေတစ်ရပ်ကို ဒီမိုကရေစီနည်းမကျစွာနဲ့ ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်တစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာစစ်တပ်၏ အာဏာသိမ်းယူမှုအပေါ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ...	Read More»
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၁ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်တိုနီ ဂျေ ဘလင်ကင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရသော လွှတ်တော်မစတင်မီ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်များ၊ သတင်းသမားများနှင့်လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများအပါအဝင် အရပ်သားအစိုးရခေါင်းဆောင်များစွာကို တပ်မတော်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ ဤသည်မှာအာဏာသိမ်းမှုတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း မိမိတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း မိမိတို့အနေဖြင့် ဒီအတိုင်းထိုင်ကြည့်နေမည်မဟုတ်ပါ။ ဤအာဏာသိမ်းမှုသည် နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွင်း ပြသခဲ့ကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားတို့၏ဆန္ဒကိုငြင်းပယ်ရန်ကြိုးပမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်မှစတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်မသွားဘဲသပိတ်မှောက်ခြင်းတို့ဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဒီမိုကရေစီအတွက်ထားရှိသော သန္နိဋ္ဌာန်ကို ပြသနေခဲ့ကြသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်း ၎င်းတို့နှင့်အတူရပ်တည်ပါသည်။ အဆိုပါအာဏာသိမ်းမှုကိုဦးဆောင်ခဲ့သော လက်ရှိတပ်မတော်အရာရှိများနှင့် ယခင်တပ်မတော်အရာရှိ ခြောက်ဦးတို့ကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ရန်ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်က ယနေ့တုံ့ပြန်လိုက်သည်။ ယင်းအပြင် အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်သော နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်လေးဦးနှင့် တပ်မတော်ကထိန်းချုပ်သော သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်သော ...	Read More»
ဇန်နဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၂၁ မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် သံတမန်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးတွဲကြေညာချက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရက်တစ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးနှင့်နိုင်ငံတော်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ ဖြိုးရေး မြှင့်တင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေမှုကို အားပေးထောက်ခံကြောင်း မိမိတို့အခိုင်အမာအတည်ပြုပါသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်တွင် လွှတ်တော်အသစ် စတင်ရေးနှင့် သမ္မတသစ်တစ်ဦး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် မိမိတို့မျှော်လင့်နေပါသည်။ မကြာသေးမီက ကျင်းပခဲ့သော နိုင်ငံတစ်ဝန်းရွေးကောက်ပွဲတွင် ၎င်းတို့၏သမိုင်းဝင်ပါဝင်ခဲ့ကြမှုအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်း ထပ်မံပြောကြားပါသည်။ တပ်မတော်နှင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိအခြားသော လူပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်းအားလုံးအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းကြပါရန် တိုက်တွန်းပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် မြန်မာ့ဒီမိုကရက်တစ်အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို ကြန့်ကြာစေရန်အလို့ငှာ မည်သို့သောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမျိုးကိုမဆို မိမိတို့ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဒီမိုကရက်တစ်လွတ်လပ်မှု၊ အဓွန့်ရှည်တည်တံ့သောငြိမ်းချမ်းမှု နှင့် အားလုံးပါဝင်သော သာယာဝပြောမှုအတွက်ရှေ့ရှုလုပ်ဆောင်နေကြသူအားလုံးကို မိမိတို့ အားပေးထောက်ခံ ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် ဇန်နဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၂၁ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်ထံ အမေရိကန်သံအမတ်သစ်က၎င်း၏သံအမတ်ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်ခြင်း ရန်ကုန်မြို့။ ။ သံအမတ်ကြီး သောမတ်စ်ဗိုက်ဒါ သည် ၎င်း၏ သံအမတ်ခန့်အပ်လွှာကို နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်၌ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ထံသို့ ယနေ့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတစ်ဝန်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ သာယာဝပြောရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၊ မြန်မာပြည်သူများနှင့်အတူ လက်တွဲဆောင်ရွက်ရန်ချမှတ်ထားသည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ကတိကဝတ်ကို သံအမတ်ကြီး ဗိုက်ဒါ က အထူးအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ “မြန်မာနိုင်ငံမှာ မကြာသေးမီ နှစ်တွေအတွင်းက အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ်တစ်‌ခုအတွက် အတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကတိကဝတ်ကတော့ မပြောင်းလဲဘဲ ဆက်လက်ပြီး ရှိနေပါတယ်” “‌ရှေ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေအကြား ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ တည်ဆောက်ဖို့အတွက်လည်း ကျွန်တော်မျှော်လင့်လျက်ရှိနေပါတယ်” ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် ဇန်နဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁ USAID က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် တီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးစီမံကိန်းသစ်ကို စတင် ရန်ကုန် ။ ။ အမေရိကန် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေး အေဂျင်စီ (USAID) ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေညွှန်ကြားရေးမှူး အလဲရ်ဂရပ်ဘ်စ်က တီဘီကင်းစင်မြန်ပြည်တစ်ခွင် ရှေးရှုနိုင်ဖို့ ကြိုးစားစို့ စီမံကိန်းသစ်ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့များနှင့် ဒေသခံ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများထံ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူ ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က အဆိုပါအခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သုံးနှစ်စီမံကိန်းသစ်သည် တီဘီရောဂါ ကာကွယ်ကုသရေးအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တိုင်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော ပြည်ကြီးခင်အဖွဲ့က အကောင်အထည်ဖော် ...	Read More»
တီဘီကင်းစင်မြန်ပြည်တစ်ခွင် ရှေးရှုနိုင်ဖို့ ကြိုးစားစို့ စီမံကိန်းကို အွန်လိုင်းမှတဆင့် စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်အတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (USAID) ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေညွှန်ကြားရေးမှူး အလဲရ်ဂရပ်ဘ်စ်ပြောကြားရန်ပြင်ဆင်ထားသော မှတ်ချက်စကား USAID လို့ သိကြတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေး အေဂျင်စီက တီဘီကင်းစင်မြန်ပြည်တစ်ခွင် ရှေးရှုနိုင်ဖို့ ကြိုးစားစို့ စီမံကိန်း အမည်ရ သုံးနှစ်တာစီမံကိန်းသစ်တစ်ခုကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်းမှာ စတင် ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မယ့် မိမိတို့ရဲ့ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံက အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပြည်ကြီးခင်အဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တီဘီရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး ကြိုးပမ်းမှုအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနဲ့တကွ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့တွေအတွက် ဤစီမံကိန်းကို မိတ်ဆက်ပေးဖို့ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာသန္တာလွင်နှင့်အတူ ကျွန်မလည်း အောက်တိုဘာလအတွင်းက ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ...	Read More»
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရုံး ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် ဇန်နဝါရီ ၄၊ ၂၀၂၁ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုက်ကယ် အာ ပွန်ပဲယိုး ပေးပို့သောလွတ်လပ်ရေးနေ့ သဝဏ်လွှာ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေ့ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်တွင် ကျရောက်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခါသမယအတွက် မြန်မာပြည်သူများထံသို့ အမေရိကန်အစိုးရနှင့် အမေရိကန်ပြည်သူများကိုယ်စား လွတ်လပ်ရေးနေ့ဆုတောင်းသဝဏ်လွှာပို့သအပ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရက်တစ် အပြောင်းအလဲ၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးအသွင်ကူးပြောင်းရေးတို့ကို ထောက်ခံအားပေးရန်အတွက် မြန်မာပြည်သူများနှင့်အတူ လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပိုမိုငြိမ်းချမ်းမှု၊ သာယာဝပြောမှုနှင့် လွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖော်ဆောင်ရာတွင် အောင်မြင်မှုရရှိရေးအတွက်အကူအညီပေးရန်အလို့ငှာ အဆွေတော်တို့၏အစိုးရ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ လူငယ်များနှင့်အတူ ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသော မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ကြပါစေကြောင်း မိမိဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါသည်။ ###	Read More»
ဒုတိယဝန်ကြီး ဘီဂဲန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် တယ်လီကွန်ဖရင့်ဖြင့်စကားပြောကြားခြင်း ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရုံး ဒီဇင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၂၀ အောက်ပါအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ဒုတိယပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်အကြီးအကဲ ခေလ်ဘရောင်း ကို ကိုးကားနိုင်ပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် မြန်မာခေါင်းဆောင်များနှင့်ပြည်သူများအကြား ဆက်လက်ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် အဆင့်မြင့်ဆက်ဆံရေးကဏ္ဍအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အနေဖြင့် ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး စတီဗင် အာ ဘီဂဲန် သည် မြန်မာနိုင်ငံကဆက်လက်ဖော်ဆောင်လျက်ရှိသော ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားလိုက်နာရေးနှင့် အားလုံးပါဝင်နိုင်သော စီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးတို့အတွက် ထောက်ခံအားပေးသွားမည့်အကြောင်းကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် အားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် ဝန်ကြီးဦးကျော်တင် တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်အတူ စီးပွားရေးဆက်ဆံမှု ပိုမိုအားကောင်းစေရန် ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် နှစ်နိုင်ငံအကြား အဓွန်ရှည်တည်တံ့သော မိတ်ဖက်လက်တွဲဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဖော်ဆောင်နေရင်း ဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော အကြမ်းဖက်မှု၊ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များအတွက် ပြည်တွင်းစျေးကွက်အခွင့်အလမ်းများဆိုင်ရာ သုတေသနကို အမေရိကန်နိုင်ငံက တင်ပြ အမေရိကန်အစိုးရ၏ Feed the Future မြန်မာနိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေးနှင့် အစားအစာစနစ်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ စားသုံးသူ ၇၀၀ ကျော်၏ အစားအစာကြိုက်နှစ်သက်မှု သုံးသပ်ချက်ကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် မျှဝေတင်ပြခဲ့ပါသည်။ လေ့လာသုံးသပ်သူများသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ တောင်သူများနှင့် စိုက်ပျိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လက်တွေ့ကျသော အကြံပြုချက်များကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အကြံပြုချက်တစ်ခုမှာ တန်ဖိုးမြှင့်တင်နိုင်သော မွေးမြူရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များကို လက်ရှိစျေးကွက်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအကြံပြုချက်မှာ ဂျင်းနှင့်ဆနွင်းကဲ့သို့သော ရိုးရာထုတ်ကုန်များကို ကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ရေး ဆက်လက်လေ့လာစူးစမ်းရန်ဖြစ်သည်။ အစီရင်ခံစာတွင် စျေးကွက်၏မျှော်မှန်းချက်ကို ဖြည့်တင်းပေနိုင်ရန်အတွက် တန်ဖိုးကွင်းဆက်တလျှောက် အရည်အသွေးမြှင့်တင်နည်းလမ်းများ၊ မျိုးစေ့နှင့် အရည်အသွေးအာမခံချက်စနစ်များ ...	Read More»
မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များအတွက် ပြည်တွင်းစျေးကွက်အခွင့်အလမ်းများ – မြန်မာနိုင်ငံ စီပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ USAID ရုံး၏ ဒါရိုက်တာ ပေါပလက်ဗါအတွက် ပြင်ဆင်ပေးထားသော မှတ်ချက်များ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အေဂျင်စီ (USAID) ဟာ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဥ်ကို အခိုင်အမာ ထောက်ခံပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပိုကျယ်ပြန့်ပြီး ပိုပါဝင်နိုင်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖန်တီးဖို့နဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာတို့အကြား ရင်းနှီးချစ်ကြည်မှုကို ခိုင်မာစေဖို့ ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အလားအလာကောင်းတွေ အများကြီးရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာ အဓိကအပိုင်းကတော့ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းသစ်တွေကို ရှာဖွေပြီး မြှင့်တင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ USAID ဟာ တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို မြှင့်တင်ဖို့၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေအနေနဲ့ ၄င်းတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ချဲ့ထွင်ကြီးထွားလာစေဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနဲ့ ...	Read More»
လေးစားအပ်ပါသော ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဆရာကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး။ ယခုနှစ်မှာတော့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကပ်ရောဂါကြီးကြောင့် နေ့စဥ်ဘဝတွေမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ မိသားစုများအဆင်ပြေစေရေးဟာ ရှေ့တန်းကိုရောက်လာတဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့အခြေအနေတစ်ရပ်မှာ ကမ္ဘာ့ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ကို ကျင်းပပြုလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတူ လက်တွဲပြီး ယနေ့မှာ ကိုဗစ်–၁၉ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများကို ဆောင်ရွက်နေသလို အိပ်ချ်အိုင်ဗီ/အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါ ကာကွယ်တုံ့ပြန်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း နှစ်ရှည်လများ လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးနေ့မှာ အေအိုင်ဒီအက်စ် ကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ သူတွေအတွက် သတိရအောက်မေ့သလို ဒီကပ်ရောဂါကို တိုက်ဖျက်နိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်နေသူတွေကို မိမိတို့အနေနဲ့ အမေရိကန်ပြည်သူတွေကိုယ်စား လေးစားအသိအမှတ်ပြုကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ ယနေ့အထိ တိုးတက်မှုတွေကို မှတ်သားထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အိပ်ချ်အိုင်ဗွီကူးစက်မှုအသစ်တွေကို ၂၀၁၀ က စလို့ ၃၆ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှုန်းဟာ ကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှနှုန်းထက် ...	Read More»
အိပ်ချ်အိုင်ဗီ/အေအိုင်ဒီအက်စ် ပပျောက်ရေး မြန်မာ–အမေရိကန် မိတ်ဖက်လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၂၀ ကွမ်ကတ်နို သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ ဒီနှစ်ကမ္ဘာ့ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ကို ကျွန်မတို့ဟာ မတူညီတဲ့ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ အသစ်တစ်ခုနဲ့အတူ ဆက်စပ်ပြီးဆင်နွှဲကြရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ မိသားစုတွေနဲ့ လူမှုအသိုက်အဝန်းတွေရဲ့ ကျန်းမာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းသုခ နေ့စဉ်ဘဝတွေရှေ့တန်းဆီကို ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အရာပါ။ ဒီနေ့အခါမှာ ကိုဗစ်-၁၉ တုံ့ပြန်ရေးအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ မြန်မာနဲ့အတူလက်တွဲဆောင်ရွက်နေသလို၊ အိပ်ချ်အိုင်ဗီ/ အေအိုင်ဒီအက်စ် တုံ့ပြန်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်လည်း ဟိုယခင်ကတည်းက လက်တွဲဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အခုလို ကမ္ဘာ့ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးနေ့မှာ အိပ်ချ်အိုင်ဗီ/ အေအိုင်ဒီအက်စ် ကြောင့် သူတို့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ဒီကူးစက်ရောဂါရပ်တန့်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကို အမေရိကန်ပြည်သူတွေကိုယ်စား ကျွန်မက ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါရစေ။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကစပြီး အမှန်တကယ်တိုးတက်မှုတွေဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အိပ်ချ်အိုင်ဗီ ကူးစက်မှု ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချနိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒါဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးပျှမ်းမျှအတိုင်းအတာထက် ပိုပါတယ်။ ...	Read More»
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လူမှုရေးတာဝန်ယူမှု အွန်လိုင်းအခမ်းအနားတွင်ပြောကြားသော သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ၏ မှတ်ချက်စကား မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါ။ သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ် ကျေးဇူးတော်များနေ့ ဖြစ်ကြပါစေ။ ကိုဗစ်–၁၉ ကြောင့် လူအချင်းချင်းတွေ့ကြဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် အခုလို အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံနိုင်မယ့်ပွဲ ကျင်းပဖို့ နည်းလမ်းရှာဖွေပေးတဲ့အတွက်ရော အခုလို အွန်လိုင်းအခမ်းအနားမှာပါဝင်ဖို့ ဖိတ်ကြားပေးတဲ့အတွက်ပါ အမေရိကန် ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလူမှုရေးတာဝန်ယူမှု ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းအတွက် အသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့ ကုမ္ပဏီ ၁၇ ခုကိုလည်း နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲတွေ ဘယ်လိုကြုံတွေ့နေရသလဲဆိုတာကတော့ စကားလုံးနဲ့ထုတ်ဖော် ပြောပြဖို့တောင် မလုံလောက်ပါဘူး။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ကိုဗစ်–၁၉ ဘေးကနေကာကွယ်ရတာ၊ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို မကြုံစဖူး ထူးကဲတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ လည်ပတ်နေခဲ့ရတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ဝန်ထမ်းတွေကို လုပ်ခလစာပေးနိုင်ဖို့အတွက် အနစ်နာခံရတဲ့လမ်းကို ရွေးချယ်ရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကုမ္ပဏီအားလုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ခံစားတွေးကြည့်လို့ ရပါတယ်။ နေ့စဉ်အခက်အခဲဒုက္ခဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ မိတ်ဆွေတို့ ...	Read More»
အဋ္ဌမအကြိမ် အာဆီယံ–အမေရိကန် ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲ၌ထုတ်ပြန်သော လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲကြေညာချက် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ နိုဝင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၂၀ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားသော ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ကြီးမှူးမှုဖြင့် နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင် ကျင်းပသော အဋ္ဌအကြိမ် အာဆီယံ–အမေရိကန် ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲကြီးတွင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအကြီးအကဲများ/အစိုးရအကြီးအကဲများ ဖြစ်ကြသောမိမိတို့နှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသည် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စ်ဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အာဆီယံ–အမေရိကန် မဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်လက်တွဲမှု ခိုင်မာစေရေးအတွက် မိမိတို့ အတူတကွ ချမှတ်ထားသော ကတိကဝတ်ကို အထူးအလေးပေးဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံအချင်းချင်းအကြား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိရေး၊ မြင်သာထင်သာရှိရေး၊ အားလုံးအကျုံးဝင်ရေး မူဝါဒများနှင့်ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမူဘောင်တစ်ရပ်အပေါ် အခြေခံထားသည့် အင်ဒို–ပစိဖိတ်ဆိုင်ရာ အာဆီယံအမြင်၏ အရေးပါမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မိမိတို့ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လွတ်လပ်၍ ...	Read More»
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ TradeNet 2.0 ဝက်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာကို အွန်လိုင်းမှတဆင့် စတင်ဖွင့်လှစ်သည့် အခမ်းအနားတွင် USAID ၏ ဌာနေညွှန်ကြားရေးမှူး အလဲရ်ဂရပ်ဘ်စ်အတွက် ပြင်ဆင်ထားသော မှတ်ချက်အမှာစကား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာပြည်သူတွေကရေးဆွဲကြမယ့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီခရီးလမ်းမှာအရေးပါတဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ပိုပြီးဒီမိုကရေစီဆန်၊ငြိမ်းချမ်းပြီးသာယာဝပြောတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့ကာလတစ်လျောက်အမေရိကန်အစိုးရဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာမိတ်ဆွေအနေနဲ့ရောမိတ်ဖက်အနေနဲ့ပါရပ်တည်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်–၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြောင့် အရင်က မကြုံစဖူးတဲ့ အခြေအနေတွေကို ဖြစ်စေပြီး အစိုးရတွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီက အလျှင်အမြန် အခြေအနေနဲ့ အသားကျအောင် လုပ်ဆောင်တတ်ဖို့ လိုအပ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲမှာ ပထမဆုံး လုပ်ဆောင်ရတဲ့ ကိစ္စတစ်ရပ်က လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ထိတွေ့မှုကို လျှော့ချဖို့ လိုအပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အင်တာနက်ပေါ်က ဝန်ဆောင်မှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ ကျမတို့တွေ တွေ့ဆုံကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ...	Read More»
မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးထွက်ကုန်များအတွက် နိုင်ငံတကာစျေးကွက်အခွင့်အလမ်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲအတွက် USAID/Burma ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရုံးညွှန်ကြားရေးမှူး ပေါလ်ပလီဗါအတွက် ပြင်ဆင်ပေးထားသော မှတ်ချက်အမှာစကား (၂၀၂၀) ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ (၁၁) ရက် အမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖော်ဆောင်နေတဲ့စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဥ်ကိုအခိုင်အမာပံ့ပိုးလျက်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာသာယာဝပြောမှုတွေကိုပိုမိုဖန်တီးဖို့နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အကြားရင်းနှီးမှုပိုမိုခိုင်မာလာစေဖို့အတွက်ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလားအလာအများကြီးကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုရဲ့ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကတော့ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းသစ်တွေကို ရှာဖွေဖို့နဲ့ အားကောင်းလာအောင်ပြုလုပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ USAID ဟာတာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုမြှင့်တင်ဖို့နဲ့စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ဆောင်နေကြသူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေပိုမိုတိုးချဲ့လာနိုင်စေဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေနဲ့မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာစျေးကွက်အခွင့်အလမ်းတွေအကြောင်းကို ကြားသိကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာ USAID Burma Feed the Future အစီအစဥ်ရဲ့ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အစားအစာထုတ်ကုန်စနစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းကလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေ့လာမှုမှာပြည်ပပို့ကုန်အခွင့်အလမ်းသစ်တွေအကြောင်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖော်ပြထားပါတယ်။ USAID ဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေများစွာထဲကမှ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဌကို စတင်ဆောင်ရွက်ဖို့ အကောင်းဆုံးကိစ္စရပ်အဖြစ် မြင်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၃) ...	Read More»
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရုံး ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုက်ကယ် အာ ပွန်ပဲယိုး ၏ ကြေညာချက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲ နိုဝင်ဘာ ၉၊ ၂၀၂၀ နိုင်ငံတော်၏ ဒီမိုကရက်တစ်အသွင်ကူးပြောင်းမှုအတွင်း အရေးပါသောခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှု အဆုံးသတ်ချိန်မှစ၍ ဒုတိယအကြိမ် ပြိုင်ဆိုင်ရသော အမျိုးသားရွေးကောက်ပွဲကြီးဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ပထမဆုံးအကြိမ် မဲပေးခွင့်ရသော လူငယ်များအပါအဝင် သန်းများစွာသောပြည်သူများသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်စားလှယ်များရွေးချယ်သည့်အခွင့်အရေးကို ကျင့်သုံးခဲ့ကြပါသည်။ ဤရွေးကောက်ပွဲကြီးဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အထူးသဖြင့် ကိုဗစ်–၁၉ကပ်ရောဂါစိန်ခေါ်မှုကြီးကြားမှကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ကြသူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ သို့သော်လည်း လွှတ်တော်အတွင်းနေရာများစွာကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသူများမဟုတ်သည့် စစ်တပ်အတွက် ဝင်ရောက်နေရာယူခွင့်ပေးထားသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ရိုဟင်ဂျာအပါအဝင် မဲပေးပိုင်ခွင့်မရရှိကြသောအုပ်စုများ၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအချို့တွင် မဲပေးရန်ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု လျှောက်ထားရာတွင် တစ်ဖက်သတ် ဆုံးဖြတ်မှုနှင့် နိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်မှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တို့ကိုမူတည်၍ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်မှပယ်ဖျက်ခံရခြင်း တို့ကြောင့် ပို၍ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျသောအရပ်သားအစိုးရတစ်ရပ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် ...	Read More»
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရုံး ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် အောက်တိုဘာ ၂၇၊ ၂၀၂၀ အတွင်းဝန် ဒေးဗစ်ဟေးလ် နှင့် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တယ်လီဖုန်းဖြင့် စကားပြောကြားခြင်း အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် မော်ဂန်‌အော်တဂွန်ကို ကိုးကားနိုင်ပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန နိုင်ငံရေးရာအတွင်းဝန် ဒေးဗစ်ဟေးလ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ‌ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ယနေ့ ဖုန်းဆက်စကားပြောဆို၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဒီမိုကရက်တစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၊ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်နေမှု၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပမည့် အများလက်ခံယုံကြည်၍၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော အားလုံးပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အမေရိကန်က ထောက်ခံအားပေးနေမှုကို ထပ်လောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတစ်ဝန်းပဋိပက္ခများ အဆုံးသတ်ရေးနှင့် ရိုဟင်ဂျာ၊ အခြားဒုက္ခသည်များနှင့် ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေရသူများ ၎င်းတို့၏သဘောဆန္ဒအလျောက် လုံလုံခြုံခြုံ၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာဖြင့် ပြန်လာနိုင်ရေး အတွက်လည်း မြန်မာအစိုးရကို အတွင်းဝန်ဒေးဗစ်ဟေးလ်က တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ###	Read More»
အောက်ပါမီဒီယာအသိပေးကြေညာချက်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တစ်ခုဖြစ်သော အမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှု ဘဏ္ဍာရေး ကော်ပိုရေးရှင်း (ဒီအက်ဖ်စီ) ၏ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် မီဒီယာသမားများအနေဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍ USEmbassyRGNPress@state.gov သို့အီးမေးလ်ပို့၍ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုသည်များရှိပါက https://www.dfc.gov တွင်ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။ အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခြင်း အင်ဒို-ပစိဖိတ် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ဒီအက်ဖ်စီ စီအီးအိုက ဦးဆောင်ပါမည် ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် အောက်တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၂၀ ဝါရှင်တန်။ ။ အမေရိကန် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှု ဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်း (ဒီအက်ဖ်စီ) ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် အက်ဒမ်ဘိုးလား ဦးဆောင်သော အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဒေသတွင်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု ပိုမိုတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အောက်တိုဘာ ၂၃ မှ ၂၇ အထိ သွားရောက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဘိုးလားနှင့်အတူ အမေရိကန် ပို့ကုန်-သွင်းကုန်ဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌနှင့်သဘာပတိဖြစ်သူ ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် အောက်တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၂၀ ခရိုင်အဆင့် ဥပဒေရုံး ဆယ်ရုံး ပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရေးအတွက် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံးကို USAID မှ ကူညီပံ့ပိုး ရန်ကုန်။ ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (USAID) ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စအလဲရ်ဂရပ်ဘ်စ်သည် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဒေါက်တာသီတာဦးနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဥပဒေရုံး၏ ကနဦးအစီအစဥ်ကို တိုးချဲ့လိုက်ကြောင်း အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်သော ပွဲတွင် ကြေညာခဲ့သည်။ ထပ်တိုး ဥပဒေရုံး ဆယ်ရုံးက အမှုကိုင်တွယ်ခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းတို့ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် နည်းပညာကို စတင် အသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ဥပဒေရုံးများသည် စံသတ်မှတ်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး ပိုမိုထိရောက်သော တရားစွဲဆိုမှုများကို အထောက်အကူပြုသွားမည် ဖြစ်သည်။ ...	Read More»
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးက ဦးစီးကျင်းပသည့် ဥပဒေရုံး တိုးချဲ့မှုဆိုင်ရာ ကနဦးအစီအစဉ်ထုတ်ပြန်ပွဲတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (USAID) ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စအလဲရ်ဂရပ်ဘ်စ်အတွက် ပြင်ဆင်ပေးထားသော မှတ်ချက်အမှာစကား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀ နာရီ အမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (USAID) က ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့်အတူ လက်တွဲပူးပေါင်း၍ မြန်မာပြည်သူများအတွက် တရားဥပေဒ စိုးမိုးရေး ခိုင်မာအားကောင်းလာအောင် အဓိက ရည်သန်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဟု ယနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာ လိုက်သည်။ နောက်ထပ် ဉပဒေရုံး ၁၀ ရုံးကို တိုးချဲ့ပြီး ကနဦးဥပဒေရုံးအစီအစဉ်ကို ချဲ့ထွင်မည်ဟူသော ပြည်ထောင်စုရှေ့နေ့ချုပ်ရုံး၏ ကြေညာချက်သည် ခေတ်မီပြီး နိုင်ငံတကာတွင် လက်ခံကျင့်သုံးနေသော ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ တရားစွဲဆိုမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လက်ခံကျင့်သုံးသော ဥပဒေရုံး အရေအတွက်ကို နှစ်ဆကျော် တိုးလာစေမည်ဖြစ်သည်။ ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် အောက်တိုဘာလ (၁၅) ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် USAID သည် ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် ပြည်ကြီးခင်နှင့် လက်တွဲအကောင်အထည်ဖော်မည့် တီဘီရောဂါဆိုင်ရာစီမံကိန်းအသစ်ကို စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း ရန်ကုန်၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (USAID) ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စအလဲဂရပ်ဘ်စ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ၀န်ကြီးဌာန၏ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာသန္တာလွင်နှင့်တကွ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားတီဘီရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်မှ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား USAID ၏ Local Action Toward TB-Free Myanmar စီမံကိန်းအသစ်နှင့် စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဤသုံးနှစ်တာစီမံကိန်းသည် တီဘီရောဂါကိုကာကွယ်ရေးနှင့် ကုသရေးအတွက် အမေရိကန်–မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ မှတ်တိုင်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းကို မြန်မာနိုင်ငံ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော ပြည်ကြီးခင်အဖွဲ့က အကောင်အထည်ဖော်မည် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းသည် တီဘီရောဂါခံစားနေရသူများအနေဖြင့် ...	Read More»
Local Action Toward TB-Free Myanmar စီမံကိန်းကို အွန်လိုင်းပေါ်မှ စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်အတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီ (USAID) ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စအလဲရ်ဂရပ်ဘ်စ်အတွက်ပြင်ဆင်ထားသော မှတ်ချက်အမှာစကား USAID လို့ သိကြတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီက Local Action Toward TB-Free Myanmar အမည်ရှိတဲ့ စီမံကိန်းသစ်ကို ဒီနေ့ စတင်မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးနှစ်တာကြာမြင့်မယ့် ဒီစီမံကိန်းသစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း အန်ဂျီအိုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပြည်ကြီးခင်အဖွဲ့က အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာသန္တာလွင်ရဲ့ အဆိုအရ ဒီစီမံကိန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားတီဘီရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ အောင်မြင်စေဖို့ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ အရင်က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် အခြေခံပြီး တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ USAID ရဲ့ ...	Read More»
အမေရိကန်နိိုင်ငံမကောဖ ံွံ့ဖဖိ ြိုးမရြိုးမအဂျင်စီဌောမနညွှန်ကကောြိုးမရြိုးေ ြိုး အလဲဂရပ်ဘ်စ် မေန်ေောနိိုင်ငံ၏ အကျိ ြိုးအမေတ်ရရ ိပိိုင်ဆိိုင်ေှုဆိိုင်ရော အင်တောနက်စောေျက်န ော လွှင ်တင်မြင်ြိုးအြေ်ြိုးအနောြိုးတ င်မမပောကကောြိုးသည ်အေ ောစကောြိုး နံနက် ၁၀ နောရီ၊ မအောက်တိိုဘော ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၀ မပင်ဆင်ထောြိုးသည ်အတိိုင်ြိုး လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော ဒုတိယဝန်က ေး ဥ ေးလ ောင်လ ောင်ဝင်ေး၊ ညွှန်က ောေးလ ေး ေးခ ျုပ် ဦေး န ်ဇင် ွင်၊ မ န် ောနိုင်ငံ EITI ည ိန ိင်ေးလ ေး ေး ဦေးလအေး ွင်၊ မ ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် USAID ဝင်ငွေတိုးငါးမွေးမြူရေးစီမံကိန်းက ငါးမွေးမြူသူများအတွက် ရွှေငါး မိုဘိုင်းဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းကို စတင်မိတ်ဆက် ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၃။ ။ အမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (USAID) ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေညွှန်ကြား‌ရေးမှူး မစ္စအလဲဂရပ်ဘ်စ်သည် ငါးမွေးမြူရေး လုပ်ကိုင်သူများအတွက် အသစ်ရေးဆွဲထားသော ရွှေငါး မိုဘိုင်းဖုန်း အက်ပလီကေးရှင်း (အက်ပ်)ကို အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှတဆင့် မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့် စီမံကိန်း ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးညွန့်ဝင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းကြိုင်နှင့် WorldFish အဖွဲ့မှကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ရွှေငါးအက်ပလီကေးရှင်းသည် ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့်မိသားစုများကို ငါးများသိုလှောင်နည်း၊ အချိုးကျ အစာရောစပ်ပုံနှင့် အစာကျွေးနည်း၊ ငါးကျန်းမာရေးတို့နှင့်ပတ်သက်၍ အချိန်နှင့်တပြေးညီ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ငါးမွေးမြူရေးနည်းပညာများအပြင် အာဟာရ၊ ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေး၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး ...	Read More»
USAID ဌာနေညွှန်ကြားရေးမှူး အလဲဂရပ်ဘ်စ် ငါးမွေးမြူသူများအတွက် ဝင်ငွေတိုးငါးမွေးမြူရေးစီမံကိန်း၏ ရွှေငါးအက်ပ် မိတ်ဆက်ပွဲမှ မှတ်ချက်စကား မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ၊ အောက်တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် [ပြင်ဆင်ထားသောမှတ်ချက်စကား] မင်္ဂလာပါ … ဒီနေ့အခမ်းအနားကို တက်ရောက်လာကြတဲ့အတွက်‌ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ ရွှေငါး လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ mobile application ကိုမိတ်ဆက်တဲ့ အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေငါး mobile application ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှ ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် သူတွေ အထွက်တိုးစေရန်နှင့် စျေးကွက်အသစ်များချိတ်ဆက်ပြီး ဝင်‌ငွေတိုးပွားလာစေရန်အတွက် အထောက်ကူပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ နည်းပညာသုံးထားတဲ့ ရွှေငါး app ဟာ မြန်မာပြည်သူတွေကို ဝင်ငွေတိုးပွားစေရန်သာမက ကိုဗစ်–၁၉ ကဲ့သို့သော စီးပွားရေးရပ်ဝန်းအ‌ပေါ် ရုတ်တရက်ရိုက်ခတ်လာတတ်တဲ့ အခြေအနေတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှာလဲ အထောက်အကူပြုပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေငါး mobile ...	Read More»
မြန်မာနိုင်ငံ ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ရုံးဖွင့်ပွဲတွင် ပြောကြားသည့် သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ ကွမ်ကတ်နို၏ အမှာစကား (ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း) နံနက် ၁၀ နာရီ၊ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ ဂုဏ်သရေရှိ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသန်းမြင့်၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးနဲ့ တကွ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တော်များ၊ ကမ္ဘာ့မူပိုင်ခွင့်အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမူပိုင်ခွင့်ရုံးက မစ္စတာ နိုရီဂျီဆာကာကူယာနဲ့ မစ္စတာဆုစူမူ အီဝါဆာကီ၊ ဦးဇော်မင်းဝင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနဲ့ စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက တာဝန်ရှိသူတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးအသိုင်းအဝိုင်းမှ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား လူကြီးမင်းများ အားလုံးအား ဒီကနေ့ပွဲကို တက်ရောက်လာကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ကို ဥပဒေကြောင်းအရ အကာအကွယ်ပေးမှုတွေ ပိုရှိအောင် လုပ်ဆောင်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကြိုးပမ်းချက်တွေကို ...	Read More»
မဲခေါင်–အမေရိကန် မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းမှု ဝန်ကြီးများ ပူးတွဲ ကြေညာချက် မီဒီယာမှတ်ချက် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရုံး စက်တင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင် ကျင်းပသော မဲခေါင်–အမေရိကန် မိတ်ဖက် ပူးပေါင်းမှု ဝန်ကြီးများအဆင့် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကမ္ဘော ဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အစိုးရများက အောက်ဖော်ပြပါ ကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်သည်။ စာသား အစ– ၁။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် မဲခေါင်ဒေသနိုင်ငံများမှ မိမိတို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများသည် မဲခေါင်အောက်ပိုင်းဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အောင်မြင်မှုအပေါ် ထပ်လောင်းအားဖြည့်သည့်အနေဖြင့် မဲခေါင်–အမေရိကန် မိတ်ဖက် ပူးပေါင်းမှု အစီအစဉ်ကို ၂၀၂၀၊ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် စတင်ကြပါသည်။ မဲခေါင်–အမေရိကန် မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းမှု ...	Read More»
မဲခေါင်ဒေသ၌အမေရိကန်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးချဲ့ရန် မဲခေါင်–အမေရိကန် မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းမှုစတင်ခြင်း အချက်အလက်များ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရုံး စက်တင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၂၀ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့သည် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်တွင် မဲခေါင်–အမေရိကန်မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းမှုကိုစတင်လိုက်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏ကာလရှည်ကြာဆက်ဆံရေးကိုထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်မဲခေါင်ဒေသမိတ်ဖက်နိုင်ငံများ၏ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှု၊စီးပွားရေးအမှီအခိုကင်းမှု၊ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှု၊ရေရှည်တည်တံ့သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစသည့်စံတန်ဖိုးများကိုလက်ကိုင်စွဲထားခြင်းသည်အာဆီယံစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ထိရောက်အစွမ်းထက်ရေးတို့အတွက်လည်းအရေးကြီးသည့်အကြောင်းအလေးထားမှတ်သားကာအဆိုပါစံတန်ဖိုးတို့ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအစီအစဉ်များကိုအမေရိကန်ကွန်ဂရက်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ကြေညာခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးချဲ့ခြင်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (ယူအက်စ်အေ့ဒ်) တို့ သည် ၂၀၀၉ မှ ၂၀၂၀ အတွင်း မဲခေါင်အောက်ပိုင်းဒေသဖွံ့ဖြိုရေး အစီအစဉ်တစ်လျှောက် ဒေါ်လာ ၃.၅ ဘီလီယံနီးပါးအား မဲခေါင် မိတ်ဖက် နိုင်ငံ ငါးနိုင်ငံအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။ ယင်းအကူအညီ ပေးမှုများတွင် — • ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်များအတွက် ဒေါ်လာ ၁.၂ ဘီလီယံ • စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဒေါ်လာ ၇၃၄ ...	Read More»
အာဆီယံအပေါ်ထားရှိသော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ရေရှည်ကတိကဝတ် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် မိုက်ကယ်အာပွမ်ပဲယိုး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၂၀ အမေရိကန်သည် အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် အချိန်ကြာမြင်စွာ မိတ်ဆွေဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ အင်ဒို–ပစိဖိတ်၏ အချက်အချာဖြစ်သော အာဆီယံ၏ အခန်းကဏ္ဍကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက အားပေးကူညီ သွားမည့်အကြောင်း မကြာသေးမီက ကျင်းပခဲ့သည့် အာဆီယံ–အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၏အစည်းအဝေး၌မိမိထပ်လာင်းအတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ အင်ဒို–ပစိဖိတ်နှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အင်ဒို–ပစိဖိတ် မဟာဗျူဟာအအတွက် အာဆီယံ အမြင်သည် အချုပ်အခြာအာဏာ၊ ဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ပွင့်လင်းမှုနှင့် အားလုံးအကျုံးဝင်မှုကို လေးစားခြင်း တစ်ရပ်ရှိသည်ဟူ၍ မျှဝေရှုမြင်ပါသည်။ ဤမျှဝေထားသော မူဝါဒသဘောတရားများသည် အာဆီယံနှင့် မိမိတို့၏ လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု၏ ဗဟိုချက်ကို ဖွဲ့တည်ပြီး ယခုတစ်ပတ်၏ မဲခေါင်–အမေရိကန် မိတ်ဖက်လက်တွဲ ပူးပေါင်းမှု စတင်ခြင်းအတွက် အခြေခံဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးနှင့်ဆိုင်သော ဤစံတန်ဖိုးများကို ...	Read More»
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့်ကျင်းပသည့် ဒသမအကြိမ် အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးအစည်းဝေးပွဲကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပွမ်ပဲယိုး ပါဝင်တက်ရောက်ခြင်း မှတ်တမ်းအနှစ်ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရုံး စက်တင်ဘာ ၉၊ ၂၀၂၀ အောက်ဖော်ပြချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် မော်ဂန်အော်တဂပ်စ်ကို ကိုးကားနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုက်ကယ်လ်အာပွမ်ပဲယိုးသည် ဒသမအကြိမ် အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးညီလာခံ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများ၏ အစည်းအဝေးကို ယနေ့ နံနက်က နိုင်ငံပေါင်း ၁၇ နိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများနှင့်အတူ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ၏ ပွင့်လင်းမှု၊ အားလုံးပါဝင်မှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် လေးစားမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒသဘောတရားများအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ပံ့ပိုးမှုကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပွမ်ပဲယိုး က မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပါသည်။ ဤမူဝါသဘောတရားများသည် မိမိတို့၏ အင်ဒို–ပစိဖိတ် တစ်လွှားအမြင်၊ အင်ဒို–ပစိဖိတ် အပေါ် အာဆီယံ၏ ရှုမြင်ပုံနှင့် အခြား ...	Read More»
အမေရိကန်–အာဆီယံ မဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းမှု အချက်အလက်များ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရုံး စက်တင်ဘာ ၉၊ ၂၀၂၀ အမေရိကန်–အာဆီယံ မဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းမှု ငါးနှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဂုဏ်ယူစွာဆင်နွှဲလိုက်ပါသည်။ ဤမဟာဗျူဟာ မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းမှုသည် အမေရိကန် အင်ဒို–ပစိဖိတ် မဟာဗျူဟာနှင့် အင်ဒို–ပစိဖိတ်ဆိုင်ရာ အာဆီယံအမြင်တို့တွင် ဖော်ပြထားသည် အာဆီယံ ဗဟိုပြုမှု၊ အချုပ်အခြာအာဏာ၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ကောင်းမွန်သော အစိုးရ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ အားလုံးပါဝင်မှု၊ စည်းမျဉ်းအခြေခံမူဘောင်များ၊ ပွင့်လင်းမှုတို့အပါအဝင် တူညီသော အခြေခံမူများအပေါ် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ အနာဂတ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစနစ်များ အားကောင်းလာစေရေး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့ကူညီမှုတွင် ဦးဆောင်နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နေပြီး ယင်းအကူအညီများထဲတွင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၌ လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသော COVID-19 ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အမေရိကန်အစိုးရ၏ ဒေါ်လာ ၈၇ ...	Read More»
အချက်အလက်များ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရုံး စက်တင်ဘာ ၉၊ ၂၀၂၀ အမေရိကန်-အာဆီယံ မဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းမှု ငါးနှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဂုဏ်ယူစွာဆင်နွှဲလိုက်ပါသည်။ ဤမဟာဗျူဟာ မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းမှုသည် အမေရိကန် အင်ဒို-ပစိဖိတ် မဟာဗျူဟာနှင့် အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဆိုင်ရာ အာဆီယံအမြင်တို့တွင် ဖော်ပြထားသည် အာဆီယံ ဗဟိုပြုမှု၊ အချုပ်အခြာအာဏာ၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ကောင်းမွန်သော အစိုးရ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ အားလုံးပါဝင်မှု၊ စည်းမျဉ်းအခြေခံမူဘောင်များ၊ ပွင့်လင်းမှုတို့အပါအဝင် တူညီသော အခြေခံမူများအပေါ် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ အနာဂတ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစနစ်များ အားကောင်းလာစေရေး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့ကူညီမှုတွင် ဦးဆောင်နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နေပြီး ယင်းအကူအညီများထဲတွင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၌ လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသော COVID-19 ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အမေရိကန်အစိုးရ၏ ဒေါ်လာ ၈၇ သန်းကျော် အကူအညီပေးမှုလည်းအပါအဝင် ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ ...	Read More»
အရှေ့တောင်အာရှ လူငယ်ခေါင်းဆောင် မွေးထုတ်ရေး အစီအစဉ် (ဝိုင်ဆီးလီ) အချက်အလက်များ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရုံး စက်တင်ဘာ ၉၊ ၂၀၂၀ အရှေ့တောင်အာရှ လူငယ်ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ရေးအစီအစဉ် (ဝိုင်ဆီးလီ) သည် အရှေ့တောင်အာရှ ပြည်သူများအတွက် အသိပညာဖြန့်ဖြူးပေးရန်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် အမေရိကန်အစိုးရ၏ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်လက်က္ခဏာ အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ဝိုင်ဆီးလီ သည် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများ (အာဆီယံ) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အသင်းအဖွဲ့အားလုံး (ဘရူနိုင်း၊ မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ လာအို၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်္ကာပူ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်) နှင့် တီမောလက်တီမှ လူငယ်များအတွက် လမ်းဖွင့်ထားပါသည်။ ဝိုင်ဆီးလီ အစီအစဉ်များ၏ ကျောင်းသားဟောင်း ၅၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး လူငယ် ၁၅၀,၀၀၀ နီးပါးသည် ဝိုင်ဆီးလီ ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန် ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် သြဂုတ် ၂၆၊ ၂၀၂၀ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးအတွက် တရားရေးကဏ္ဍ သင်တန်းအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကို အမေရိကန်ကပေးအပ်ခြင်း ရန်ကုန်။ ။ ဒေါ်လာ ၃၀,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ တယ်လီကွန်ဖရင့်ပြုလုပ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများအား အမေရိကန်အစိုးရက လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့် အခမ်းအနားကို နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးတွင် ယနေ့ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ယင်းပေးအပ်လှူဒါန်းသည့် အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးနှင့်အတူ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ ဂျော့ချ်ဆစ်ဘလီ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ပစ္စည်းကိရိယာများကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ကိုဗစ်–၁၉ကပ်ရောဂါကာလတစ်လျှောက်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းနေရာခုနစ်နေရာတွင်မြန်မာအစိုးရရှေ့နေများအနေဖြင့်အသိပညာမျှဝေမှုနှင့်သင်တန်းများဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်အတွက်ယင်းပစ္စည်းကိရိယာများကအထောက်အကူပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ “ဒီပစ္စည်းကိရိယာ ပေးအပ်လှူဒါန်းမှုကနေ အစိုးရရှေ့တွေအတွက် အဝေးသင်စနစ်ကို တိုက်ရိုက်အထောက်အကူ ပြုမှာဖြစ်ပြီး တရားရေးကဏ္ဍ ပိုမိုအားကောင်းစေဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လက်တွဲဆောင်ရွက်မှုကို ထပ်လောင်းအားဖြည့်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ ဆစ်ဘလီကပြောကြားသည်။ “ခိုင်မာတဲ့ လက်တွဲမှုဆိုတာ သူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးသက်သေထူပါတယ်။ အချိန်ကောင်းတွေမှာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ စိန်ခေါ်မှု အခက်အခဲတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်တွေမှာလည်း သက်သေထူပါတယ်” “လက်ရှိကျွန်တော်တို့နေထိုင်မှုပုံစံတွေ၊ ...	Read More»
ကလေးစစ်သားအသုံးပြုနေမှုပုံစံအားလုံး မြန်မာစစ်တပ် အဆုံးသတ်ရမည့်အချိန်ရောက်ပြီ ဂျော့ချ်ဆစ်ဘလီ [ဤအတွေးအမြင်ဆောင်းပါးသည် မူရင်းအနေနှင့် ဖရန်တီးယားမြန်မာ မဂ္ဂဇင်းတွင် သြဂုတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၀ တွင်ဖော်ပြထားသည့်ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။] ကျွန်တော် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံရုံးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် သုံးနှစ်တာကာလအတွင်း ၎င်းတို့၏လူမှုအသိုက်အဝန်းများ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ရန်ဆောင်ရွက်မည်ဟူသောသန္နိဋ္ဌာန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေကြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များကို တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြောင့် ကျွန်တော့်အတွက် စိတ်ခွန်အားများဖြစ်စေခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် စိန်ခေါ်မှုများစွာကို ရင်ဆိုင်နေရချိန်၌ ကိစ္စတစ်ခုကို အသေအချာကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသည့်အတွက်လည်း ကျွန်တော်အားတက်ခဲ့ရသည်။ ယင်းကား အခြားမဟုတ်၊ စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းလှသော လူကုန်ကူးမှုဆိုသည်ကို တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရက ဆက်လက်အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်နေခြင်းပင်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ယမှန်နှစ်အတွင်း ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေကို ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့သည်။ ကလေးစစ်သားအသုံးမပြုရေး သဘောတူစာချုပ်ကိုလည်း လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့သည်။ လူကုန်ကူးသူများအား တရားစွဲအရေးယူမှုတို့ တိုးလာခဲ့သကဲ့သို့ လူကုန်ကူးခံရသူများကို ကူညီပံ့ပိုးမှုများပေးအပ်ရာတွင်လည်း ပိုမိုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လူကုန်ကူးခံရသူများကို အကာအကွယ်ပေး၍ ၎င်း၏ပြည်သူများ ခေါင်းပုံဖြတ် ...	Read More»
လင်ကွန်းပညာတော်သင်များ ပညာတော်သင်မသွားရောက်မီ အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် ပါမဲလာဖက်ဆန်ဒန်ပြောကြားသောမှတ်ချက်စကား (ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း) ကြာသပတေးနေ့၊ သြဂုတ် ၁၃၊ ၂၀၂၀၊ နေ့လယ် ၂း၀၀ လင်ကွန်းပညာတော်သင်ဆုရရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုပထမဦးစွာထပ်မံဂုဏ်ပြုလိုပါတယ်။ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဘွဲ့လွန်ပညာကိုစတင်တက်ရောက်သင်ကြားကြတဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေကြစေဖို့ဆုတောင်းပါတယ်။အခုရွေးချယ်ခံထားရတဲ့သူတိုင်းကသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပညာသင်ကြားပြီးတဲ့အခါအမိမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာပြီးပြည်သူတွေအကျိုးသယ်ပိုးကြမယ်ဆိုတဲ့ဂတိကဝတ်တွေပေါ်မူတည်ပြီးလျှောက်လွှာပေါင်းရာကျော်ထဲကနေရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပညာတော်သင်တွေအနေနဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့စီးပွားရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုတွေကိုလေ့လာသင်ယူပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်ယူအက်စ်အေ့ဒ်အနေနဲ့လင်ကွန်းပညာတော်သင်ဆုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို တစ်စိုက်မတ်မတ် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသလို အခုလင်ကွန်းပညာသင်ဆုအစီအစဥ်ကလည်း အမေရိကန်ပြည်သူတွေက သူတို့အတွက် ပံ့ပေးပိုးဖို့ အားစိုက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အရာတွေထဲက အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီက ရှုမြင်ပါတယ်။ ယူအက်စ်အေ့ဒ်ရဲ့ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ညီညွတ်ငြိမ်ချမ်းတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာစေရေးဆိုတဲ့ ခရီးစဉ်ကိုချီတက်နေရာမှာ ပညာတော်သင် သွားထားသူတွေကလည်း ဦးဆောင်ဦးရွက် ပြုလာကြလိမ့်မယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ သဘာဝ အရင်းအမြစ်တွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သလို၊ နိုင်ငံတွင်းမှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ လူမျိုးစုများအားလုံး ပါဝင်ခွင့်ရှိပြီး ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် အခွင့်အရေးတွေကို ပေးနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာမယ်လို့လည်း မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီဖို့အတွက်ယူအက်စ်အေ့ဒ်ကတစ်ဆင့်တစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း၁၅၀ကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှက်ရှိပါတယ်။အဲဒီလိုရင်းနှီးမြှပ်နှံရတာဟာမြန်မာပြည်သူတွေကျန်းမာရေးနဲ့အာဟာရတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်တွေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့၊လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကတစ်ဆင့်ဒုက္ခခံစားရမှုတွေကိုလျှော့ချဖို့၊အားလုံးပိုမိုပါဝင်နိုင်တဲ့ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍလက်လှမ်းမီရရှိမှုအခြေအနေကိုဖန်တီးပေးဖို့၊ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းနဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလူတိုင်းလက်လှမ်းမီလာစေဖို့၊အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လွှတ်တော်၊ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်တို့လိုဒီမိုကရက်တစ်အင်စတီကျုရှင်းတွေခိုင်မာအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ယူအက်စအေ့ဒ်က လင်ကွန်းပညာသင်ဆုအစီအစဥ်မှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် သြဂုတ် ၁၃၊ ၂၀၂၀ ယူအက်စ်အေ့ဒ် လင်ကွန်းပညာတော်သင် ၁၄ ဦး မဟာဘွဲ့တက်ရောက်ရန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ထွက်ခွာ ရန်ကုန် — မြန်မာနိုင်ငံမှလူငယ်ပညာရှင် ၁၄ ဦးသည် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များတွင် ပညာသင်ဆု အပြည့်အဝဖြင့် မဟာဘွဲ့တက်ရောက်ရန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ယခုလတွင် ထွက်ခွာကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (ယူအက်စ်အေ့ဒ်) ၏ ယာယီဌာနေညွှန်ကြား ရေးမှူး မစ္စ ပါမဲလာဖက်ဆန်ဒန် က ယူအက်စ်အေ့ဒ်အနေဖြင့် လာမည့် ငါးနှစ်အတွင်း လင်ကွန်းပညာသင်ဆု အစီအစဥ်ကတဆင့် ကျောင်းသားအယောက် ၁၀၀ ကို ထောက်ပံ့မည့် အစီအစဥ်များ၏ ပထမဦးဆုံးအသုတ် ကျောင်းသားများနှင့် မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ “မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းက အခုလို လူငယ်ခေါင်းဆောင် ၁၄ ဦး မဟာဘွဲ့တက်ရောက်ကြဖို့အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို စေလွှတ်ခွင့်ရလို့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ...	Read More»
CDC မှ Dr. Mitesh Desai ပြောကြားသောအမှာစကား CDC သည် နိုင်ငံများစွာတွင် ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့် ရောဂါကူးစက်မှုများဖြစ်ပွားသည့်အခါ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းပိုမိုအားကောင်းခိုင်မာလာစေရန် အကူအညီပေးရာတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဦးစီးဦးဆောင်အနေဖြင့် နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော် ရပ်တည်လာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် စီဒီစီ မြန်မာရုံးခွဲကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန် စီဒီစီသည် ရေရှည်ရှိထားပြီးဖြစ်သည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုများအပေါ် အခြေပြုကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်–၁၉ ရောဂါဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများကိုပံ့ပိုးကူညီလျက်ရှိပါသည်။ ကိုဗစ်–၁၉ ကပ်ရောဂါမပေါ်ပေါက်မီကာလများစွာကတည်းကပင် စီဒီစီသည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် လက်တွဲပြီးအရေးပါသောကနဦးဆောင်ရွက်မှုများဖြစ်သည့် အိတ်ချ်အိုင်ဗွီနှင့် ငှက်ဖျားရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ရောဂါရှာဖွေ ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်သားများအတွက် သင်တန်းပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် စီဒီစီမှ သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ ကမ္ဘာတဝန်း ကျောက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးအချိန်ကာလမှသည် ပိုလီယိုနှင့် ဝက်သက်ကဲ့သို့သော ...	Read More»
အာဆီယံအဖွဲ့ တည်ထောင်ခြင်း ၅၃ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပွန်ပဲယိုးပေးပို့သောသဝဏ်လွှာ ဒီနေ့ သြဂုတ်လ ၈ ရက်မှာကျရောက်တဲ့ အာဆီယံအဖွဲ့တည်ထောင်ခြင်း ၅၃ နှစ်မြောက်နေ့မှာ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ဆယ်နိုင်ငံနဲ့အတူ အာဆီယံအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးကို ဂုဏ်ယူကြောင်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကိုယ်စား ကျွန်တော်က ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာ ပြောကြားပါတယ်။ ပိုမိုတည်ငြိမ်၊ ပိုမိုသာယာဝပြောပြီး၊ ပိုမိုအေးချမ်းတဲ့ ဒေသကြီးဖြစ်လာဖို့အတွက် အာဆီယံအနေနဲ့ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ပြုစုပျိုးထောင်လာခဲ့တာပါ။ အာဆီယံနဲ့ အာဆီယံဦးဆောင်တဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းယန္တရားတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ မဟာမိတ်တွေနဲ့မိတ်ဖက်တွေဖြစ်တဲ့ အင်ဒို-ပစိဖိတ် ဒေသအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ထားရှိတဲ့ အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ အာဆီယံအကြား မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်လက်တွဲမှုဟာ ကျွန်တော်တို့အတူတကွမျှော်မှန်းထားတဲ့ လွတ်လပ် ပွင့်လင်သော အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသတစ်ခုအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ကို တိုက်ဖျက်ဖို့အတွက် နည်းလမ်း မြောက်များစွာနဲ့ ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၂၀ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်း၏ ကိုဗစ်–၁၉ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အမေရိကန်၏ တစ်ကိုယ်ရေသုံး ရောဂါကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခြင်း ရန်ကုန်။ ။ကိုဗစ်–၁၉ ရောဂါပျံ့နှံ့မှု ကာကွယ်‌ရေးနှင့် လျော့ပါးသက်သာစေခြင်းအလို့ငှာ မြန်မာနိုင်ငံအား ဒေါ်လာ ၉၀,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ ထပ်ဆောင်းအကူအညီ ပေးအပ်ကြောင်းကို ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ကြေငြာလိုက်ပါသည်။ ကိုဗစ်–၁၉ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အမေရိကန်အစိုးရ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ၁၈.၅ သန်းအပြင် ယနေ့တွင် သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ ‌ဂျော့ချ် ဆစ်ဘလီ၏ လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်မှုဖြင့် အမေရိကန် ကာကွယ်‌ရေးဌာနကိုယ်စား ဒေါ်လာ ၉၀,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ တစ်ကိုယ်ရေ သုံး ရောဂါကာကွယ်ရေး ပစ္စည်း (PPE) များကို လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ...	Read More»
ကိုဗစ်–၁၉ တုံ့ပြန်ရေး မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပေးအပ်သော အမေရိကန်အစိုးရ၏ ကျန်းမာ‌ရေးနှင့် လူသားချင်း စာနာမှု အကူအညီ ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၂၀ အထိ ရှိထားသော အချက်အလက်များ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်–၁၉ ကပ်ရောဂါ တုံ့ပြန်ရေးအတွက် အမေရိကန် အစိုးရသည် ဒေါ်လာ ၁၉ သန်းနီးပါး အကူအညီပေးလျက် ရှိပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်သူများမှ အကူအညီပေးသော ရန်ပုံငွေတွင် ကျန်းမာရေး အတွက် ဒေါ်လာ ၁၀.၃ သန်း၊ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ထိခိုက်ခံစားလွယ်ပြည်သူများနှင့် အိမ်ရှင်ပြည်သူများကို အကူအညီပေးရန် အပါအဝင် ဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီအတွက် ဒေါ်လာ ၈.၂ သန်းနှင့် ကူးစက်ရောဂါ စောင့်ကြည့်ရေးနှင့် ကူးစက်ရောဂါ ပျံ့ပွားခြင်းနှင့် ကုသခြင်းဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ အတွက် ဒေါ်လာ ၂ သန်းနီးပါးတို့ ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် ဇူလိုင် ၂၂၊ ၂၀၂၀ ကိုဗစ်–၁၉ အတွက် အမေရိကန်အကူအညီဖြင့် သန်းနှင့်ချီသောမြန်မာပြည်သူများအကျိုးရှိ ရန်ကုန်။ ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကျန်းမာရေးနှင့်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကတစ်ဆင့် သန်းနှင့်ချီသော မြန်မာပြည်သူများအနေဖြင့် ကိုဗစ်–၁၉ ကူးစက်မှုကို လျှော့ချနိုင် သို့မဟုတ် ကာကွယ် တားဆီးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကိုဗစ်–၁၉ ကပ်ဘေးကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ပေးအပ်သည့် အမေရိကန် အကူအညီများသည် မြန်မာပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတိုးတက်မှုအတွက် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ ရေရှည်ကတိကဝတ်ကို ထင်ဟပ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်–၁၉တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးနှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်အများဆုံးပေးအပ်လှူဒါန်းသည့်နိုင်ငံများတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်လည်းတစ်နိုင်ငံအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ “အမေရိကန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ တားဆီးကာကွယ်ရေးဗဟို (စီဒီစီ) ကတစ်ဆင့် အမေရိကန်အစိုးရ အကူအညီ နောက်ထပ် ဒေါ်လာ ၁.၉၅ သန်း ပေးအပ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဒီကနေ့ ကျွန်တော် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာ ပြောကြားလိုပါတယ်။ အခုပေးအပ်တာနဲ့ဆိုရင် ကိုဗစ်–၁၉ တုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါလ ကစပြီး ...	Read More»
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန လက်ထောက်ဝန်ကြီး ဒေးဗစ် စတီးဝဲလ်၏ မှတ်ချက်စကားကောက်နုတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ အပြည့်အစုံကိုအောက်ပါလင့်တွင်ဖတ်နိုင်ပါသည်။ http://go.usa.gov/xfkAT “ဗန်ဂတ်ကမ်း (ဗီယက်နမ်ကမ်းလွန်ရေပြင်)၊ လူကိုနီးယားသောင်စွယ်တွေ (မလေးရှားကမ်းလွန်ရေပြင်) နဲ့ နာတူနာဘီဆာကျွန်း (အင်ဒိုနီးရှားကမ်းလွန်) ဒါမှမဟုတ် ဘရူနိုင်းရေပြင်က သီးသန့်စီးပွားရေးဇုန်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရဲ့ ပင်လယ်ပြင်ဆိုင်ရာ တောင်းဆိုတင်ပြချက်တွေကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ကန့်ကွက်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ အပြုအမူဟာ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ဒါမှမဟုတ် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်စီမံကိန်းကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေဖို့ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီလို အပြုအမူမျိုးတွေကို သူကိုယ်တိုင် တစ်ဖက်သတ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် လုံးဝဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်ပါ။ ပြီးသွားပါပြီ။” “တောင်တရုတ်ပင်လယ် သယံဇာတအရင်းအမြစ်တွေဟာ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ မွေးရာပါ အခွင့်အရေးတွေဖြစ်ပါတယ်၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသကပြည်သူတွေအတွက် အသက်သွေးကြောကြီးဖြစ်ပါတယ်၊ သူတို့ရဲ့ သန်းများစွာသော နိုင်ငံသားတွေအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေဟာ အဲဒီ နိုင်ငံတိုင်းက သား၊ သမီးမြေးမြစ်တွေရဲ့ အမွေဆက်ခံရမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။” ...	Read More»
ကိုဗစ်–၁၉ တုံ့ပြန်ရေး မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပေးအပ်သော အမေရိကန်အစိုးရ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီ ဇူလိုင် ၁၈၊ ၂၀၂၀ အထိရှိထားသောအချက်အလက်များ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်–၁၉ ကပ်ရောဂါတုံ့ပြန်ရေးအတွက် အမေရိကန်အစိုးရသည် ဒေါ်လာ ၁.၈ သန်းကျော် အကူအညီပေးလျက်ရှိသည်။ ဤရန်ပုံငွေများတွင် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက် ဒေါ်လာ ၁၀.၃ သန်း နီးပါးနှင့် ကပ်ရောဂါကာကလအတွင်း ထိခိုက်ခံစားလွယ်ပြည်သူများနှင့် အိမ်ရှင်ပြည်သူများကို အကူအညီပေးရန်အပါအဝင် ဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီအတွက် ပေးအပ်သော ဒေါ်လာ ၈.၂ သန်းလည်းပါဝင်ပါသည်။ ဤအကူအညီသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အမေရိကန်အစိုးရက လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်း ရေရှည်အစီအစဉ်အနေဖြင့် ပေးအပ်လာခဲ့သည့် ဒေါ်လာ ၁.၃ ဘီလျံ အပြင်ထပ်မံပေးအပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယင်း ၁.၃ ဘီလျံတွင် ကျန်းမာရေးအတွက် ပေးအပ်သော ဒေါ်လာ ၁၇၆ ...	Read More»
USAID ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေညွှန်ကြားရေးမှူး ထရီဆာမက်ဂီ ပြောကြားသည့် မှတ်ချက်စကား အွန်လိုင်းမှတဆင့် ပြုလုပ်သည့် မီဒီယာစကားဝိုင်း ဇူလိုင် ၂၂၊ ၂၀၂၀ USAID ဟု သိကြသော အမေရိကန် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီသည် ကိုဗစ်–၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း မြန်မာပြည်သူပြည်သားများကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄.၃သန်းကျော်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ကျန်းမာရေး၊လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအထောက်အပံ့၊စိုက်ပျိုးရေးနှင့်အားလုံးပါဝင်နိုင်သောစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ဒီမိုကရေစီ၊အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်၊လူ့အခွင့်အရေးနယ်ပယ်များနှင့်ပတ်သက်၍လက်ရှိထောက်ပံ့လျက်ရှိသောအစီအစဥ်များအတွက်မိမိတို့၏နှစ်စဥ်ဘတ်ဂျက်အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း၁၅၀အပြင်ယခုထောက်ပံ့မှုကိုထပ်လောင်းထောက်ပံ့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်ရောဂါရောဂါကူးစက်ခံရသည့် ပထမဆုံးလူနာကို မတွေ့ရှိခင် ရက်သတ္တ‌ပတ်ပေါင်းများစွာက တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ရောဂါကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ (PPE) များ စောလျှင်စွာထောက်ပံ့နိုင်ရေးနှင့် နောက်ထပ်ခြေလှမ်းများကို ဆွေးနွေးနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးနှင့် မိမိတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ မတ်လလယ်လောက်တွင် ကူးစက်ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ တိုက်ဖျက်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများကို ကြိုတင်ပြင်ဆိုင်နိုင်ရန်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၈ သန်းထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့သည်။ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူများထဲတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် အလှမ်းဝေးကာ သွားလာရန်ခက်ခဲ့သည့် ပဋိပက္ခကြောင့် ထိခိုက်ခံနေရသောဒေသများရှိ ...	Read More»
တောင်တရုတ်ပင်လယ်က ပြဿနာ မြန်မာအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်နေလဲ ဂျော့ချ် အန် ဆစ်ဘလီ ဇူလိုင် ၁၈၊ ၂၀၂၀ ဤအတွေးအမြင်ဆောင်းပါးသည် မူရင်းအနေနှင့် ဧရာဝတီသတင်းဌာန မြန်မာဘာသာနှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စာမျက်နှာတွင် ဇူလိုင် ၁၈၊ ၂၀၂၀ တွင်ဖော်ပြထားသည့်ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ မကြာသေးမီလများအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသည် ကိုဗစ်–၁၉ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အာရုံစိုက်နေခဲ့ရပြီး အမေရိကန်အပါအဝင် ၎င်း၏မိတ်ဆွေနိုင်ငံများစွာက အကူအညီများပေးရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြသည်။ ကမ္ဘာတလွှား အားလုံးအတူတူ ရုန်းကန်နေရချိန်တွင် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာအနေနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို နှိမ်နှင်းမှုနှင့် အခြားနိုင်ငံများ၏အချုပ်အခြာအာဏာအပေါ် မလေးစားမှုများကို ဆက်လက်ပြသနေခဲ့သည်။ အစိုးရများက ကပ်ရောဂါနှင့် ကပ်ရောဂါကြောင့် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုများကိုပါ နှစ်ထပ်ကွမ်းဘေးဒုက္ခအနေနှင့် တုံ့ပြန်နေခဲ့ရပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကမူ သူပေးခဲ့သည်မှာ နှစ် ၂၀ သာရှိသေးသည့် ကတိတခုကို ချိုးဖောက်၍ ဟောင်ကောင်၏ လွတ်လပ်မှုနှင့် ဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်ကို ရန်လိုစွာ ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် ဇူလိုင် ၁၀၊ ၂၀၂၀ ကိုဗစ်–၁၉ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက မြန်မာနိုင်ငံကို ဒေါ်လာ ၁၆.၅ သန်း အကူအညီပေးအပ် ရန်ကုန်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်–၁၉ ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု လျော့ပါးရေးအတွက် အမေရိကန်အစိုးရက ဒေါ်လာသုံးသန်း ထပ်မံ ပေးအပ်မည်ဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်–၁၉ တုံ့ပြန် တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းက ပေးအပ်လာခဲ့သည်နှင့် ဆိုပါက စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၁၆.၅ သန်း ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီသည် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီ ဤထပ်ဆောင်းရန်ပုံ‌ငွေများကို ထိခိုက်ခံစားလွယ်ပြည်သူများနှင့် ပဋိပက္ခဘေးဒဏ်ခံရသူများအကြား ကိုဗစ်–၁၉ ကူးစက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ “အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ အခုလိုထည့်ဝင်မှုတွေကတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကပြည်သူတွေအတွက် အသက်ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီတွေပေးအပ်နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်–၁၉ တုံ့ပြန်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အမေရိကန်အစိုးရကပေးအပ်လာခဲ့တာ အခုဆိုရင် ...	Read More»
အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးနေ့သဝဏ်လွှာ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၂၀ အခု ဇူလိုင် ၄ ရက် လွတ်လပ်ရေးနေ့၊ ၂၄၄ နှစ်မြောက် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ မွေးနေ့ကို ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ဆင်နွှဲသလို ရိုးရှင်းနှိမ့်ချစွာနဲ့လည်း ဆင်နွှဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ လူမျိုးရေးဆိုင်ရာ မတရားမှုဆိုတာနဲ့ နပန်းလုံးနေရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အဲဒီပြဿနာကို ကျော်လွှားဖို့အတွက် ကာလရှည်ကြာစွာ ကြိုးစားရုန်းကန်လာခဲ့တဲ့ကြားထဲကပဲဆက်ပြီးရင်ဆိုင်ရတာပါ။ နိုင်ငံတစ်ဝန်း အမေရိကန်တွေဟာ လွတ်လပ်မှု၊ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ဘက်က ရပ်တည်ဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ အခွင့်အရေးတွေကို ကျင့်သုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ “လူသားအားလုံး အညီအမျှဖြစ်စေရန် ဖန်တီးထားသည်ဟူသော ပကတိထင်ရှားပြီးဖြစ်သည့် အမှန်တရားများအား ကျွနုပ်တို့စွဲကိုင်ထားရှိပေသည်” ဆိုပြီး လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းပြုစုရေးဆွဲခဲ့သူတွေက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၄၄ နှစ်တုန်းက အတိအလင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကတည်းကစပြီး “ပိုမိုပြီးပြည့်စုံသောပြည်ထောင်စုကြီးတည်ဆောက်ရန်” ဆိုတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက ကျွန်တော်တို့ကို တောင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ...	Read More»
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ သံတမန်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကြေညာချက် ဇွန် ၂၇၊ ၂၀၂၀ ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊ ကျောက်တန်းကျေးရွာအုပ်စုတလျှောက်ရှိ မြန်မာတပ်မတော်၏ နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိ ပိုမိုဆိုးရွားလာသည့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်သည့်အစီရင်ခံစာများအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်မိပါသည်။ ထိုစစ်ဆင်ရေးများ၏ သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများသည် အရပ်သားများအား အချိုးအစားမမျှတစွာ ထိခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကိုဗစ်၁၉ နှင့်မုတ်သုန်ရာသီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများက တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သကဲ့သို့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း သင့်တော်သည့် အကူအညီ ပေးနိုင်ရေးအတွက် အတားအဆီးမရှိသွားရောက်နိုင်ရေးကိုလည်း ခွင့်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ အရပ်သားများ၊ ယင်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများကို အကာအကွယ်‌ပေးရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးက ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျောက်တန်းကျေးရွာအုပ်စုတလျှောက် ရွာသားများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရခြင်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ နေရပ်စွန့်ခွာနေထိုင်သူဦးရေကို သိသာထင်ရှားစွာ ပိုမိုများပြားလာစေပါလိမ့်မည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုမီးရှို့ခြင်း၊ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခြင်း၊ ရွာသားများအားဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံစာများကို ကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိပါသည်။ မိမိနေရပ်ကိုစွန့်ခွာပြီး ...	Read More»
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ သံတမန်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကြေညာချက် ဇွန် ၂၁၊ ၂၀၂၀ လူဦးရေ တစ်သန်းနီးပါရှိသော ပြည်သူများအတွက် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်ရရှိမှုကို ပြတ်တောက်စေခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်အတွင်း အချို့နေရာများ၌ မိုဘိုင်းဒေတာ ဝန်ဆောင်မှု ဖြတ်တောက်ထားခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ဖြတ်တောက်ထားခဲ့ချိန်မှစ၍ သတင်းဌာနများနှင့် သတင်းထောက်များအပေါ် ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုများလည်း ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ ပြည်သူများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်နှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိရေးနှင့်မျှဝေနိုင်ရေးအတွက် အင်တာနက်နှင့် မီဒီယာရရှိရေးမှာ အထူးသဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကာလ နီးကပ်လာချိန်နှင့် ကိုဗစ်–၁၉ ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် လွန်စွာအရေးကြီးပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်လည်း ပဋိပက္ခကာလတစ်ခုအတွင်း၌ပင် အင်တာနက် ကန့်သတ် ချုပ်ချယ်ထားသည့် နယ်မြေများအတွင်း ပြည်သူများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်–၁၉ ကူးစက်ပျံ့ပွားမှု ကာကွယ်တားဆီးရန်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက် လွန်စွာအရေးပါလှပါသည်။ မည်သူမဆို နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်နေသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၂၀ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်–၁၉ တုံ့ပြန်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကူအညီပေးအပ်မှု ဒေါ်လာ ၁၃.၅ သန်းနီးပါးခန့်ရှိလာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်–၁၉ ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ဒေါ်လာလေးသန်း ထပ်မံပေးအပ်မည်ဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်–၁၉ တုံ့ပြန် တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းက ပေးအပ်လာခဲ့သည်နှင့်ဆိုပါက စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၁၃.၅ သန်းရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ ဤထပ်ဆောင်းအကူအညီများကို အမေရိကန် နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လက်လှမ်းမီရရှိရေးရန်ပုံငွေအစီအစဉ် ကတစ်ဆင့် မြန်မာပြည်သူများကို ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရမည့် နယ်ပယ်ဧရိယာများကို ရှာဖွေသတ်မှတ်ရန် မြန်မာအစိုးရ၊ နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးအပ်သည့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြားပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အသက်ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီများကို ပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။ “မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကိုဗစ်–၁၉ တုံ့ပြန်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ပေးအပ်တဲ့ ဒီအမေရိကန်အကူအညီ ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် မေ ၁၉၊ ၂၀၂၀ ပညာသင်ဆုနှင့်နှီးနှောဖလှယ်ရေးအစီအစဉ် အခွင့်အလမ်းများကို အမေကန်သံရုံးကကြေညာခြင်း ရန်ကုန်။ ။ အမေရိကန်အစိုးရကပေးအပ်သော ၂၀၂၀–၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပညာသင်ဆုနှင့် နှီးနှောဖလှယ်ရေးအစီအစဉ် လေးခု အတွက် လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူနေပြီဖြစ်သည့်အကြောင်း အမေရိကန်သံရုံးက ဝမ်းမြောက်စွာ ကြေညာအပ်ပါသည်။ ယင်းပညာသင်ဆုအစီအစဉ်များတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် မဟာဘွဲ့ တက်ရောက်ရယူရမည့် အလုံးစုံပံ့ပိုးပေးသော လင်ကွန်းပညာသင်ဆု (Lincoln Scholarship) နှင့် နိုင်ငံရပ်ခြား ကျောင်းသားများအတွက် ဖူးလ်ဘရိုက်ပညာသင်ဆု (Fulbright Foreign Student Scholarship)၊ ဘွဲ့ရအဆင့်များ အတွက် တစ်နှစ်တာ တက်ရောက်ရမည့် ဟူးဘတ် အိပ်ချ် ဟမ်ဖရီ ဖဲလိုရှစ် (Hubert H. Humphrey Fellowship) နှင့် ဆရာ၊ ဆရာများအတွက် နိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်ကြားမှု ဖူးလ်ဘရိုက်ပညာသင်ဆု (Fulbright ...	Read More»
သံအမတ်ကြီးစကော့မာစီရယ်၏ နှုတ်ဆက်စကား မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီးစကော့မာစီရယ်ပါ။ အခုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ လေးနှစ်ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး တာဝန်ပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြန်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့မိသားစုအတွက် အချိန်ပေးဖို့ မျှော်လင့်စောင့်စားနေပေမဲ့ ဒီမှာရှိတဲ့ ကျွန်တော့မိတ်ဆွေများစွာ၊ ဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာများစွာကိုလည်း သတိရအောက့်မေနေမှာပါ။ အခုလိုခွဲခွာခါနီးမှာ မိနစ်အနည်းငယ်ယူပြီး နှုတ်ဆက်စကား အနည်းငယ်ပြောကြားလိုပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီမရောက်ခင် ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနေခဲ့ဖူးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကပြောပါတယ် ကျွန်တော် ဒီနိုင်ငံမှာ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု နေပြီးသွားတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ဒီနိုင်ငံဟာ ကျွန်တော့ စိတ်ထဲ၊ ကျွန်တော့နှလုံးသားထဲမှာ ထာဝရစွဲထင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ အဲဒါဟာ အမှန်ပဲဆိုတာ ကျွန်တော် အခုသိပါပြီ။ အမေရိကန်တွေတော်တော်များများလိုပါပဲ ဒီနိုင်ငံမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်တစ်ခု တည်ဆောက်ကြဖို့အတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြတာတွေ၊ လူတော်တော်များများ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံကြရတာတွေဟာ ကျွန်တော့မှာရင်ထဲမှာ ရိုက်ခတ်စွဲထင် ကျန်ရစ်နေခဲ့ပါပြီ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလိုပါပဲ မိတ်ဆွေတို့ဟာလည်း ထူးထူးခြားခြား မတူကွဲပြားမှုတွေပေါင်းစုံနေတဲ့ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ထဲကနေပြီး ပိုပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီးတစ်ခု ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် ဧပြီ ၂၈၊ ၂၀၂၀ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်–၁၉ ရောဂါ တုံ့ပြန်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အမေရိကန်က ဒေါ်လာ ၇.၃ သန်း အကူအညီပေးအပ်ခြင်း ရန်ကုန်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်–၁၉ ရောဂါကူးစက်ပျံ့ပွားမှု လျော့ပါးသက်သာရေးအတွက် နောက်ထပ် ‌ဒေါ်လာ ၃.၅ သန်း ထပ်မံအကူအညီ ပံ့ပိုးပေးရန် အမေရိကန်အစိုးရက ကတိကဝတ်ပြုလိုက်ပါသည်။ ယခုအကူအညီသည် ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းက ပေးအပ်ခဲ့သော အကူအညီများနှင့် ဆိုလျှင် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၇.၃ သန်းရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (USAID) သည် ယခုထပ်ဆောင်းရန်ပုံငွေများကို ထိခိုက်လွယ်ပြည်သူများနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လက်လှမ်းမီရရှိရေး ရန်ပုံငွေ (Access to Health Fund) နှင့် လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ပေးအပ်ပါသည်။ အမေရိကန်အစိုးရသည် ...	Read More»
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရုံး ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် ဧပြီ ၂၂ ၊ ၂၀၂၀ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် အာဆီယံသည် ကိုဗစ်–၁၉ ရောဂါကို တိုက်ဖျက်ရေး၊ ရေရှည်ကြံ့ကြံ့ခံ ရပ်တည်နိုင်မှု တည်ဆောက်ရေးနှင့် စီးပွားရေးပြန်လည်နိုးထရေးကို အထောက်အပံ့ပြုလုပ်ရန် လက်တွဲဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် မိုက်ကယ်အာပွန်ပဲယိုး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဧပြီ ၂၂၊ ၂၀၂၀ ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် ကိုဗစ်–၁၉ ကပ်ရောဂါကို တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပြီး စီးပွားရေးပြန်လည်နိုးထမှုအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် အတူတကွရပ်တည်ပေးကြသည့် မဟာဗျူဟာမြောက် လက်တွဲဖက်နိုင်ငံများဖြစ်ပါသည်။ ဤကပ်ရောဂါကို တိုက်ဖျက်ရန်နှင့် ဒေသတွင်း၌ လင်းလက်တောက်ပသည့် အနာဂတ်အား အတူတကွတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းကို ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အာဆီယံနှင့်အတူ ကျွန်တော်တို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန် ကတိပြုထားပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းသို့ အရေးကြီးသော ဆေးပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များအား အဆက်မပြတ် ဝင်ရောက်စီးဆင်းမှုကို ...	Read More»
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရုံး ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် ဧပြီ ၂၂ ၊ ၂၀၂၀ အမေရိကန်–အာဆီယံ အနာဂတ်ကျန်းမာရေး အစီအစဉ် အချက်အလက်များ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရုံး ဧပြီ ၂၂၊ ၂၀၂၀ အမေရိကန်–အာဆီယံ ကျန်းမာရေး အနာဂတ် အစီအစဉ်ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပွန်ပဲယိုးက ယနေ့စတင်လိုက်သည်။ အနာဂတ် ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်သည် မိမိတို့အားလုံးပေါင်း တစ်ဘီလျံရှိသော ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာသုခအတွက် အာဆီယံနှင့်အတူ မိမိတို့၏ ရှိနှင့်ပြီးသောလုပ်ငန်းများနှင့် လက်ရှိလုပ်ငန်းတို့ကို အခြေခံ၍ ရေရှည်တွဲဖက်ဆောင်ရွက်မှု၊ ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်သည့် အကူအညီနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံအကျဆုံးသော အရင်းအမြစ်အပေါ် ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထားသည့် အာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်မှုတို့အပေါ် အုတ်မြစ်ချထားပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် အလေးအနက်ထား၍ ရေရှည်တည်တံ့သော ဆက်ဆံမှုကိုတစ်ရပ်၏ သမိုင်းကြောင်းအဆင့်ကို ကိုယ်စားပြုကာ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သော ...	Read More»
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း တိုက်ခိုက်ခံရမှု အမေရိကန်ရှုတ်ချ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် မော်ဂန်အော်တဂပ်(စ်)၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဧပြီ ၂၂၊ ၂၀၂၀ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအသက်ဆုံးရှုံး၍ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိစေခဲ့သော ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) အမှတ်အသား ရှင်းလင်းစွာပါရှိသည့် ကားတစ်စီး ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဧပြီလ ၂၀ ရက်က တိုက်ခိုက်ခံရမှုကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ရှုတ်ချပါသည်။ ဤမြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေစဉ်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟု မိမိတို့နားလည်ပါသည်။ ဤကမ်းကုန်သောလုပ်ရပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ထိခိုက်လွယ်သောပြည်သူများအတွက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို အားနည်းစေပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲများရပ်တန့်ရန် အမြန်ဆုံးလိုအပ်နေပြီ ဖြစ်သည့်အကြောင်း ထပ်မံ၍မီးမောင်းထိုးပြနေပါသည်။ ဗိုင်းရပ်ပြန့်ပွားမှုရပ်တန့်ရေး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုလည်း အဟန့်အတားဖြစ်စေပါသည်။ ဤဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ရပ် ပြည့်ပြည့်ဝဝဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ကျူးလွန်သူများကို တရားဥပဒေအတိုင်း စီမံဆောင်ရွက်ပေးပါရန် မြန်မာအာဏာပိုင်များကို မိမိတို့တိုက်တွန်းပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ကျန်းမာရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ...	Read More»
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအသက်ဆုံးရှုံး၍ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိစေခဲ့သော ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) အမှတ်အသား ရှင်းလင်းစွာပါရှိသည့် ကားတစ်စီး ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဧပြီလ ၂၀ ရက်က တိုက်ခိုက်ခံရမှုကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ရှုတ်ချပါသည်။ ဤရဲရင့်သော မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးသည် သေစေနိုင်သောဗိုင်းရပ်စ်ဘေးမှ နိုင်ငံတစ်ဝန်းပြည်သူအားလုံးကို ကာကွယ်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်သည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သော ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးစစ်ဆေးရန်အတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ရပ်ကို ပြည့်ပြည့်ဝဝဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ကျူးလွန်သူများကို တရားဥပဒေအတိုင်းစီမံဆောင်ရွက်ပေးပါရန် အာဏာပိုင်များကို မိမိတို့ တိုက်တွန်းပါသည်။	Read More»
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရုံး ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် ဧပြီလ ၁၅၊ ၂၀၂၀ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၅ ရက် အမေရိကန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးဗဟို (CDC) ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးနိုင်ငံတကာအထူးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာဘာဘရာမာစတန်နှင့် အမေရိကန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးဗဟို (CDC) ၏ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနေညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ ဂျွန်မက်အာသာတို့၏ တယ်လီဖုန်းဖြင့်ပြုလုပ်သည့်ဆွေးနွေးပွဲမှ ကောက်နုတ်ချက် အစီအစဉ်မှူး ။ ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ မနီလာမြို့မှာရှိတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အာရှပစိဖိတ်-မီဒီယာဗဟိုစင်တာကနေ အားလုံးကို မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က မီဒီယာစင်တာရဲ့ ဒါရိုက်တာ Zia Syed ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပါဝင်သူတွေကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အန္တလန္တာမြို့ကနေ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်တားဆီးရေးဗဟိုဌာန (CDC) ...	Read More»
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရုံး ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၀ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် မော်ဂန်အော်တဂပ်(စ်) ၏ ဆုတောင်းသဝဏ်လွှာထုတ်ပြန်ချက် မြန်မာနှစ်သစ်ကူး – အတာသင်္ကြန်ပွဲတော် မြန်မာပြည်သူများ မင်္ဂလာရှိသော အတာသင်္ကြန်၊ နှစ်သစ်ကူးအချိန်အခါသမယ ဖြစ်ကြပါစေကြောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစိုးရကိုယ်စား မိမိ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သအပ်ပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ခိုင်မာအားကောင်းသောဒီမိုကရေစီတစ်ရပ်တည်‌ဆောက်ရေး၊ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အပြန့်ကျယ်သောဖွံ့ဖြိုးမှုမြှင့်တင်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်သာယာဝပြောမှုဖော်ဆောင်ရေးတို့အတွက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြသော မြန်မာပြည်သူများနှင့်အတူ ဆယ်စုနှစ်များစွာ မိတ်ဖက်အဖြစ်လက်တွဲလာခဲ့ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့သော နှစ်သစ်အချိန်အခါသမယ၊ အထူးသဖြင့် မိမိတို့နှစ်နိုင်ငံလုံးရော အခြားနိုင်ငံများပါ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် အချိန်အခါတွင် အတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမည့် မိမိတို့၏သန္နိဋ္ဌာန်ကို ထပ်လောင်းအတည်ပြုပါသည်။ မြန်မာပြည်သူအားလုံး လာမည့်နှစ်သစ်အတွင်း ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေကြောင်း မိမိတို့ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သအပ်ပါသည်။ ###	Read More»
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရုံး ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် မတ် ၃၁၊ ၂၀၂၀ COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ဘေး တိုက်ဖျက်ရေး အာဆီယံသို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အကူအညီ COVID-19 ရောဂါကို တုံ့ပြန်ရာတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနှင့် လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ ဦးဆောင်နိုင်ငံအနေဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်ရေး၌ အာဆီယံမိတ်ဖက် နိုင်ငံများသို့ အကူအညီများ လျင်မြန်စွာပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ကပ်ဘေးဆိုက်ရောက်သည့် အချိန်ကတည်းကစ၍ အမေရိကန်အစိုးရသည် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအတွက် အရေးပေါ် ကျန်းမာရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ ဒေါ်လာ ၁၈.၃ သန်းခန့် ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာအရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ် ၂၆ ရက်အထိ အဓိက လိုအပ်သောနိုင်ငံများ သို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် ဧပြီ ၆၊ ၂၀၂၀ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ နေရပ်ပြန်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်သံရုံးသတင်းထုတ်ပြန်ချက် တစ်ခါမျှမကြုံဖူးသော ယခုကဲသို့ အခက်အခဲ ကာလအတွင်း နေရပ်ပြန်ကြသူ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့် အမေရိကားတွင် နေထိုင်သူ ၂၆၇ ဦးကို အမေရိကန်သံရုံးက ယနေ့အကူအညီများပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန်အစိုးရက စီစဉ်ပေးသော လေယာဉ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာ သွားကြသူများ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းဖြင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ အိမ်ပြန်ရောက်ကြပါစေကြောင်း မိမိတို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါသည်။ ဤလေယာဉ်ခရီးစဉ် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် အကူအညီပေးအပ်ကြသော မြန်မာအာဏာပိုင်များကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်လည်း အမေရိကန်သံရုံးသည် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ တုံ့ပြန်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ရပ်ရွာလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ အနီးကပ်လက်တွဲ၍ တစ်စိုက်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ရေနှင့်ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးအထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်မှုစီမံခန့်ခွဲရေး၊ ရောဂါစောင့်ကြပ် ...	Read More»
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်များ၏ ထုတ်ပြန်ချက် ဧပြီ ၁ ရက် ၂၀၂၀ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်က ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲကြရန် မတ်လ(၂၃)ရက်နေ့က ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။ ပူးတွဲဖော်ပြပါနိုင်ငံအသီးသီးမှ သံအမတ်များကလည်း အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏တိုက်တွန်းချက်အား သဘောတူထောက်ခံကြပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် တိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်လျက်ရှိပြီး အရပ်သားများနေရပ်စွန့်ခွာရခြင်း၊ အသက်ဆုံးရှုံးရခြင်းများကိုသိရှိရပြီး အခြားသောဒေသများတွင်လည်း ပဋိပက္ခအလားအလာများကို ကြားသိရသည့်အတွက် အမှန်ပင်စိုးရိမ်မိပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ နိုင်ငံများအားလုံးအနေဖြင့် Covid-19ရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကြောင့် အတိဒုက္ခရောက်နိုင်သည့် အခြေအနေတွင်ရှိနေသူများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် ဦးစားပေးဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ စစ်ရေးပဋိပက္ခသည် စစ်ဘေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေသော အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးသူငယ်များ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ ဖယ်ကျဥ်ခံရသူများ နှင့် နေရပ်စွန့်ခွာရသူများထံသို့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များကိုနှောင့်နှေးစေပြီး အကူအညီများကိုလည်း အဟန့်အတားဖြစ်စေပါသည်။ စစ်မက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့်ဒေသများတွင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာ အကူအညီရရှိရန်မှာ အထူးပင်အရေးကြီးလျက်ရှိပါသည်။ အင်တာနက်နှင့်သတင်းမီဒီယာများမှတဆင့် ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် မတ် ၁၈၊ ၂၀၂၀ လတ်တလောအဆုတ်ရောင်ရောဂါ နိုဗယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ကိုတုံ့ပြန်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအား အမေရိကန်က ထပ်တိုးအကူအညီပေးအပ်ခြင်း ရန်ကုန်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း COVID-19 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု လျော့ပါးသက်သာရေးအတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (USAID) ၏ တစ်ဦးမှတစ်ဦးသို့အလွယ်တကူကူးစက်တတ်သော ရောဂါအတွက် အရေးပေါ် အရန် ရန်ပုံငွေ အစီအစဉ်မှနေ၍ ‌ဒေါ်လာ ၁.၈ သန်း ငွေကြေးအကူအညီ ထောက်ပံ့ပေးရန် အမေရိကန်အစိုးရက ရည်သန်ကတိပြုထားပါသည်။ USAID သည်ယခုရန်ပုံငွေများကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO)၊ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (UNICEF) နှင့် USAID’s “Breakthrough Action” စီမံကိန်း၏မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော Save the Children နှင့် ဂျွန်ဟော့ပ်ကင်းတက္ကသိုလ်တို့ကိုပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ USAID သည် ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် မတ် ၁၂၊ ၂၀၂၀ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ကျဆုံးခဲ့သော အမေရိကန်စစ်သည်များအားဂုဏ်ပြုသည့် အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း မန္တလေး။ ။ အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ စစ်ကြွင်းရှာဖွေမှတ်တမ်းတင်ရေး အေဂျင်စီ (ဒီပီအေအေ) ၏ အစီအစဉ်ကတစ်ဆင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဆာလင်းကြီး ဒေသတစ်ဝိုက်တွင် မကြာသေးမီက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ကျဆုံး၊ ပျောက်ဆုံး ကျန်ရစ်ခဲ့သော အမေရိကန် စစ်သည်များ၏ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော လူသားရုပ်ကြွင်းများကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ယနေ့ ပြန်လည် သယ်ယူပို့ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဤရုပ်ကြွင်းများသည် မည်သူမည်ဝါ၊ မည်သည့်အရာ ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိသည်များကို ဆက်လက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့် ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဟာဝိုင်အီရှိ ဒီပီအေအေ၏ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ပြန်လည်သယ်ယူပို့ဆောင်သည့် အခမ်းအနားကို မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် မတ် ၆၊ ၂၀၂၀။ COVID-19 အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံက ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနအားကူညီခြင်း နေပြည်တော် – ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါ (COVID-19) ကူးစက်ပျံ့နှံ့နိုင်ချေရှိသည့် အခြေအနေအားလုံး အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရာတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် မြန်မာနိုင်ငံအား ဆက်လက်ကူညီ ပေးလျက်ရှိသလို မိတ်ဖက်အဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မတ် ၆ရက်တွင် အမေရိကန် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (USAID) ဌာနေညွှန်ကြားရေးမှူး ထရီဆာ မက်ဂီးက တစ်ကိုယ်ရေသုံးရောဂါကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးအား ပေးအပ်လိုက်ပါသည်။ အလွယ်တကူကူးစက် တတ်သောရောဂါများအတွက် USAID ၏ အရေးပေါ်သီးသန့်ရန်ပုံငွေထဲမှနေ၍ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် (COVID-19) ဒဏ်ခံရသောနိုင်ငံ ၂၅ခုသို့ ဒေါ်လာ ၃၇သန်း အကူအညီပေးသွားမည့် မကြာသေးမီက ကြေညာချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မစ္စ ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀ လင်ကွန်းပညာတော်သင်ဆုအစီအစဉ်ဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် မဟာဘွဲ့တက်ရောက်ကြမည့် ပညာတော်သင် ၁၇ ဦးအား သံအမတ်ကြီးကဂုဏ်ပြုခြင်း ရန်ကုန်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးရှစ်ခုတို့မှ လူငယ်ခေါင်းဆောင် ၁၇ ဦးသည် အမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ၏ လင်ကွန်းပညာတော်သင်ဆု အစီအစဉ်ဖြင့် ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များ၌ ကျောင်းတက်ကြမည့် အကြောင်း အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး စကော့မာစီရယ်က ယနေ့ကြေညာလိုက်ပါသည်။ “မြန်မာနိုင်ငံအောင်မြင်တာကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက မြင်တွေ့ချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းက ဒီလူငယ်ခေါင်းဆောင် ၁၇ ဦးကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ မဟာဘွဲ့ တက်ရောက်သင်ယူဖို့ စေလွှတ်ရတဲ့ အတွက် များစွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ကို ပုံဖော်ရာမှာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းကထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ လူငယ်တွေ ပညာရေးနဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံတွေရရှိစေဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အခုလိုပညာသင်ဆုတွေ ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးဦးဆောင်သော ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မန္တလေးသို့သွားရောက်ခြင်း မန္တလေး။ ။ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးစကော့မာစီရယ်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ဒေသတွင်းရှိ ကုမ္ပဏီ ၁၃ ခု၊ အမေရိကန် ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (မြန်မာ)၊ အမေရိကန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်​ဆောင်မှုအဖွဲ့တို့ ပါဝင်သော စီးပွားရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တစ်ခုကိုဦးဆောင်၍ မန္တလေးသို့သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကုန်သွယ်မှု တိုးချဲ့ရေးနှင့် စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်ရေးအတွက် အခွင့်အလမ်းများကို စူးစမ်းရှာဖွေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်စီးပွားရေးအဖွဲ့၏ နှစ်ရက်တာမန္တလေးခရီးစဉ်အတွင်း စီးပွားရေးကိုယ်စားလှယ်အယောက် ၂၀ သည် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ အစိုးရတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အချိတ်အဆက် ရရှိရန်အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြပွဲတစ်ခုကိုလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ “မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ ကုန်သွယ်မှု တိုးမြှင့်ရေးအတွက် ...	Read More»
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းနိုင်ငံများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကာလတစ်ခုအပြီး ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်တွင် နောက်ကြောင်းရာဇဝင်စုံစမ်းခြင်းနှင့် ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ခြင်း ရှိမရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်မြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာ ကြေညာချက်တစ်စောင် (Proclamation on Improving Enhanced Vetting Capabilities and Processes for Detecting Attempted Entry) ကို သမ္မတက လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါသည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ လုံခြုံရေးနှင့် လူမှုဘဝဖူလုံရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အလို့ငှာ သတင်းအချက်အလက် မျှဝေကျင့်သုံးမှု အားနည်းသည့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံသားများကို ပြည်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်ရန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနကို ဤကြေညာချက်ဖြင့် ညွှန်ကြားလိုက်ပါသည်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း၏ အကြောင်းကိစ္စပေါ်မူတည်၍ အကန့်အသတ်ဖြင့် ခြွင်းချက်နှင့် ဖြေလျှော့ပေးခြင်း ရှိနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံခြောက်နိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားများ ကန့်သတ်ခြင်းခံရခြင်းတွင် ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် ဇန်နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၂၀ အမေရိကန်သံရုံးနှင့် အာရှဖောင်ဒေးရှင်းက မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းအတွက် စာအုပ် ၉၀၀၀ ကျော်လှူဒါန်းခြင်း ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။ ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း ၁၃၉ ခုအတွက် စာအုပ်ပေါင်း ၉၀၀၀ ကျော် အမေရိကန်သံရုံးနှင့် အာရှဖောင်ဒေးရှင်းတို့ ပူးပေါင်းလှူဒါန်းသည့် အခမ်းအနားတစ်ခု အမေရိကန်စင်တာ ရန်ကုန်တွင် ယနေ့ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အာရှဖောင်ဒေးရှင်းသည် အမေရိကန်သံရုံး၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား စာကြည့်တိုက်နှင့် ပူးပေါင်းကာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထုတ်ဝေထားသော ပညာရေးဆိုင်ရာ အရည်အသွေးမြင့် စာအုပ်များနှင့် ကလေးစာပေစာအုပ်များကို မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လှူဒါန်း လာခဲ့သည်မှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကတည်းကဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၁၃ နှစ်တာ ကာလအတွင်း အမေရိကန်သံရုံးနှင့် အာရှဖောင်ဒေးရှင်း သည် နိုင်ငံတစ်ဝန်း ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအတွက် စာအုပ်ပေါင်း ၂၈၀,၀၀၀ ...	Read More»
သံအမတ်ကြီးစကော့မာစီရယ်။ ။ အခုလိုမိတ်ဆက်စကားပြောကြားပေးတဲ့ ပါမောက္ခ ချောချောစိန်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မှာ အရေးပါတဲ့အချက်ကတော့ ဆရာမလိုပါပဲ ကျွန်တော်လည်း နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာရပ်ကို သင်ယူခဲ့ရတာပါ။ ကျွန်တော် ဒီဘာသာရပ်ကို ဘွဲ့ကြိုဘာသာရပ်အနေနဲ့ သင်ယူခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ ဘွဲ့လွန်အနေနဲ့လည်းထပ်ပြီး သင်ယူခဲ့ပါသေးတယ်။ ရလဒ်ကတော့ ကျွန်တော် သံတမန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုဖို့အတွက် ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းသောမနက်ခင်းပါ။ ဒီနေ့အခုလိုအချိန်ပေးပြီးလာကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပါမောက္ခကြီး ပြောသွားသလိုပါပဲ။ အမေရိကန်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဟောပြောပေးဖို့ ပါမောက္ခကြီး တောင်းဆိုတဲ့အတွက် အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တကယ်လည်းအချိန်ကောင်းပါပဲ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်ပြီးချိန် ဆယ်စုနှစ် အသစ်တစ်ခုကို စတင်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေလို့ပါ။ ၂၀၂၀ ပြည့်လွန်နှစ်များဟာ နှစ်သစ်တစ်ခုတင်မကပါဘူး၊ ဆယ်စုနှစ်အသစ် တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်မှာ ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ ပြီးမြောက်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာ ပြန်ပြီးကြည့်နိုင်သလို၊ အခုလိုဆက်ဆံရေးမှာ နောင်လာမယ့်ဆယ်စုနှစ် ...	Read More»
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရုံး ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် ဇန်နဝါရီ ၂၊ ၂၀၂၀ ဝန်ကြီးပွန်ပဲယိုး၏ ကြေညာချက် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေ့ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင် ကျရောက်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခါသမယတွင် မြန်မာြပည်သူများကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုယ်စား မိမိဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါသည်။ ဆက်လက်ဖော်ဆောင်လျက်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရက်တစ် အပြောင်းအလဲ၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးအသွင်ကူးပြောင်းရေးတို့တွင် ထောက်ခံအားပေးကာ မြန်မာပြည်သူများနှင့်အတူ လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များစွာကကဲ့သို့ပင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဆက်လက်သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါသည်။ ပြည်သူအားလုံး၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အခွင့်အရေးများကို လေးစားတန်ဖိုးထား၍ ငြိမ်းချမ်းကာ ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားသော သာယာဝပြောသည့် မြန်မာနိုင်ငံအဖြစ် အောင်မြင်နိုင်ရေးအကူအညီပေးရန်အတွက် အစိုးရ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူငယ်များနှင့်အတူ ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လာမည့်နှစ်တွင် မြန်မာြပည်သူပြည်သားအားလုံး ငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောပါစေကြောင်း မိမိဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ်ပါသည်။ ###	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် ၂၀၁၉၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ဆက်သွယ်ရန်။ ။ ဟိုဆေးဂီယိုဂါ အီးမေးလ်။ ။ Jose.Quiroga@asu.edu အမေရိကန်သံရုံးသို့ဆက်သွယ်ရန်။ ။အရာနီမန်ရင်း အီးမေးလ်။ ။ USEmbassyRGNPress@state.gov မဲခေါင်မြစ်အောက်ပိုင်းနိုင်ငံများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကျင်းပသော နှစ်စဉ်သိပ္ပံနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို အမေရိကန်ကကူညီပံ့ပိုးခြင်း ရန်ကုန်။ ။ လက်တွေ့ကမ္ဘာတွင်ဖြစ်ပွားနေသော ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းခြင်းသည် သိပ္ပံပညာရှင်များအပါအဝင် နယ်နမိတ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဖြစ်စေပါသည်။ သည့်အတွက်ကြောင့်ပင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဒီဇင်ဘာ ၁၂–၁၃ တွင်ကျင်းပသော မဲခေါင်မြစ်အောက်ပိုင်းဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လူငယ်သိပ္ပံပညာရှင်အစီအစဉ်၏ သိပ္ပံနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် မဲခေါင်မြစ်အောက်ပိုင်းဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သော နိုင်ငံငါးနိုင်ငံဖြစ်သည့် မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှ သုတေသနပညာရှင်များနှင့် သိပ္ပံပညာရှင်ပေါင်း တစ်ရာကျော် တက်ရောက်ဆွေးနွေးနှီးနှောဖလှယ်ခဲ့ကြပါသည်။ မြစ်ခေါင်မြစ်အောက်ပိုင်း နိုင်ငံများမှ လူငယ်သိပ္ပံပညာရှင် ၃၃ ဦးက မဲခေါင်မြစ် အောက်ပိုင်းဒေသတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရေရှည်တည်တံ့ရေးဆိုင်ရာ ...	Read More»
Remarks as prepared for U.S. Ambassador Scot Marciel Lincoln Scholarship launch
Remarks as prepared for U.S. Ambassador Scot Marciel Lincoln Scholarship launch Tuesday, November 26, 2019 Pathein Ballroom, Novotel Hotel, Yangon. အမေရိကန် သံအမတ်မှ အဖွင့်အမှာစကား ကျွန်တော် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေလာတဲ့ သုံးနှစ်ခွဲအတွင်းမှာ နိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတဲ့ အားတက်စရာထူးချွန်တဲ့သူ ရာပေါင်းများစွာကို ဆုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ တစ်‌ယာက်ချင်းစီက ၎င်းတို့၏ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် နိုင်ငံအတွက်ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ်ကို ထူထောင်နိုင်ရန် အားသွန်ခွန်စိုက်ကျိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။ ဒီမှာရှိတဲ့ လူငယ်ခေါင်းဆောင် များကလည်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘာကြီးကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်စေရေး နည်းလမ်းများရှာဖွေကြံဆရန် တီထွင်ဆန်းသစ်လျက်ရှိပြီး သံဓိဌါန် ချထားကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က မြန်မာနိုင်ငံအောင်မြင်တာကို မြင်လိုပါသည်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာ ...	Read More»
By U.S. Mission Burma | 26 နိုဝင်ဘာ, 2019 | Categories: Uncategorized
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် သွားရောက်ပညာသင်ကြားပြီး မဟာဘွဲ့များရရှိနိုင်မည့် Lincoln Scholarship နှင့်ပတ်သက်၍ သံအမတ်ကြီးက ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း
FOR IMMEDIATE RELEASE November 26, 2019 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် သွားရောက်ပညာသင်ကြားပြီး မဟာဘွဲ့များရရှိနိုင်မည့် Lincoln Scholarship နှင့်ပတ်သက်၍ သံအမတ်ကြီးက ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း ရန်ကုန်မြို့ – အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Mr. Scot Marciel က မြန်မာနိုင်ငံတစ်၀ှမ်းမှ လူငယ်ခေါင်းဆောင် ၁၀၀ နီးပါးတို့ Lincoln Scholarship ဖြင့် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များတွင် အရည်အသွေးမြင့်မဟာဘွဲ့များရယူနိုင်မည်ဟု အမေရိကန် သံအမတ် Mr. Scot Marciel က ထုတ်ပြန်‌‌ကြေငြာခဲ့ပါသည်။ သံအမတ်ကြီး Mr.Scot Marciel က “ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက မြန်မာနိုင်ငံ အောင်မြင်သည်ကို မြင်လိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့က ဤနိုင်ငံအနှံမှ လူငယ်ခေါင်းဆောင်များကို Lincoln Scholarship အစီအစဉ်အသစ်ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် နိုဝင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၉ မြစ်ကြီးနား။ ။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး စကော့မာစီရယ်က ကချင်ပြည်နယ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလန်းမှုအားကုသခြင်း၊ ပြည်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်တားဆီးခြင်းလုပ်ငန်းများမှ တဆင့် မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာကိုလျှော့ချနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေကြသော ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ တစ်ရပ်ကို ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ သံအမတ်ကြီး မာစီရယ် က “မူးယစ်ဆေးစွဲလန်းမှု ပြဿနာဟာ မိမိတို့အနေနဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာလည်း ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပြဿနာကို မိမိတို့အနေနဲ့ စာနာနားလည်မှုနဲ့ အတွေ့အကြုံတွေအပေါ် အခြေပြုပြီး ကူညီပေးလိုပါတယ်” ဟု အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ “ကချင်ပြည်နယ်ရှိ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတော်များများနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာလည်း မူးယစ်ဆေးဝါးပြန့်နှံ့မှုပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာကို သိရှိနားလည်ထားပြီးတော့ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ‌ဒေသခံ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကို ကူညီနိုင်ဖို့ မိမိတို့အနေနဲ့ နည်လမ်းတွေ ရှာဖွေသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ...	Read More»
ကြာသပတေး၊ နိုဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၉ ပမ်းစပရင်းဟိုတယ် မြစ်ကြီးနားတွင်ကျင်းပသော အမေရိကန်သံရုံးဧည့်ခံပွဲ၌ ပြောကြားသည့် သံအမတ်ကြီး၏မိန့်ခွန်း ဒီညချမ်းမှာ အခုလို ကြွရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တော်အားလုံးကို‌ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားကို ထပ်ပြီး လာရောက်ရတာလည်း ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အခုလို ဘာလို့လာရောက်ရတာလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်း အနည်ငယ်ပြောပြီး အခမ်းအနားကို စတင်ချင်ပါတယ်။ မြစ်ကြီးနားကို ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန် အမေရိကန်သံရုံးကနေ အဖွဲ့လိုက် လာခဲ့ကြတာပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကချင်ပြည်နယ်က ပြည်သူလူထုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သမိုင်းဝင်ဆက်ဆံရေး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရေရှည်အားပေးကူညီမှုကို လေးစား တန်ဖိုးထားမှု၊ ဒီမှာနေထိုင်ကြတဲ့ ပြည်သူအားလုံးအတွက် တောက်ပပြီး သာယာဝပြောတဲ့ အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ထားရှိထားတာဖြစ်လို့ အခုလိုလာခဲ့ကြတာြဖစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ သေချာတာပေါ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက အမေရိကန်တွေနဲ့ ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် နိုဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၉ မြစ်ကြီးနား။ ။အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး စကော့မာစီရယ် သည် ကချင်ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍတွင် ဆောင်ရွက်နေသူ ၆၀ ကျော်တို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ တောင်သူများနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးအခြေပြု အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ တိုးတက်စေရေးတွင် ရင်ဆိုင်နေရသော အချက်အခဲများကို ကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (USAID) ၏ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အစားအစာထုတ်ကုန်စနစ်ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်း က မည်သို့ကူညီနိုင်မည်ဆိုသည်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ “အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဌ ဦးစားပေး စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် ကတိကဝတ်ပြုထားပါတယ်။ USAID အနေနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်း စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ မကြာသေးမီက တိုးချဲ့ခဲ့ပါတယ်” ဟု သံအမတ်ကြီး မာစီရယ်က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ “စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် နိုဝင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၉ အသင်းအဖွဲ့ဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအနိုင်ယူရေး အမေရိကန်သံရုံးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တို့က မီးမောင်းထိုးပြခြင်း ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။ ။ အမေရိကန်သံရုံးနှင့်မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တို့ပူးပေါင်း၍ မူးယစ်ဆေးကိုအောင်နိုင်ဖို့ စာနာနားလည်ကူညီကြစို့ ‘Community Champions’ ဟူသည့် အားကစားအစီအစဉ်ကို ကျင်းပနေပါသည်။ ယင်းအားကစားအစီအစဉ်ကို အမျိုးသား ဘောလုံးအကယ်ဒမီ ကွင်းတွင် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားဖြင့် စတင်လိုက်ပါသည်။ “အားကစားဆိုတာ အသင်းအဖွဲ့တွေဖြစ်လာစေဖို့နဲ့လူမှုအသိုက်အဝန်းတွေ အတူတကွဖြစ်စေဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်” ဟု သံအမတ်ကြီးမာစီရယ်ကပြောပါသည်။ “အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရော မြန်မာနိုင်ငံမှာပါ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေဟာ မူးယစ်ဆေးပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ အသင်းအဖွဲ့နဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ နားလည်မှုတွေ၊ နည်းပြသမားတွေနဲ့ အသင်းအဖွဲ့သားတွေလိုမျိုး ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာ မူးယစ်ဆေးအပေါ်မှီခိုနေကြတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက လူတွေအပေါ် စာနာနားလည်ပေးနိုင်မယ့် နမူနာတွေလို့ ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်” ဟုသံအမတ်ကြီးက ထပ်မံဖြည့်စွက် ပြောကြားသည်။ မူးယစ်ဆေးကိုအောင်နိုင်ဖို့ စာနာနားလည်ကူညီကြစို့ ‘Community ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၉ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။ ။ လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မန္တလေးမြို့ရှိ ရွှေနန်းတော်ကျောင်းကြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းအတွက် အမေရိကန်သံရုံးက ဒေါ်လာ သုံးသိန်း ဆက်လက်အကူအညီပေးမည့်အကြောင်း ဝမ်းမြောက်စွာ ကြေညာအပ်ပါသည်။ ဤအရေးပါလှသော ယဉ်ကျေးမှုအမွေအဆောက်အအုံ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အကူအညီပေးအပ်လာခဲ့သည့်မှာ ယခုအကူအညီအပါအဝင် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁.၁ သန်း ရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဤအကူအညီမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး သံအမတ်ကြီးများရန်ပုံငွေ အစီအစဉ်ကတစ်ဆင့် ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ “မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝလှတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအမွေအနှစ်တွေကို ကျွန်တော်တို့လေးစားတန်ဖိုးထားပါတယ်” ဟု စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သံအမတ်ကြီး စကော့မာစီရယ်ကပြောပါသည်။ “ဒီသမိုင်းဝင်ကျောင်းတော်ကြီး ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အကူအညီပေးတာဟာ ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးရှိသလို ခရီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက်လည်း ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၉ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး စတေးဝဲလ်၏ အောက်တိုဘာ ၂၇-၃၀၊ ၂၀၁၉ ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်သံရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက် မြန်မာပြည်သူများ လိုလားတောင့်တနေသည့် ပိုမိုငြိမ်းချမ်းမှု၊ သာယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လွတ်လပ်မှုနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ရေရှည်အားပေး ထောက်ခံသွားမည့်အကြောင်း အောက်တိုဘာ ၂၇-၃၀ ၎င်း၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း အရှေ့အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ရေးရာ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေးဗစ်စတေးဝဲလ်က ထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် မြန်မာပြည်သူများနှင့်အတူ လက်တွဲဖက်အနေဖြင့်ရော၊ မိတ်ဆွေအနေဖြင့်ပါ ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမည့်အကြောင်း ရန်ကုန်၊ စစ်တွေနှင့် နေပြည်တော်တွင် အစိုးရ၊ လူမှုအသိုက်ဝန်း၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်း လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး စတေးဝဲလ်က အထူးအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လက်ထောက်ဝန်ကြီး စတေးဝဲလ်သည် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရက်တစ်အကူးအပြောင်းနှင့် စီးပွားရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုအတွက် အမေရိကန် ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၉ ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အာရှဒေသတွင်း စားနပ်ရိက္ခာနှင့် အာဟာရဖူလုံမှု မြှင့်တင်ရေးဖိုရမ်အား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ပံ့ပိုးကူညီ ရန်ကုန် ။ ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဒေသတွင်းရှိ သုတေသနပညာရှင်များ၊ မူဝါဒချမှတ်သူများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်သူများသည် နှစ်ရက်ကြာ ဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့မှ စတင်ကာ ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အာရှဒေသတွင်းရှိ အခြားသောနိုင်ငံများတွင် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့် အာဟာရချို့တဲ့မှုကို လျင်မြန်စွာ လျှော့ချနိုင်စေရေး အသိပညာ ဗဟုသုတများ မျှဝေကြရန် ဖြစ်ပါသည်။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်သော မြန်မာနိုင်ငံ လူနေမှုဘဝနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အခြေခံ အချက်အလက်စစ်တမ်း (DHS) မှ အချက်အလက်များအရ အသက်ငါးနှစ်အောက် ကလေးငယ်တို့၏ သုံးပုံတစ်ပုံမှာ ပုံမှန်ကောင်းမွန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှု ...	Read More»
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရုံး ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် မီဒီယာများသို့အသိပေးခြင်း အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၉ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေးဗစ် အာ စတေးဝဲလ် ဂျပန်၊ မြန်မာ၊ မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ ဆိုးလ်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေးဗစ် အာ စတေးဝဲလ် သည် တိုကျို၊ ရန်ကုန်၊ ဘန်ကောက်၊ ဆိုးလ်နှင့် ပေကျင်းသို့ အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်အထိသွားရောက်ပါမည်။ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသည် အောက်တိုဘာ ၂၅ မှ ၂၇ အတွင်း တိုကျိုမြို့၌ ရောက်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး ဖူဂျီတောင် ဆွေးနွေးပွဲဟု လူသိများသော အမေရိကန်-ဂျပန် စီးပွားရေး/မူဝါဒ ဆွေးနွေးပွဲ ကိုတက်ရောက်ကာ မူဝါဒရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူများ နှင့်အတူ အင်ဒို-ပစိဖိတ် ဒေသအတွင်း အရေးကြီးကိစ္စရပ်များအနက်မှ ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၉ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။ ။ ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) တွင်ပို့ချသော ပထမဆုံးအကြိမ် ကလေးနှင့်ကြီးကောင်ဝင်အရွယ် စိတ်ရောဂါကုသရေး သင်တန်းမှ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသား ၁၀ ဦး ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း သင်တန်းပြီးဆုံးသွားသည့်အတွက် အမေရိကန် သံရုံးက ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ရပါသည်။ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသား ၁၀ ဦးသည် အမေရိကန်ဖူးလ်ဘရိုက်ပညာရှင် ဂျော့ချ်စတီးဝပ် ရေးဆွဲပို့ချသော ခုနစ်လခွဲကြာ သင်တန်းကိုတက်ရောက်ပြီးဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာစတီးဝပ်သည် ယခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လက်တွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဖူးလ်ဘရိုက်ပညာရှင် ခုနစ်ဦး အတွင်းမှ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ဖူးလ်ဘရိုက်ပညာရှင် ဂျော့ခ်ျစတီးဝပ်သည် ယခုနှစ်အစောပိုင်းက ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံး ဖြစ်သော ကလေးနှင့်ကြီးကောင်ဝင်ချိန်အရွယ် စိတ်ရောဂါကုသမှုဆိုင်ရာ ပထမဆုံး သင်တန်းတစ်ခုကို ရေးဆွဲကာ ဦးဆောင် ပို့ချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖူးလ်ဘရိုက်အစီအစဉ်ကို ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၉ ရန်ကုန်။ ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအပါ်မှီခိုမှုကြောင့် လူမှုအသိုက်အဝန်းများ ရင်ဆိုင်ရုန်းကန်ရသည့် ဇာတ်ကြောင်းများကို ပြောပြထားသည့် “မျှော်လင့်ချက်တို့အဆုံးမသတ်နဲ့” တေးသီချင်းကို အမေရိကန်သံရုံးသည် Full Stop လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ မြန်မာအနုပညာရှင် ၁၂ ဦးတို့နှင့် ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဤတေးသီချင်းကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပိုမိုကျန်းမာသော လူမှုအသိုက်အဝန်းများ ဖြစ်ပေါ်စေရေး ကူညီဆောင်ရွက်နေသည့် လူမှုကွန်ရက် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည့် ၅၂၈-မူးယစ်ဆေးနှင့် မိသားစုအဖွဲ့က မြှင့်တင်ပါသည်။ ၅၂၈-မူးယစ်ဆေးနှင့်မိသားစု အဖွဲ့သည် မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ လူမှုအသိုက်အဝန်းများကို အကူအညီပေးနိုင်ပြီး အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ/ အေအိုင်ဒီအက်စ် ကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန် နည်းလမ်းများ ရှာဖွေရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် သတင်းအချက် အလက်များကို မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များအား ပံ့ပိုးပေးနေသော အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ...	Read More»
မီဒီယာများသို့အသိပေးချက် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရုံး စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၉ လက်ထောက်နိုင်ခြားရေးဝန်ကြီး မရီးရွိုက်စ် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်မြန်မာနိုင်ငံသို့သွားရောက်ခြင်း ပညာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုရေးရာ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မရီးရွိုက်စ်သည် ၂၀၁၉ အရှေ့တောင်အာရှ လူငယ်ခေါင်းဆောင် အစီအစဉ် (ဝိုင်ဆီးလီ) ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ရန်၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရေး သံအမတ်ကြီးများရန်ပုံငွေ အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည့် စီမံကိန်းတစ်ခုသို့ သွားရောက် လေ့လာရန်နှင့် ရန်ကုန်အမေရိကန်စင်တာ၌ကျင်းပမည့် အခမ်းအနားတစ်ခုကို တက်ရောက်ရန်အတွက် စက်တင်ဘာ ၂၇ မှ အောက်တိုဘာ ၄ ရက်အထိ ထိုင်းနိုင်ံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသည် အစိုးရတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အခမ်းအနားတက်ရောက်သူများ၊ ပညာရှင်များ၊ လူငယ်ခေါင်းဆောင်များ၊ စီးပွားရေးထိပ်သီးပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သံတမန်များနှင့်တွေ့ဆုံ၍ မိမိတို့၏ ဒေသတွင်း အဓွန့်ရှည်တည်တံ့သော မိတ်ဖက်လက်တွဲမှုအကြောင်းကို မီးမောင်းထိုးပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း လက်ထောက်နိုင်ငံခြား‌ရေးဝန်ကြီးရွိုက်စ်သည် ၂၀၁၉ ဝိုင်ဆီးလီ ထိပ်သီး ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် စက်တင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၉ မြန်မာ့ဖရဲသခွားမွှေးတောင်သူများအား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ကူညီပံ့ပိုးခြင်း နေပြည်တော်။ ။ မြန်မာဖရဲသခွားမွှေးကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဖော်ဆောင်နေကြသော အမေရိကန်နှင့် မြန်မာ စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များသည် ယနေ့ကျင်းပသော #MelonNext အခမ်းအနားတွင်တွေ့ဆုံ၍ မြန်မာ့ဖရဲ သခွားမွှေးကဏ္ဍ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက် မဟာဗျူဟာများကို ဆွေးနွေးကြသည်။ ယင်းအခမ်းအနားကို မြန်မာနိုင်ငံ သစ်သီးဝလံ၊ ပန်းမန်နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်းနှင့် ယူအက်စ်အေ့ဒ်၏ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ကုန်စည်တန်ဖိုးမြှင့်ကွင်းဆက်စီမံကိန်းတို့က ပူးပေါင်းကျင်းပခြင်း ဖြစ်သည်။ ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်အဖွဲ့ ဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ တောင်သူများနှင့် မြန်မာ့ဖရဲသခွားမွှေး ကုန်စည် တန်ဖိုးမြှင့်ကွင်းဆက်စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်ကြသူများက မြန်မာနိုင်ငံသစ်သီးဝလံ၊ ပန်းမန်နှင့် ဟင်းသီး ဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်းသို့ ပေးအပ်သည့် ယူအက်စ်အေ့ဒ်၏ စီမံကိန်းအကျိုး သက်ရောက်မှုများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဖရဲသခွားမွှေးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏အဓိကကျသော ပို့ကုန်သစ်သီးဝလံများဖြစ်ပြီး ...	Read More»
အချက်အအလက်များ ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် စက်တင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၉ ယူအက်အေ့ဒ် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးမူဝါဒစီမံကိန်းမှ အဓိကတွေ့ရှိချက်များ (၂၀၁၄–၂၀၁၉) ယခုအခါသည် မြန်မာနိုင်ငံကျေးလက်ဒေသအတွင်း သိသာစွာပြောင်းလဲလာသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါတွေ့ရှိချက်များသည်သိသာထင်ရှားသောတွေ့ရှိချက်များဖြစ်သည် – (၁) အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများလက်လှမ်းမီရရှိမှုကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်က စ၍ တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့သည်။ (၂) ကျေးလက်ဒေသအတွင်း သွားရေးလာရေးတိုးတက်လျက်ရှိသည်။ လမ်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ တိုးပွားလာသည့်အတွက် ကျေးရွာများနှင့် နီးစပ်ရာ မြို့များသို့သွားလာမှုသည် လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်အတွင်း သုံးဆနှင့်အထက် ပိုမိုများပြားလာခဲ့သည်။ (၃) ကျေးလက်ဒေသအတွင်း ချေးငွေချေးယူသည်ပုံစံများ တရားဝင်ဖြစ်လာပြီး ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ရှိလာခဲ့သည်။ တရားဝင်မဟုတ်သော ငွေချေးယူမှုများအတွက်အတိုးနှုန်းများ သိသိသာသာ လျော့ကျ လာခဲ့သည်။ (၄) ကျေးလက်ဒေသ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အရေအတွက် လျင်မြန်စွာတိုးပွားလာပြီး တည်ထောင်မှုနှုန်း တိုးလာကာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအပြင် ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် စက်တင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၉ မြန်မာနိုင်ငံကျေးလက်ဒေသစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအသွင်ကူးပြောင်းမှုကို အမေရိကန်နိုင်ငံက ကူညီခြင်း ရန်ကုန် – မြန်မာနိုင်ငံကျေးလက်ဒေသ စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော သိသာသည့်ပြောင်းလဲမှုများမှ မြန်မာတောင်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များက မည်သို့သော အကျိုးကျေးဇူများရရှိနေပါသနည်း။ ဤသည်မှာ အမေရိကန်နှင့် မြန်မာသုတေသနပညာရှင်များ၊ မြန်မာအစိုးရမူဝါဒချမှတ်သူများနှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသူများ တစ်ရက်တာပြုလုပ်သည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွင်း အဓိကမေးကြသည့်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်တွင်ပြုလုပ်သော ယင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး စကော့မာစီရယ်က စက်တင်ဘာ ၂၆ရက်တွင် တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ သူက “မြန်မာ့စီးပွားရေး အပြောင်းအလဲနဲ့ ဒီမိုကရေစီသို့ အသွင်ကူးပြောင်းမှုတွေကို အမေရိကန်နိုင်ငံက တစိုက်မတ်မတ် အားပေးကူညီ နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဒီအပြောင်းအလဲဆိုတာက စိုက်ပျိုးကဏ္ဍကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အကူအညီပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးဟာ ကျေးလက်နေပြည်သူ ၇၀ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရဲ့ အသက်မွေး ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် စက်တင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၉ အိမ်ဖြူတော်နှင့်အတူ စီးပွားရေးကဏ္ဍအတွင်း အမျိုးသမီးများ၏ပါဝင်မှု မြှင့်တင်ရေးအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့နှင့်အတူ မြန်မာသစ်သီးဝလံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုယ်စားလှယ်ပူးပေါင်းပါဝင် ရန်ကုန်။ ။ အိမ်ဖြူတော်က ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် အမျိုးသမီးများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် သာယာဝပြောရေး ခြေလှမ်းသစ်အစီအစဉ် (W-GDP) ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအရ မြန်မာနိုင်ငံ သစ်သီးဝလံ၊ ပန်းမန်နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် တင်ပို့ရောင်းချသူများ အသင်းကိုယ်စားပြုသူ ဒေါ်စန္ဒာမျိုးသည် နိုင်ငံပေါင်း ၁၈ နိုင်ငံမှ အမျိုးသားတစ်ဦး ပါဝင်သော အမျိုးသမီးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူ ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ရောက်ရှိနေပါသည်။ “မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာ အမျိုးသမီးတွေမရှိမဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ အစားအသောက် ကဏ္ဍအပေါ် အခြေခံနေပါတယ်” ဟုဒေါ်စန္ဒာမျိုးကပြောပါသည်။ “စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ အမျိုးသမီးတွေ ပိုမိုပါဝင်ခြင်းအားဖြင့် လူအဖွဲ့အစည်းအတွက်လည်း ပိုပြီးတည်ငြိမ်မှုရလာပါတယ်။ အားလုံးအတူတကွ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့တတွေ ...	Read More»
ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် စက်တင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၉ စိုက်ပျိုးရေးဝင်ငွေနှင့်အစာအာဟာရကဏ္ဍတိုးတက်ရေးအတွက် အမေရိကန်နှင့်မြန်မာတက္ကသိုလ်မှ ကျွမ်းကျင်သူများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း နေပြည်တော်။ ။ အမေရိကန်အစိုးရအစီအစဉ်တစ်ခုသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသ စီးပွားရေးကဏ္ဍအတွင်း ဆက်လက်၍ ပြောင်းလဲဖော်ဆောင်လျက်ရှိသော ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည့် သိရှိနားလည်မှုများကတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တောင်သူလယ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များကို အကူအညီပေးလျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ၇၀ ရာခိုင် နှုန်းသော အိမ်ထောင်စုများသည် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေးက တစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် လုပ်အားခများက တစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်း လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကို အစာအာဟာရအဖြစ်ရော ဝင်ငွေအရင်းအမြစ် တစ်ခုအနေဖြင့်ပါ မှီခိုအားထားနေရပါသည်။ ကျေးလက်ဒေသစီးပွားရေးကဏ္ဍ မည်သို့ ပြောင်းလဲနေသည့်အကြောင်း သိရှိနားလည်ခြင်းသည် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအလုပ် လုပ်ကိုင်ကြသော အိမ်ထောင်စုများ အတွက် အစာအာဟာရနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော မူဝါဒများနှင့် အစီအမံများ ချမှတ်ဖော်ဆောင်ရာတွင် မြန်မာအစိုးရအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ သာဓကအနေဖြင့် ...	Read More»
ကိုလြမ္းေဇာင္း၊ ေဒၚနန္ပူႏွင့္ ကိုေဇာ္ဂ်တ္တို႔ကိုျပစ္ဒဏ္ခ်ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာေၾကညာခ်က္ ၂၀၁၈၊ ဒီဇင္ဘာ ၉
ယမန္ေန႔ကျမစ္ႀကီးနားတြင္ ကိုလြမ္းေဇာင္း၊ ေဒၚနန္ပူႏွင့္ ကိုေဇာ္ဂ်တ္တို႔ကို အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ ခ်မွတ္လိုက္သည့္အတြက္ မိမိတုိ႔ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။ ယင္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖရွာေရးႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားအဆုံးသတ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ပဋိပကၡေၾကာင့္ဒုကၡေရာက္ေနၾကသူမ်ားအတြက္လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ားရရွိေရးျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစိီစနစ္တစ္ခုတြင္ ဤသုိ႔ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးသည္ ခ်ီးမြမ္းထိုက္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး တရားစြဲရန္မဟုတ္ေပ။ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျပန္လည္းစဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကုိ မိမိတို႔ တိုက္တြန္းပါသည္။	Read More»
By U.S. Mission Burma | 8 ဒီဇင်ဘာ, 2018 | Categories: Uncategorized
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား (Women of Change) ကုိ အေမရိကန္သံရုံးက ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ျခင္း
မတ္ ၂၂၊ ၂၀၁၈။ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ — အေမရိကန္သံရုံးက ႏွစ္စဥ္ခ်ီးျမွင့္ေသာ Women of Change ဆုရရွ္ိသူ သုံးဦးကုိ သံအမတ္ႀကီးမာစီရယ္လ္က ယေန႔ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူအားလုံး၏ အခြင့္အေရး ပုိုမုိတုိးတက္ေစေရးႏွင့္ ဤႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လူေနမႈဘဝမ်ားအတြင္းက အမ်ဳိးသမီးတ႔၏ို အခန္းက႑အေပၚထားရိွသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ကတိကဝတ္ကုိ ထင္ဟပ္ေစေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ဤဆုျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ “ျပည္သူလူထုရဲ႕ လူေနမႈဘဝေတြ ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ဖုိ႔နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ပုိမုိတုိးတက္ေစဖုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက ျပည္သူေတြကုိ အားေပးကူညီဖုိ႔အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါတယ္။ ဒီ Women of Change Award ဆု ေပးအပ္တယ္ဆုိတာ ျမန္မာႏုိင္ငံက အမ်ဳိးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာေတြထဲကမွ ထူးထူးျခားျခား ေဆာင္ရြက္တာေေတကြ ို အသိအမွတ္ျပဳတ့ဲ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္” ...	Read More»
By U.S. Mission Burma | 22 မတ်, 2018 | Categories: Uncategorized
မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံးတို႔ တစ္နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ယေန႔ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းကုိ မိမိတို႔ႀကဳိဆုိပါသည္။ ဤသုိ႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးရွည္အတြက္ ေျခလွမ္းမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္အေၾကာင္းကုိလည္း မိမိတုိ႔အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီး ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလုံးအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆက္လက္ေရွ႕တုိး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လူမႈအသုိက္အဝန္းအားလုံး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ရပ္ ဖန္တီးႏုိင္လိမ့္မည္ဟုလည္း မိမိတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။	Read More»
စုံစမ္းေထာက္လွမ္း သတင္းေထာက္မ်ားအေနႏွင့္ သူတုိ႔အလုပ္ကုိ သူတုိ႔လုပ္ၾကေသာ ကုိဝလုံးႏွင့္ ကုိေက်ာ္စုိးဦးတုိ႔မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၄၂ ရက္က ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရပါသည္။ အဆုိပါသတင္းေထာက္မ်ားမွာ – အနည္းဆုံးအေနႏွင့္ – အာမခံပင္မရေသးသည့္အတြက္ မိမိတုိ႔ စိတ္ပ်က္မိပါသည္။ ၎တုိ႔ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွာ လုံးဝသမားရုိးက်မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း သတင္းလြတ္လပ္မႈကုိ ထိခုိက္ေစပါသည္။ အဆုိပါ သတင္းေထာက္မ်ားအား လြွတ္ေပးရန္ မိမိတုိ႔ ထပ္မံေတာင္းဆုိပါသည္။ သုိ႔မွသာ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆုံစည္း၍ သူတုိ႔အလုပ္ သူတုိ႔ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။	Read More»
ယမန္ေန႔ညက ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ သတင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္သံရုံးက ဝမ္းနည္းမိေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိၿပီး ယင္းျဖစ္ရပ္တြင္ အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ရသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ထပ္တူ ဝမ္းနည္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါေၾကာင္းအပါအဝင္ ထုိအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ထိခုိက္ခံစားခဲ့ရသည္အတြက္ မ်ားစြာစုိးရိမ္မိေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာၾကားလုိပါသည္။ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈကုိေလးစားသည္ႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္သည္ မည္သည့္ဒီမုိကေရစီစနစ္၌မဆုိ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤေၾကကြဲဖြယ္ရာျဖစ္ရပ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔မည္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာသည္ကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာနားလည္ၿပီး ေနာင္တြင္ ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ေနာက္ထပ္အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္မည္ဟု မိမိတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။	Read More»
၂၀၁၈၊ ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရိုက္တာသတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကုိဝလုံးႏွင့္ ကုိေက်ာ္စုိးဦးတုိ႔အား ႏုိင္္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒျဖင့္ ဆက္လက္တရားစြဲဆုိရန္ ယေန႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္လုိက္သည့္အေပၚ မိမိတုိ႔စိတ္ပ်က္မိပါသည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္ထြန္းကားေစရန္မွာ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ သူတုိ႔အလုပ္သူတုိ႔လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကုိ အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးပါရန္မိမိတုိ႔ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။	Read More»
၂၀၁၈၊ ဇန္နဝါရီ ၈ ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္က ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းအတြင္း ျမန္မာလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ကုိ အာရ္ကန္ ရုိဟင္ဂ်ာ ကယ္တင္ေရးတပ္မေတာ္ (ARSA) က တုိက္ခုိက္မႈအေပၚ မိမိတုိ႔ ရႈတ္ခ်ပါသည္။ ယင္းတုိက္ခုိက္ခံရမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသြားၾကသူမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါသည္။ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရး ပုိမုိအားနည္းမႈကုိသာ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလုံးတုိ႔၏ ေျပာဆုိ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသူမ်ား ၎တုိ႔၏ မူရင္းအရပ္ေဒသမ်ားသုိ႔ လုံလုံၿခဳံၿခဳံႏွင့္ ၎တုိ႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ျပန္လာႏုိင္ေသာ အေျခအေနကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျဖစ္ေစလုိေၾကာင္း မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ဆက္လက္ တုိက္တြန္းပါသည္။ ###	Read More»
့ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးေန႔ အတြက္ အေမရိကန္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာ
အေဆြေတာ္သမၼတႀကီး ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္၌ က်ေရာက္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အတြက္ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းပါေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားက ေျပာၾကားအပ္ပါသည္။ အေဆြေတာ္၏ႏုိင္ငံေအာင္ျမင္မႈ အဓြန္႔ရွည္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရးတုိ႔အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားက အတည္ျပဳေထာက္ခံခဲ့ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္စံတန္ဖုိးမွာ အဓိကအေရးပါလ်က္ရွိေနေသးပါသည္။ ဒီမုိကရက္တစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ မိတ္ေဆြအေနႏွင့္ေရာ လက္တြဲဖက္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ပါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္ရွိေနပါမည္။ ရုိးသားစြာျဖင့္ ေဒၚနယ္ ေဂ် ထရမ့္	Read More»
By U.S. Mission Burma |3ဇန်နဝါရီ, 2018 | Categories: Uncategorized
ရိုက္တာသတင္းေထာင္ႏွစ္ဦး ဖမး္ဆီးခံရျခင္းအေပၚ အေမရိကန္သံရံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္
ရိုက္တာသတင္းဌာနအတြက္ သတင္းလိုက္ေပးသည့္သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးသည္ ယမန္ေန႔ညက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ဖိတ္ၾကားခံရၿပီးေနာက္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသည့္အေၾကာင္း ၾကားသိရသည့္အတြက္ အေမရိကန္သံရုံးအေနျဖင့္မ်ားစြာ စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္မိပါသည္။ ဒီမိုကေရစီတစ္ရပ္ ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ သတင္းေထာက္မ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူေရးသားႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ယခုဖမ္းဆီးမႈမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းျပေပးရန္ႏွင့္ (သက္ဆိုင္သူမ်ားကို) သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ေပးရန္ မိမိတို႔ တိုက္တြန္းပါသည္။	Read More»
By U.S. Mission Burma | 13 ဒီဇင်ဘာ, 2017 | Categories: Exclude All
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေျဖရွင္းရန္ ႀကိိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈအေပါ္ ဝန္ႀကီးေတလာဆန္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္	Read More»
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုု ႏိုုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေတလာဆန္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္	Read More»
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ႐ံုး ႏုိဝင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္စ္ေတလာဆန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ႏုိဝင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ။ သဘာပတိ – ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားနဲ႔ ဂုဏ္သေရရွိ ဧည့္ပရိသတ္အေပါင္းတို႔ မဂၤလာေန႔လယ္ခင္းပါခင္ဗ်ာ။ ဂုဏ္သေရရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတို႔နဲ႔အတူ ဂုဏ္သေရရွိ ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔ ပူးတြဲက်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ႂကြေရာက္ၾကတဲ့အတြက္ အားလံံုးကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔ စတင္မွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီေနာက္မွာ ဂုဏ္သေရရွိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးရက္စ္ေတလာဆန္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဆက္လက္တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးကေနၿပီး မီဒီယာေတြရဲ႕ ေမးခြန္းေတြကို ေျဖၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ႏွစ္ခုကေန ေလးခုအထိ ...	Read More»
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူရုံး ၂၀၁၇၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အကူအညီေပးအပ္မႈ ျပည္သူအားလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရးကိုအေလးထားကာ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ သာယာဝေျပာသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေထာက္ခံပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားျခင္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းကို ေဆာလွ်င္စြာေျဖရွင္းရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို အားျဖည့္ေပးရန္၊ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ေပးရန္၊ နိမ့္ပါးေသာလူထုအတြက္ႀကံ့ႀကံ့ခံႏုိင္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈပုိမုိတိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေဒသခံလူမႈအသိုက္အဝန္းႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းတိုးျမႇင့္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္တို႔ကို အေလးထား၍ အကာအကြယ္ေပးျခင္းတို႔ ပုိမုိအားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ မိမိတုိ႔ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း – လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားကို ထပ္တိုးပမာဏအျဖစ္ ေဒၚလာ ...	Read More»
ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းအေပၚ အေမရိကန္သံရံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ေအာက္တိုဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၇ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အသင္းေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးျဖစ္သူ သင္းအုပ္ဆရာ ဦးေနာင္လတ္ႏွင့္ လူငယ္တာဝန္ခံ ဦးဂမ္ဆိုင္းတို႔ကို မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈပုဒ္မ ၁၇/၁၊ အသေရဖ်က္မႈပုဒ္မ ၅၀၀ႏွင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒတို္႔ျဖင့္ ယေန႔ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းအေပၚ မိမိတို႔က စိုးရိမ္မိပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္မႈမ်ား အေၾကာင္းကို ရန္ကုန္မွ လာေရာက္သတင္းယူေသာ သတင္းေထာက္မ်ားအား သူတို႔ကကူညီအၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၄ တြင္တပ္မေတာ္က သူတို႔ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ကာ တစ္လၾကာ မည္သူႏွင့္မွ် ေတြ႕ခြင့္မရဘဲ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရပါသည္။ သတင္းစာဆရာမ်ားအား ကူညီခဲ့ျခင္းအတြက္ သူတို႔ကို ပစ္မွတ္ထားသည့္အေပၚ မိမိတို႔က စိုးရိမ္ပါသည္။ သူတို႔အား ထိန္းသိမ္းထားစဥ္ ညႇဥ္းပန္းခံရသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚတြင္လည္း စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ရပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ...	Read More»
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ျပည္သူသို႔ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေၾကညာခ်က္ ေအာက္တုိဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၇ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျပည္သူသုိ႔တင္ျပခ်က္ပါ မွတ္ခ်က္စကားမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ အကူအညီလုိအပ္ေနသူ အားလုံးအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ေျဖရွင္းရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာက႑စံု၊ အလႊာစံုမ်ားစြာႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားေရး ဆုိသည့္ သူ၏ကတိကဝတ္ကုိ အေမရိကန္သံရုံးက ႀကဳိဆုိပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းအတြင္းမွ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာသူမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ထြက္ခြာ တိမ္းေရွာင္သြားၾကၿပီး၊ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာသူမ်ားမွာလည္း ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အျခားေနရာေဒသမ်ားသုိ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္၍ ကူညီအားေပးသာြ းရန္ မိမိတ႔ ိုေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။	Read More»
ရခုိင္ေျမာက္ပိုင္း သံတမန္ခရီးစဥ္ ေၾကညာခ်က္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ယေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုုင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။ ကၽြန္ုဳပ္တို႔သည္ ေမာင္းေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ေဒသမ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံ မ်ိဳးစုံႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားမႈေၾကာင့္ ယခုထက္တိုင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈႀကီးစြာ ခံစားေနရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္း အားလုံးမွ လူမ်ားကို အားေပးခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ARSA ၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားအပ္ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လူေျမာက္မ်ားစြာ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈ မ်ားကို ...	Read More»
ၾသဂုတ္ ၂၅၊ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ အေမရိကန္သံရုံးက ႀကဳိဆုိပါသည္။ ေကာ္မရွင္၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္ဝေသာအတုိင္းအတာအထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အျမင္ျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္သြားမည့္ အစုိးရ၏ကတိကဝတ္ကုိ ခ်ီးက်ဴးပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ရႈပ္ေထြးလွေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အစုိးရ၏ ႀကဳိးစားအားထုတ္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္၍ အားေပးကူညီသြားရန္ မိမိတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။	Read More»
ၾသဂုတ္ ၂၅၊ ၂၀၁၇ ညကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လုံၿခဳံေရးစခန္းမ်ား တုိက္ခုိက္ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရႈတ္ခ်ၿပီး အသက္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲရပါေၾကာင္း မိမိတုိ႔ ေျပာၾကားလုိပါသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ လက္ရဖမ္းဆီး မိေရးႏွင့္ ေနာက္ထပ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေရးအတြက္ အစုိးရႏွင့္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း မိမိတုိ႔ နားလည္အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ အျပစ္မဲ့ အရပ္သားအားလုံးကုိ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ထုိသုိ႔လက္ရ ဖမ္းဆီးႏုိင္ေရးႏွင့္ ေနာက္ထပ္ အၾကမ္းဖက္မႈ မျဖစ္ပြားေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ မိမိတုိ႔ တုိက္တြန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူမႈအသုိက္အဝန္း အားလုံးအေနႏွင့္ ၎တုိ႔၏အျပဳအမႈ အေျပာအဆုိမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈျပန္လည္ရရွိႏုိင္ေရး အတြက္ ဦးတည္ေစလုိေၾကာင္း ကုိလည္း တုိက္တြန္း ပါသည္။	Read More»
ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ – သံအမတ္ႀကီး စေကာ့မာစီရယ္လ္ႏွင့္ ေခတၱရဲခ်ဳပ္ ရဲမႈးခ်ဳပ္ ေအာင္၀င္းဦးတို႔သည္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရသို႔ အကူအညီေပးေရး သေဘာတူစာခ်ုဳပ္ တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ယခု သေဘာတူညီခ်က္သည္ အေမရိကန္ – ျမန္မာ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးကို ထပ္ေလာင္းအားျဖည့္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ခိုင္မာေစေရး အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အေလးအနက္ထားမႈကိုလည္း ေပၚလြင္ေစပါသည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တရားရံုးမ်ား၊ ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ရဲမ်ားအပါအ၀င္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးက႑မ်ားအား နည္းပညာေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္း၊ ရုပ္၀တၳဳအကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ တရားေရးက်င့္၀တ္ႏွင့္ အမႈတြဲ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုနားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ ယမန္ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေဒၚလာ ၁၁ သန္းေက်ာ္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့တရားေရးက႑ခိုင္မာေစေရးအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ ...	Read More»
ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ — ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ တာဝန္ထမ္းရြက္မည္ဟူေသာ ၎၏ကတိကဝတ္ကုိ ေမလ ၂၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ ၿမဳိ႕၌ ျပဳလုပ္မည့္ အသစ္ ေရာက္ရွိေနေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ၁၅ ဦး၏ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိပြဲအခမ္းအနားျဖင့္ ပိစ္ေကာအဖြဲ႔က ပုိမုိ ေလးနက္ခိုင္မာေစလိုက္ပါၿပီ။ ဤအဖြ႔ဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္ထမ္းရြက္ရန္ ဒုတိယအသုတ္အေနျဖင့္ ေရာက္ရိွခဲ့ေသာအဖြဲ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ပိစ္ေကာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အသစ္မ်ားသည္ ၎တ႔၏ို ေစတနာ့ဝန္ထမ္းတာဝန္ မထမ္းေဆာင္မီကာလအတြင္း သီတင္းပတ္ ဆယ္ပတ္ၾကာ ႀကဳိတင္၍ ျမန္မာဘာသာစကား၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ သင္ၾကားေရးစြမ္းရည္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္း လုံၿခဳံေရး ဆုိင္ရာ အႀကဳိသင္တန္းမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ သင္ၾကားေရးႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထုိင္ေရးတုိ႔တြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္အတြက္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာေက်ာင္းသူ၊ ...	Read More»
ယခုလက္ရွိ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္၊ ေတာ္ဝင္လမ္းတြင္ တည္ရွိေသာ ရန္ကုန္အေမရိကန္စင္တာ (American Center Rangoon) သည္ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းႏွင့္ အင္းယားလမ္းေထာင့္တြင္ မၾကာမီဖြင့္လွစ္ေတာ့မည့္ ရန္ကုန္အေမရိကန္စင္တာ (American Center Yangon) အသစ္ မဖြင့္လွစ္မီ အႀကဳိအေနျဖင့္ အမွတ္တံဆိပ္အသစ္တစ္ခုကုိ ထုတ္ေဖာ္အသုံးျပဳသြားပါမည္။ လက္ရွိဖြင့္လွစ္ထားေသာစင္တာကုိ ေနရာအသစ္တြင္ ၂၀၁၇ ေႏွာင္းပုိင္း၌ ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမွတ္တံဆိပ္အသစ္ႏွင့္ အသစ္ေျပာင္းလဲလုိက္္သည့္ ရန္ကုန္အေမရိကန္စင္တာ (American Center Yangon) အမည္သစ္က လက္ရွိစင္တာ၏ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာအေမြအႏွစ္ကုိ သာမက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔ အၾကား နက္ရႈိင္းေသာဆက္ဆံေရးကုိလည္း ထင္ဟပ္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမွတ္တံဆိပ္တြင္ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေနေသာ ျမန္မာ့သမုိင္းဝင္ သေကၤတ ကရဝိတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအလံ၏ အစိတ္အပုိင္းတုိ႔က အေမရိကန္စင္တာရန္ကုန္ (American Center Yangon) က ကုိယ္စားျပဳေသာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ...	Read More»
By U.S. Mission Burma | 1 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ, 2017 | Categories: Uncategorized
အားနည္းထိခုိက္လြယ္ေသာ လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိးရန္အတြက္ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္အား အကူအညီအသစ္မ်ား တုိးျမွင့္ေပးအပ္…
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မၾကာေသးမီကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ခဲ့ရသည့္ ျပည္သူမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိးရန္ အကူအညီအသစ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္အား ေဒၚလာငါးသန္း ($5million) ေပးအပ္ရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖဳိးေရးေအဂ်င္စီ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စားနပ္ရိကၡာရုံးက သေဘာတူညီလုိက္ပါသည္။ ယခုေပးအပ္ေသာအကူအညီသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီလုိအပ္ေနသည့္ လူေပါင္း ၁၇၂,၀၀၀ အတြက္ အသက္ကယ္စားေရရိကၡာ အကူအညီမ်ား ပံ့ပုိးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ ကာလၾကာရွည္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္၍ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္တုိးျမွင့္ျဖစ္ပြားေနမႈေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသည့္ ျပည္သူအေရအတြက္မွာ တုိးပြားလ်က္ရွိၿပီး အေရးေပၚအကူအညီမ်ားလည္း လုိအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ကုလသမဂၢ၏အဆုိအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခန္႔မွန္းေျခ ျပည္သူ ၃၈၃,၅၀၀ ခန္႔မွာ အစားအေသာက္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အကူအညီမ်ား လုိအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ ကာလရွည္ၾကာ ...	Read More»
By U.S. Mission Burma | 25 ဇန်နဝါရီ, 2017 | Categories: Uncategorized
အေမရိကန္ႏွင့္ျမန္မာ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား
ဇန္နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။ ။ ႏွစ္သစ္အတြင္းေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေဆာ္ၾသျခင္းႏွင့္အတူ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးမာစီရယ္လ္သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရရွိလာေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အထိမ္းအမွတ္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတုိ႔၏ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ အတြင္းမွ မိတ္ဖက္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကုိ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ၌ ၎၏ေနအိမ္သုိ႔ ဖိတ္ၾကား ဧည့္ခံခဲ့ပါသည္။ ယင္းအခမ္းအနားသုိ႔ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒါက္တာတင္ထြဋ္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေဆြလင္း၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာက်င္က်င္ဝင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းသုိက္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဂ်ဳံတင္သြင္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မုန္႔လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေကာ္ဖီအသင္း၊ အေမရိကန္ဂ်ဳံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ Winrock International တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ...	Read More»
By U.S. Mission Burma | 13 ဇန်နဝါရီ, 2017 | Categories: Uncategorized
ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံမ်ား၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ (ILO) တို႔သည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ႏွင့္ ၂၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေျခခံအလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈမ်ားကို အားေပးရန္ပဏာမေဆာင္ရြက္မႈေျခလွမ္း အတြက္ ပါဝင္သက္ဆိုင္သူမ်ားဖိုရမ္ကို ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ (ပဏာမေျခလွမ္းအဖြဲ႔) ဤ ပါဝင္သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ဖိုရမ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သံုးပြင့္ဆိုင္မိတ္ဖက္မ်ား၊ အျခားပါဝင္သူအစိုးရမ်ား၊ ILO၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ားအျပင္ အျခားလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား အၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ ဦးစားေပးရမည့္အရာမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမား ေရးရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္၌ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ...	Read More»
ၾသဂုတ္ ၃၁၊ ၂၀၁၆ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေမရိကန္သံရုံး၏ေၾကညာခ်က္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ႀကဳိဆုိလုိက္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးအတြက္ အားလုံးပါဝင္သည့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္တြင္ပါဝင္ရန္ဆႏၵရွိၾကေသာ ညီလာခံ၌္ တက္ေရာက္ၾကသူ အားလုံးကုိလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အတိအလင္းခ်ီးက်ဴးပါသည္။ ဤညီလာခံသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ရပ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံကုိ ဒီမုိကေရစီပုိမုိျပည့္ဝေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ရပ္အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝေလးစားလုိက္နာကာ အားလုံးပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုအတြက္ ပထမေျခလွမ္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးမတူကြဲျပားမႈမ်ားေပါင္းစုံ ေနမႈတုိ႔မွ အင္အားမ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မႈမ်ားကုိ ရယူႏုိင္ရန္ က်ားကုတ္က်ားခဲႀကဳိးစားအားထုတ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဤႀကဳိးစားအားထုတ္မႈမ်ားသည္ ညီလာခံတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ...	Read More»